जीवनमा प्रवेश (१) | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
जीवनमा प्रवेश (१)
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३७४
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, सबै थोकका मुखिया हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सिंहासनबाट आफ्नो शाही शक्ति चलाउनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्माण्ड र सबै थोकमाथि शासन गर्नुहुन्छ, र सारा पृथ्वीमा हामीलाई डोऱ्याउने काममा हुनुहुन्छ। हामी हरेक क्षण उहाँसँग नजिक हुनेछौं, र चुपचाप उहाँको सामु आउनेछौं, एक पल पनि कहिल्यै गुमाउनेछैनौं, र सबै समय हामीसँग सिक्नका लागि पाठहरू हुनेछन्। वरपरको वातावरणदेखि मानिसहरू, घटनाहरू, र विभिन्न वस्तुहरूसम्म सबै थोक, सबै नै उहाँको सिंहासनको अनुमतिद्वारा अस्तित्वमा छन्। कुनै पनि कारणले तिमीहरूको मनमा द्वेष उत्पन्न हुन नदेओ, नत्र परमेश्‍वरले तिमीहरूमाथि अनुग्रह प्रदान गर्नुहुनेछैन। जब-जब रोग-बिमार आइपर्छन्, यो परमेश्‍वरको प्रेम हो, र तीभित्र अवश्य नै उहाँका दयालु अभिप्रायहरू लुकेका हुन्छन्। तेरो शरीर अलिकति कष्टबाट भएर जानुपर्ने हुनसक्‍ने भए तापनि, शैतानका कुनै विचारहरू मनमा नराख्। रोग-बिमारको बीचमा परमेश्‍वरको प्रशंसा गर् र तेरो प्रशंसाको क्रममा परमेश्‍वरसँग आनन्द गर्। बिमारीपनको बीचमा निराश नबन्, बारम्‍बार खोजी गर् अनि हरेस नखा, र परमेश्‍वरले तँलाई उहाँको ज्योति दिनुहुनेछ। अय्यूबको विश्‍वास कस्तो थियो? सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर महाशक्तिशाली वैद्य हुनुहुन्छ! रोग-बिमारमा बास गर्नु भनेको बिरामी हुनु हो, तर आत्मामा जिउनु भनेको निको हुनु हो। जबसम्‍म तँसँग एक मुठ्ठी सास बाँकी हुन्छ, तबसम्‍म परमेश्‍वरले तँलाई मर्न दिनुहुनेछैन।
हामीभित्रै ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएको जीवन छ। निस्सन्देह, हामीमा परमेश्‍वरको उपस्थितिमा विश्वासको कमी हुन्छ: परमेश्‍वरले हामीभित्र साँचो विश्वास राख्नुहुन्छ। परमेश्‍वरको वचन साँच्चै मिठो छ! परमेश्‍वरको वचन शक्तिशाली औषधी हो! यसले दियाबलसहरू र शैतानलाई लज्जित बनाउँछ! परमेश्‍वरको वचन बुझेमा हामीलाई साथ मिल्छ। उहाँको वचनले हाम्रो हृदयलाई मुक्ति दिन द्रुत गतिमा कार्य गर्छ! यसले सबै थोकको सन्देह मेटाउँछ र सबै थोकलाई शान्ति दिन्छ। विश्वास भनेको एउटै मुढाको पुलजस्तो हुन्छ: दयनीय रूपले जीवनमा अलझिरहेका मानिसहरूलाई त्यो पार गर्न कठिनाइ हुनेछ, तर आफूलाई बलिदान दिन तयार रहेकाहरूले नडगमगाइ र निष्फिक्रीसित त्यसलाई पार गर्न सक्छन्। यदि मानिसले आफ्नो मनमा डरपोक र भयका विचारहरू राख्छ भने शैतानले उनीहरूलाई मूर्ख बनाएको हुन्छ, हामी विश्वासको पुल पार गरी परमेश्‍वरमा प्रवेश गरौंला भनी त्यो डराएको हुन्छ। शैतानले हामीकहाँ त्यसका विचारहरू पठाउने हरसम्भव कोसिस गरिरहेको हुन्छ। परमेश्‍वरले हामीलाई उहाँको ज्योतिले उज्यालो पारून् भनी हरक्षण उहाँसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, हामीभित्रबाट शैतानको विष निकाल्नको लागि हामी हरक्षण परमेश्‍वरमा निर्भर हुनुपर्छ, हाम्रो आत्माभित्र हामीले परमेश्‍वरको नजिक कसरी आउने भनी हामीले हरपल अभ्यास गर्नुपर्छ, र हामीले परमेश्‍वरलाई हाम्रो सम्पूर्ण अस्तित्वमाथि प्रभुत्व कायम गर्न दिनुपर्छ।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, प्रारम्‍भमा ख्रीष्‍टका वाणीहरूको “अध्याय ६” बाट
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३७५
प्रत्येक पटक कुनै समस्याको सामना गर्नु पर्दा मानिसहरूले पहिले के गर्नुपर्दछ? तिनीहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ; प्रार्थना पहिले आउँछ। प्रार्थनाले तँ धर्मी छस्, तैँले हृदयमा परमेश्‍वरको भय मान्‍न थालेको छस्, तैँले परमेश्‍वरलाई खोज्न जानेको छस्, तैंले उहाँलाई आफ्नो हृदयमा स्थान दिएको छस्, तँ एक धार्मिक इसाई होस् भन्ने देखाउँछ। धेरै जना पाको उमेरका विश्‍वासीहरू हरेक दिन एउटै समयमा प्रार्थना गर्न घुँडा टेक्छन्, कहिलेकहीँ यति लामो समयसम्म घुँडा टेक्छन् कि तिनीहरू उठ्न समेत सक्दैनन्। यो विधि हो कि होइन, वा उनीहरूले यसबाट केही प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने बारेमा कुरा नगरौं; हामी यति मात्र भनौं कि यी पाका दाजु-दिदीहरू विशेष रूपले धार्मिक छन्, तिमी जवानहरूभन्दा धेरै उत्तम र लगनशील छन्। समस्याको सामना गर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने कार्य भनेको प्रार्थना हो। प्रार्थना गर्नु भनेको बेइमानीसाथ गन्थन गर्नु होइन; त्यसले कुनै पनि समस्या समाधान गर्दैन। तैँले आठ वा दस पटक प्रार्थना गर्न सक्छस् तर केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनस्, तर निराश नबन्—तैंले अझै पनि प्रार्थना गर्नैपर्छ। जब तँलाई केही हुन्छ, पहिले प्रार्थना गर्, पहिले परमेश्‍वरलाई भन्, परमेश्‍वरलाई अधिकार गर्न दे, परमेश्‍वरले तँलाई सहायता गरून्, परमेश्‍वरले तँलाई डोऱ्याऊन्, र तँलाई बाटो देखाऊन्। यसले के प्रमाणित गर्छ भने, तैंले परमेश्‍वरलाई पहिलो स्थानमा राखेको छस्, उहाँ तेरो हृदयमा हुनुहुन्छ। यदि तैंले कुनै समस्याको सामना गर्नु पर्दा तैँले प्रतिरोधको अनुभव गर्छस्, रिसाउँछस्, क्रोधले उत्तेजित हुन्छस् भने—यदि कुनै कुरा हुनुभन्दा पहिले तँ नकारात्मक हुन्छस् भने—त्यो परमेश्‍वर तेरो हृदयमा हुनुहुन्न भन्ने कुराको प्रकटीकरण हो। वास्तविक जीवनमा, जब तेरो जीवनमा कुनै घटना घट्छ तब तैंले प्रार्थना गर्नुपर्छ। सुरुमा, तैंले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुपर्छ—यो महत्त्वपूर्ण छ। प्रार्थनाले परमेश्‍वरको उपस्थितिमा उहाँप्रतिको तेरो आचरण कस्तो हुन्छ त्यसलाई प्रकट गर्दछ। यदि परमेश्‍वर तेरो हृदयमा हुनुहुन्न भने तैँले यसो गर्नेथिइनस्। कतिपय मानिसहरू भन्छन्, “म प्रार्थना गर्छु, तरै पनि परमेश्‍वरले मलाई अन्तर्दृष्टि दिनुहुन्न!” तैंले त्यसो भन्नु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले प्रार्थना गर्ने तेरा अभिप्रायहरू सही छन् कि छैनन् त्यो हेर्; यदि तैँले साँच्चै सत्यताको खोजी गर्छस् र धेरै पटक परमेश्‍वरलाई प्रार्थना गर्छस् भने उहाँले तँलाई कतिपय कुराको बारेमा अन्तर्दृष्टि दिन सक्नुहुन्छ, यसरी तैँले बुझ्न सक्छस्—एक शब्दमा भन्दा, परमेश्‍वरले तँलाई बुझाउनुहुन्छ। परमेश्‍वरको ज्ञानविना, तैँले आफ्नै बुद्धिले बुझ्न सक्दैनस्: तँमा बुझ्ने क्षमताको कमी छ, तँसँग यसलाई बुझ्‍ने दिमाग छैन, र यसलाई मानिसको बुद्धिले प्राप्त गर्न सकिँदैन। जब तैँले बुझ्छस्, के त्यो बुझाइ तेरो आफ्नै दिमागबाट आएको हुन्छ? यदि तैँले पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि दिनुभएको छैन भने, तैंले जसलाई सोधे पनि कसैले आत्माको कामको अर्थ के हो वा परमेश्‍वर भनेको के हो सो जान्‍नेछैन; जब परमेश्‍वर स्वयम्‌ले अर्थ बताउनुहुन्छ तब मात्र तैँले जान्‍नेछस्। यसैले तँलाई केही भइपरिआउँदा तैंले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा भनेको प्रार्थना हो। प्रार्थनाका निम्ति खोजी गर्ने आचरणसहित तलास गर्नुपर्छ, आफ्ना सोचाइहरू, मानका विचारहरू र आचरण प्रकट गर्नुपर्छ—यसमा यी कुरा समावेश हुनुपर्छ। झारा मात्रै टारेर यसले कुनै प्रभाव पर्दैन, त्यसैले तैंले अन्तर्दृष्टि नपाउँदा पवित्र आत्मालाई दोष नदे। परमेश्‍वरमाथिको कतिपय मानिसहरूको विश्‍वासमा तिनीहरूले निरन्तर विश्‍वास त गर्छन्, तर परमेश्‍वर तिनीहरूका ओठमा मात्र हुन्छ भन्‍ने मैले थाहा पाएको छु। परमेश्‍वर उनीहरूको हृदयमा हुँदैन, उनीहरूले आत्माको कामलाई इन्कार गर्छन्, र उनीहरूले प्रार्थनालाई पनि इन्कार गर्छन्; उनीहरूले केवल परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्छन्, र त्यस बाहेक अरू केही पनि गर्दैनन्। के यसलाई परमेश्‍वरमाथि विश्‍वास गरेको भनेर भन्न सकिन्छ? उनीहरू तबसम्‍म विश्‍वासमा लागिरहन्छन् जबसम्म परमेश्‍वर तिनीहरूको विश्‍वासबाट पूरै हराउनुहुन्छ। विशेष रूपमा, त्यस्ता मानिसहरू पनि छन् जसले प्रायजसो सामान्य मामिलाहरूलाई सम्हाल्छन्, र तिनीहरूले अत्यन्तै व्यस्त भएको महसुस गर्छन् र आफ्ना सारा कोसिसहरूमा केही पनि प्राप्त गर्दैनन्। परमेश्‍वरमाथिको आफ्‍नो विश्‍वासमा सही मार्गमा नहिँड्ने मानिसहरूको अवस्था यस्तै हुन्छ। के सही मार्गमा हिँड्नु कडा मेहनत होइन र? धेरै सिद्धान्त बुझेपछि पनि तिनीहरू यो बाटो लिने कार्यमा असफल हुन्छन्, र तिनीहरू पतनतिर लाग्‍ने सम्‍भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण जब तिमीहरूलाई केही हुन्छ, तिमीहरूले प्रार्थना र खोजी गर्ने कार्यमा धेरै समय खर्च गर्नुपर्दछ—तैंले कम्तीमा पनि गर्नुपर्ने कुरा यही हो। परमेश्‍वरको इच्छा र पवित्र आत्माको अभिप्रायलाई कसरी खोजी गर्ने भनेर सिक्नु नै मुख्य कुरा हो। यदि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने मानिसहरूले यस प्रकारको अनुभव र अभ्यास गर्न सक्दैनन् भने, तिनीहरूले केही पनि हासिल गर्नेछैनन् र तिनीहरूको विश्‍वास व्यर्थ हुनेछ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सबै थोकलाई सत्यताको आँखाले हेर” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३७६
व्यक्तिले जति धेरै सत्यतालाई बुझे पनि, व्यक्तिले जति नै धेरै कर्तव्य पूरा गरेको भए पनि, ती कर्तव्यहरू पूरा गर्ने क्रममा उसले जति धेरै अनुभव प्राप्त गरेको भए पनि, व्यक्तिको कद जति ठूलो वा सानो भए पनि, वा व्यक्ति जस्तो-सुकै वातावरणमा भए पनि, व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई आदर नगरी र उसले गर्ने सबै कुरामा उहाँमा भरोसा नगरी केही पनि गर्न सक्दैन। यो सबैभन्दा ठूलो बुद्धि हो। म किन यसलाई सबैभन्दा ठूलो बुद्धि हो भनी भन्छु? यदि कसैले धेरै सत्यता बुझेको छ भने पनि, यदि उसले परमेश्‍वरमा भरोसा गर्दैन भने के त्यस कामद्वारा केही हुनेछ र? केही मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको केही समयपछि सत्यताहरू बुझेका हुन्छन् र केही परीक्षाहरूबाट भएर गएका हुन्छन्। उनीहरूले केही व्यावहारिक अनुभव प्राप्त गरेका हुन सक्छन्, तर उनीहरूले परमेश्‍वरमा भरोसा राख्‍न जान्दैनन्, न त उनीहरूले उहाँलाई कसरी आदरको साथ हेर्ने र उहाँमा कसरी भरोसा राख्ने भनेर नै जानेका हुन्छन्। के त्यस्ता मानिसहरूसँग बुद्धि हुन्छ? उनीहरू सबैभन्दा मूर्ख मानिसहरू हुन्, र आफैलाई बुद्धिमान् ठान्नेहरू हुन्; उनीहरू परमेश्‍वरसित डराउँदैनन् र दुष्टतादेखि टाढा बस्दैनन्। कतिपय मानिसहरू भन्छन्, “मैले धेरै सत्यताहरूलाई बुझेको छु र सत्यता वास्तविकता धारण गरेको छु। एउटा सिद्धान्तअनुसार काम गरे भइहाल्छ। म परमेश्‍वरप्रति बफादार छु, र उहाँको नजिक कसरी जानुपर्छ सो म जान्दछु। के म सत्यतामा निर्भर हुनु पर्‍याप्त छैन र?” धर्मसिद्धान्तको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने “सत्यतामा भर पर्नु” ले राम्रोसँग काम गर्दछ। तापनि, त्यस्ता समय र परिस्थितिहरू धेरै हुन्छन् जहाँ मानिसहरूले सत्यता के हो वा सत्यता सिद्धान्तहरू के-के हुन् भनी जान्दैनन्। व्यावहारिक अनुभव भएकाहरू सबैले यो जान्दछन्। उदाहरणको लागि, जब तैँले कुनै समस्याको सामना गर्छस्, त्यस बेला तँलाई त्यो समस्यासँग प्रासंगिक सत्यतालाई कसरी अभ्यास वा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्‍ने थाहा नहुन सक्छ। यस्तो बेला तैँले के गर्नुपर्छ? तँसित व्यावहारिक अनुभव जति धेरै भए पनि, सबै परिस्थितिहरूमा तँसित सत्यता नहुन सक्छ। तैंले जति धेरै वर्षदेखि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको भए पनि, तैंले जति धेरै कुराको अनुभव गरेको भए पनि, र तैंले काटछाँट, निराकरण वा अनुशासनको जति धेरै अनुभव गरेको भए पनि, के तँ सत्यताको स्रोत होस्? कतिपय मानिसहरू भन्छन्, “मलाई वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ भन्‍ने पुस्तकमा भएका प्रसिद्ध वाणीहरू र खण्डहरू सबै कण्ठ छ; मैले परमेश्‍वरमा भरोसा गर्नु वा उहाँको आदर-अपेक्षा गर्नु आवश्यक छैन। जब समय आउँछ, म परमेश्‍वरका यी वचनहरूमा भर परेर नै सफल हुनेछु।” तैंले कण्ठ गरेका वचनहरू स्थिर छन्, तापनि तैंले सामना गर्ने वातावरणहरू साथै तेरा अवस्थाहरू गतिशील छन्। शब्दहरूलाई जस्ताको त्यस्तै बुझ्नु र धेरै आत्मिक धर्मसिद्धान्तहरूको बारेमा कुरा गर्नुलाई सत्यता बुझेको मानिँदैन, त्यसलाई प्रत्येक परिस्थितिमा परमेश्‍वरको इच्छा बुझेको मान्‍ने कुरा त परै जाओस्। यसैले यहाँ सिक्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ छ: त्यो यही हो, कि मानिसहरूले सबै कुरामा परमेश्‍वरमा नै भरोसा गर्नुपर्छ, र त्यसो गरेर उनीहरूले परमेश्‍वरमाथिको निर्भरता हासिल गर्न सक्छन्। परमेश्‍वरमा भरोसा राखेर मात्र उनीहरूले पछ्याउने मार्ग प्राप्त गर्नेछन्। नत्र, तैँले केही कुरा सही र सत्यता सिद्धान्तहरू अनुरूप गर्न सक्छस्, तर यदि तँ परमेश्‍वरमा भर पर्दैनस् भने, तेरा कार्यहरू मानिसका काम मात्र हुन्छन् र ती कार्यहरूले परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्नेछ भन्ने हुँदैन। मानिसहरूमा सत्यको सतही बुझाइ हुने भएकोले, विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्दा उनीहरूले नियमहरू पालना गर्ने अनि उही सत्यता प्रयोग गर्दै दृढता पूर्वक अक्षरहरू र धर्मसिद्धान्तहरूलाई नै अबलम्‍बन गरिरहने सम्‍भावना हुन्छ। के उनीहरूले सत्यता सिद्धान्तहरूसँग आम रूपमा मिल्‍ने गरी धेरै विषयहरूलाई पूरा गर्नसक्‍ने, तर त्यसमा परमेश्‍वरको मार्गनिर्देशन देख्न सकिँदैन, न त पवित्र आत्माको काम नै देख्न सकिन्छ भन्‍ने कुराको सम्‍भावना हुन्छ। यहाँ एउटा गम्भीर समस्या छ, त्यो के हो भने, मानिसहरूले आफ्नो अनुभवमा र तिनीहरूले बुझेका नियमहरूमा र कुनै-कुनै मानवीय कल्पनाहरूमा भर परेर धेरै कुराहरू गर्छन्। उनीहरूले मुस्किलले उत्तम नतिजा प्राप्त गर्न सक्छन्, जुन नतिजा परमेश्‍वरमा भरोसा गर्दै र उहाँलाई प्रार्थना गर्दै उहाँको इच्छा स्पष्ट बुझेपछि, अनि उहाँको काम र अगुवाइमा भर परेपछि आउँछ। यसैकारण म भन्छु, कि सबैभन्दा ठूलो बुद्धि भनेको परमेश्‍वरलाई आदर-अपेक्षा गर्नु र सबै कुरामा उहाँमाथि भर पर्नु हो।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “विश्‍वासीहरूले संसारका खराब प्रचलनहरूद्वारा हेर्दै सुरु गर्नुपर्दछ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३७७
परमेश्‍वर स्वयमको जीवन नै सत्यता हो; यसले उहाँको स्वभाव, उहाँको सार र उहाँमा भएका सबै थोकको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यदि तैँले थोरै अनुभव हुनु नै सत्य धारण गर्नु हो भनी भन्छस् भने, के तैँले परमेश्‍वरको स्वभावको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छस्? तँसँग सत्यताको कुनै एक तत्व वा पक्षको बारेमा केही अनुभव वा ज्योति हुनसक्छ, तर तैँले अरूलाई त्यो सधैँभरि दिन सक्दैनस्, त्यसैले तैँले प्राप्त गरेको यो ज्योति सत्यता होइन; यो एक निश्चित बिन्दु मात्र हो, जहाँ मानिसहरू पुग्न सक्छन्। यो व्यक्तिमा हुनुपर्ने उचित अनुभव र सही बुझाइ मात्र हो: सत्यको केही वास्तविक अनुभव र ज्ञान। यो ज्योति, अन्तर्दृष्टि, र अनुभव सम्‍बन्धी बुझाइले कहिल्यै पनि सत्यको स्थान लिन सक्दैन; यदि सबै मानिसहरूले यो सत्यताको पूर्ण अनुभव गरेका थिए भने पनि, र तिनीहरूका सबै अनुभव सम्‍बन्धी बुझाइहरूलाई एकसाथ जम्‍मा गरे पनि त्यसले अझै पनि सत्यताको स्थान लिन सक्नेछैन। विगतमा भनिएजस्तै, “म यसलाई मानव संसारका लागि एउटा सूत्रको रूपमा जोड्छु: मानिसहरूका माझमा, मलाई प्रेम गर्ने कोही पनि छैन।” सत्यताको अभिव्यक्ति यही हो: जीवनको साँचो सार यही हो। यो सबै थोकहरूभन्दा अति नै गम्भीर छ; यो परमेश्‍वर स्वयम्‌को एक अभिव्यक्ति हो। तैँले यसको अनुभव गरिरहन सक्छस्, र यदि तैँले तीन वर्षसम्म यसको अनुभव गरिस् भने तँसँग यसको सतही बुझाइ हुनेछ; यदि तैँले सात वा आठ वर्षसम्म यसको अनुभव गरिस् भने तैँले यसको अझ धेरै बुझाइ प्राप्त गर्नेछस्—तर तैँले प्राप्त गर्ने कुनै पनि बुझाइले कहिल्यै पनि सत्यको एउटा अभिव्यक्तिको स्थान लिन सक्नेछैन। अर्को व्यक्तिले केही वर्षसम्म यसको अनुभव गरिसकेपछि थोरै बुझाइ प्राप्त गर्न सक्दछ, र फेरि दश वर्षसम्म यसको अनुभव गरेपछि थप बढी गहन बुझाइ प्राप्त गर्न सक्छ, त्यसपछि आजीवन यसको अनुभव गरेपछि थप बढी समझ प्राप्त गर्न सक्छ—तर यदि तिमीहरूले दुवैले प्राप्त गरेका बुझाइलाई जोड्यौ भने पनि—तिमीहरू दुवैमा जति धेरै बुझाइ भए पनि, जति धेरै अनुभव भए पनि, जति धेरै अन्तर्दृष्टि भए पनि, जति धेरै प्रकाश भए पनि, जति नै धेरै उदाहरणहरू भए पनि—ती सबैले पनि सत्यको एउटा अभिव्यक्तिको स्थान लिन सक्दैन। मेरो यो भनाइको अर्थ के हो? मेरो भनाइको अर्थ यो हो कि मानिसको जीवन सधैँ मानिसको जीवन नै हुनेछ, र तेरो बुझाइ सत्यता, परमेश्‍वरका अभिप्रायहरू र उहाँका मापदण्डहरूसित जति नै मिले पनि, त्यसले कहिल्यै पनि सत्यको स्थान लिन सक्दैन। मानिसहरूले सत्यता प्राप्त गरेका छन् भन्नुको अर्थ तिनीहरूमा केही वास्तविकता छ, तिनीहरूले सत्यताका केही बुझाइ प्राप्त गरेका छन्, तिनीहरूले परमेश्‍वरको वचनहरूमा केही वास्तविक प्रवेश पाएका छन्, तिनीहरूले आफूमा केही वास्तविक अनुभव प्राप्त गरेका छन् र तिनीहरू परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वासको सही मार्गमा छन् भन्ने हुन्छ। परमेश्‍वरबाटको एउटा अभिव्यक्ति समेत व्यक्तिको सम्पूर्ण जीवनकालको लागि अनुभव गर्न पर्याप्त हुन्छ; यदि मानिसहरूले धेरै वटा जीवनकालमा वा केही हजार वर्षसम्म यसको अनुभव प्राप्त गरे भने पनि तिनीहरूले एउटा सत्यतालाई पूरै र सम्पूर्ण रूपले अनुभव गर्न सक्नेछैनन्। यदि मानिसहरूले केही सतही वचनहरू मात्र बुझेका छन्, र पनि तिनीहरूले सत्यता प्राप्त गरेको दाबी गर्छन् भने, के त्यो हरप्रकारले र पूर्ण रूपले मूर्खता हुनेछैन र? …
जब मानिसहरूले सत्यतालाई बुझ्छन्, र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा जिउँछन्, तब त्यसले कुन जीवनलाई सङ्केत गर्छ? यसले तिनीहरू कसरी जिउँछन् त्यसलाई तिनीहरूले परमेश्‍वरको वचनको आधारमा जिउँछन् भन्‍ने तिनीहरूको क्षमतालाई सङ्केत गर्दछ; यसको अर्थ तिनीहरूमा परमेश्‍वरका वचनहरूको वास्तविक ज्ञान र सत्यताको वास्तविक बुझाइ छ भन्‍ने हुन्छ। जब मानिसहरूभित्र यो नयाँ जीवन हुन्छ, तिनीहरूको जिउने शैली परमेश्‍वरको वचन, सत्यताको जगमा स्थापित हुन्छ, र तिनीहरू सत्यताको क्षेत्रभित्र जिइरहेका हुन्छन्। मानिसहरूको जीवन भनेको सत्यलाई जान्नु र अनुभव गर्नु सँग नै सम्‍बन्धित हुन्छ, र त्यसलाई जगको रूपमा लिएर त्यो क्षेत्रलाई ननाघ्नु भन्‍ने हुन्छ; सत्यता जीवन प्राप्त गर्ने कुरा गर्दा यही जीवनलाई सङ्केत गरिएको हुन्छ। तैँले सत्यतालाई आफ्नो जीवनको रूपमा लिएर जिउनु भनेको तँभित्र सत्यताको जीवन छ भन्ने हुँदैन, न त जीवनको रूपमा तँसित सत्यता छ भन्दैमा तँ सत्यता बन्छस्, र तेरो आन्तरिक जीवन सत्यको जीवन बन्नेछ भन्ने नै हुन्छ; झन् तँ सत्यता जीवन होस् भन्न त सायदै सकिन्छ। आखिरमा, तेरो जीवन त अझै पनि मानव जीवन नै हुन्छ। यति मात्र हो कि मानिस परमेश्‍वरका वचनहरू अनुसार जिउन सक्छ, सत्यको ज्ञान धारण गर्न सक्छ, र त्यसलाई गहिरो हदसम्म बुझ्न सक्छ; यो समझलाई तँबाट खोस्न सकिँदैन। तैँले यी कुराहरू धेरै असल र मूल्यवान् छन् भन्‍ने महसुस गर्दै अनुभव गर्छस्, र पूर्ण रूपमा बुझ्छस्, र तैँले ती कुरालाई तेरो जीवनको आधारको रूपमा स्वीकार गर्छस्; यसबाहेक, तँ यी कुराहरूमा निर्भर भई जिउने गर्छस्, र त्यसलाई कसैले पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन: यसैले यो तेरो जीवन हो। अर्थात्, तेरो जीवनमा यी कुराहरू मात्र हुन्छन्—सत्यको बुझाइ, अनुभव र ज्ञान—र तैँले जेसुकै गरे पनि, तैँले जिउने तरिकालाई त्यसमा नै आधारित बनाउनेछस्, र तँ यो क्षेत्रदेखि बाहिर जाँदैनस् वा सीमाहरू पार गर्दैनस्; तँमा ठीक यस्तै किसिमको जीवन हुनेछ। परमेश्‍वरको कामको अन्तिम उद्देश्य भनेको मानिसहरूले यस प्रकारको जीवन प्राप्त गरून् भन्‍ने हो। मानिसहरूले सत्यलाई जति नै राम्ररी बुझे पनि तिनीहरूको अस्तित्व अझै पनि मानवताकै हुन्छ, र त्यसलाई परमेश्‍वरको अस्तित्वसँग पटक्कै तुलना गर्न सकिँदैन। तिनीहरूले सत्यको अनुभव निरन्तर गर्दै जाने भएकोले, तिनीहरूले सत्यमा पूर्ण रूपमा जिउन असम्भव हुन्छ; तिनीहरू मानिसहरूले प्राप्त गर्न सक्ने सत्यताको अति सीमित भाग मात्र जिउन सक्छन्। त्यसैले तिनीहरू कसरी परमेश्‍वरमा परिणत हुन सक्छन् र? … यदि तँमा परमेश्‍वरका वचनहरूको थोरै अनुभव छ भने, र तँ आफूमा भएको सत्यको बुझाइ अनुसार जिइरहेको छस् भने, परमेश्‍वरका वचनहरू तेरो जीवन बन्छन्। तापनि, तैँले अझै पनि सत्य नै तेरो जीवन हो वा तैँले व्यक्त गरिरहेका कुराहरू सत्य हुन् भनेर भन्न सक्दैनस्; यदि तेरो विचार त्यस्तो छ भने, तँ गलत छस्। यदि तँसँग सत्यको एउटा पक्षबारे कुनै अनुभव छ भने के त्यो आफैले सत्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ? बिलकुलै सक्दैन। के तैँले सत्यको पूर्ण रूपमा वर्णन गर्न सक्छस्? के तैँले सत्यताबाट परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँको सार पत्ता लगाउन सक्छस्? तैँले त्यसो गर्न सक्दैनस्। प्रत्येक व्यक्तिसँग सत्यको एक पक्ष र एउटा क्षेत्रको मात्र अनुभव हुन्छ; तेरो सीमित क्षेत्रभित्र यसलाई अनुभव गरेर तैँले सत्यको सबै अनगन्ती पक्षहरूलाई छुन सक्दैनस्। के मानिसहरू सत्यताको वास्तविक अर्थअनुसार जिउन सक्छन्? तेरो थोरै अनुभवको परिमाण कति हुन्छ? समुद्र किनारको बालुवाको एउटा कण जति; समुद्रको पानीको एक थोपा जति। त्यसकारण तैँले आफ्ना अनुभवहरूबाट प्राप्त गरेको ज्ञान र ती भावनाहरू जति नै अनमोल भए पनि, तिनलाई अझै पनि सत्यताको रूपमा गन्ती गर्न सकिँदैन। सत्यताको स्रोत र सत्यताको अर्थले धेरै व्यापक क्षेत्रलाई समेट्दछ। कुनै पनि कुरा यससँग परस्पर विरोधी हुन सक्दैन। कतिपय मानिसहरू भन्छन्, “के मेरो अनुभवको ज्ञान कहिल्यै परस्पर विरोधी हुन सक्दैन?” अवश्य सक्दैन। तैंले परमेश्‍वरका वचनहरूको अनुभवबाट प्राप्त गरेको साँचो बुझाइ सत्यता अनुरूप हुन्छ—यो कसरी परस्पर विरोधी हुन सक्छ? कुनै पनि वातावरणमा यो सत्यता तेरो जीवन हुन सक्छ। यसले तँलाई एउटा मार्ग दिन सक्छ, र यसले तँलाई जिउन सहायता गर्न सक्छ। तापनि, मानिसहरूसँग भएका थोकहरू र उनीहरूले प्राप्त गरेका ज्योति केवल उनीहरूकै निम्ति र केही क्षेत्रभित्र अरू कसै-कसैका निम्ति मात्र उपयुक्त हुन्छन्, तर एउटा फरक क्षेत्रभित्र ती उपयुक्त हुँदैनन्। कुनै व्यक्तिको अनुभव जति नै गहन भए पनि, त्यो अझै अत्यन्तै सीमित हुन्छ, र तिनीहरूको अनुभव कहिल्यै पनि सत्यताको क्षेत्रमा पुग्दैन। व्यक्तिको ज्योति र व्यक्तिको बुझाइलाई सत्यतासँग कहिल्यै पनि तुलना गर्न सकिँदैन।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सत्य वास्तवमा के हो भन्ने के तँलाई थाहा छ?” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३७८
यदि तँ सत्यतालाई अभ्यास गर्न चाहन्छस् भने, र यदि तँ यसलाई बुझ्न चाहन्छस् भने, पहिले तैंले सामना गर्ने कठिनाइहरू र तेरो वरिपरि आइपर्ने कुराहरूको सारलाई, ती कुराहरूमा भएका समस्याहरूलाई, साथै ती सत्यताको कुन पक्षसँग सम्बन्धित छन् सो बुझ्नुपर्छ। तैंले यी कुराहरूको खोजी गर्नुपर्दछ र पछि, तेरो वास्तविक कठिनाइहरूको आधारमा तैँले सत्यताको खोजी गर्नुपर्दछ। त्यसरी, तैंले बिस्तारै अनुभव प्राप्त गर्दै जाँदा, तँमाथि आइपर्ने सबै कुरामा तैँले परमेश्‍वरको हात छ भन्‍ने देख्न सक्नेछस्, साथै उहाँले के गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँले तँमा कुन परिणाम हासिल गर्न चाहनुहुन्छ सो बुझ्नेछस्। सायद तैंले तँमाथि आइपर्ने कुराहरू सबै परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वास र सत्यतासित जोडिएको छ भन्‍ने कहिल्यै महसुस गरेको थिइनस्, र तैँले आफैलाई यसो भन्छस्, “यसको सामना गर्ने मेरो आफ्नै तरिका छ; मलाई सत्यता वा परमेश्‍वरका वचनहरूको आवश्यकता छैन। जब म भेलाहरूमा उपस्थित हुन्छु, वा जब म परमेश्‍वरका वचनहरू पढ्छु, वा जब म आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्छु, म सत्यको आधारमा र परमेश्‍वरका वचनहरूको आधारमा आफैलाई जाँच्‍नेछ।” यदि तेरो जीवनमा दैनिक रूपमा घट्ने घटनाहरू—परिवार, काम, विवाह सम्बन्ध, र तेरो भविष्यसँग सम्‍बन्धित कुराहरू—यदि यी विभिन्न कुराहरूसँग सत्यताको कुनै सम्बन्ध छैन भन्‍ने तँलाई लाग्छ, र तैँले मानवीय तरिकाहरू प्रयोग गरी तिनको समाधान गर्छस् भने, यदि तैँले अनुभव गर्ने तरिका यही हो भने, तैँले कहिल्यै पनि सत्यता प्राप्त गर्नेछैनस्; परमेश्‍वरले तँमा के पूरा गर्न चाहनुहुन्छ वा तँमा कुन परिणाम हासिल गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा तैँले कहिल्यै पनि बुझ्‍नेछैनस्। सत्यताको पछि लाग्नु एउटा लामो प्रक्रिया हो। यसको एउटा सरल पक्ष छ, र त्यसमा एउटा जटिल पक्ष पनि छ। सरल रूपमा भन्दा, हामीले सत्यताको खोजी गर्नुपर्दछ र हाम्रो वरिपरि आइपर्ने सबै कुरामा परमेश्‍वरका वचनहरूको अभ्यास र अनुभव गर्नुपर्दछ। यसो गर्न थालेपछि, तैंले परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा तैँले कति धेरै सत्यता प्राप्त गर्नुपर्छ र कतिसम्म पछि लाग्नुपर्छ, र सत्यता अति वास्तविक छ र सत्य नै जीवन हो भनी धेरैभन्दा धेरै बुझ्‍न थाल्‍नेछस्। परमेश्‍वरको सेवा गर्नेहरू र मण्डलीका अगुवाहरूले मात्र सत्यताअनुसार सबै कुरा गर्नु आवश्यक छ र साधारण चेलाहरूले त्यसो आवश्यक छैन भन्ने कुरा सत्य होइन; यदि त्यस्तो हो भने, परमेश्‍वरले व्यक्त गर्नुभएका वचनहरूको कुनै ठूलो महत्त्व हुनेथिएन। के अब तिमीहरूसँग सत्यताको पछि लाग्ने मार्ग छ? सत्यताको पछि लाग्दा सम्‍बोधन गरिनैपर्ने पहिलो कुरा के हो? अरू सबै कुराभन्दा पहिले, तैंले परमेश्‍वरका वचनहरू खान र पिउन र सङ्गतिहरू सुन्‍ने कार्यमा धेरै समय बिताउनुपर्छ। जब तैँले कुनै समस्याको सामना गर्छस्, तब प्रार्थना गर् र धेरै खोजी गर्। जब तिमीहरूले आफैलाई धेरै सत्यताले सुसज्जित पार्छौ, र जीवन प्रवेश प्राप्त गरेका हुन्छौ, र कद प्राप्त गर्दछौ, तिमीहरूले कुनै वास्तविक कार्य गर्न, सानो काम गर्न सक्‍नेछौ, त्यसरी तिमीहरू केही जाँच र परीक्षाहरूबाट भएर जान सक्नेछौ। त्यस बेला, तिमीहरूले केही सत्यताहरू बुझेका र प्राप्त गरेका छौ भन्‍ने महसुस गर्नेछौ, र मानिसहरूलाई चाहिने कुरा र तिनीहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा भनेको परमेश्‍वरले बोल्नुभएका वचनहरू नै हुन्, र संसारमा मानिसहरूलाई जीवन दिनसक्‍ने एक मात्र सत्यता यही हो भनी थाहा पाउनेछौ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सत्यलाई पछ्याउनुको महत्त्व र त्यसलाई पछ्याउने मार्ग” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३७९
धेरै जना मानिसहरूले पहिले यसो भनेका छन्: “म सबै सत्यता बुझ्छु, यति मात्र हो कि म त्यसलाई अभ्यास गर्न सक्दिनँ।” यो वाक्यले मूल समस्यालाई प्रकट गर्दछ, जुन मानिसहरूका प्रकृतिभित्रको समस्या पनि हो। यदि कसैको प्रकृतिले सत्यतालाई घृणा गर्छ भने, उनीहरूले त्यसलाई कहिल्यै पनि अभ्यास गर्दैनन्। जसले सत्यतालाई घृणा गर्दछन् तिनीहरूले निश्चय पनि परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वासमा अवश्य नै अत्याधिक चाहनाहरू राख्‍नेछन्; उनीहरूले जे गरे पनि, त्यसमा उनीहरूका आफ्नै अभिप्रायहरू सधैँ हुन्छन्। उदाहरणको लागि, सतावटमा परेर घर फर्कन नसक्ने कोही-कोहीले यस्तो चाहना गर्छन्: “म अब घर जान सक्दिनँ। तर एक दिन, परमेश्‍वरले मलाई अझ राम्रो घर दिनुहुनेछ। उहाँले मलाई व्यर्थमा कष्ट भोग्न लाउनुहुनेछैन।” वा तिनीहरू सोच्छन्, “जहाँसुकै बसे पनि परमेश्‍वरले मलाई खाने भोजन दिनुहुनेछ। परमेश्‍वरले मलाई पूर्ण समाप्तिको स्थितिमा लैजानुहुनेछैन। यदि उहाँले त्यसो गर्नुभयो भने, उहाँले गल्ती गर्नुभएको हुनेछ।” के मानिसहरूभित्र यस्ता विचारहरू हुँदैनन् र? कोही-कोही छन् जसले यस्तो सोच्छन्, “म आफैलाई परमेश्‍वरका लागि यति धेरै समर्पित गर्दछु, त्यसैले उहाँले मलाई शासन गर्ने अधिकारीहरूको हातमा पर्न दिनु हुँदैन। मैले धेरै कुरा त्यागेको छु र म गम्भीरतासाथ सत्यको खोजी गर्दछु, यसैले परमेश्‍वरले मलाई आशीर्वाद दिनु नै उचित हुन्छ; हामी परमेश्‍वरको दिनको आगमन हुने दिनको प्रतीक्षा गर्दछौं, त्यसैले परमेश्‍वरको दिन चाँडै आउनुपर्छ, र उहाँले हाम्रा चाहनाहरू पूरा गर्नुपर्दछ।” मानिसहरूले आफैमा सधैँ परमेश्‍वरबाट अत्याधिक मागहरू गरिरहेका हुन्छन्, र उनीहरू सोच्छन्: हामीले यो गर्‍यौं, त्यसैले परमेश्‍वरले यस्तो-उस्तो गर्नु मात्र ठीक हुन्छ; हामीले केही उपलब्धिहरू गरेका छौं, त्यसैकारण परमेश्‍वरले हामीलाई केही इनाम दिनुपर्छ र हामीलाई केही आशिष् वा अन्य कुराहरू दिनुपर्छ। कोही-कोही मानिसहरू हुन्छन्, जो अरूले आफ्ना परिवारहरू छोडेर ढुक्क सँगले आफूलाई परमेश्‍वरका निम्ति समर्पित गरेको देखेर निराश महसुस गर्छन् र सोच्छन्: “अरूले धेरै पहिले नै आफ्नो घर छोडेका छन्। उनीहरूले कसरी यसलाई जित्न सक्दछन्? म किन यसलाई कहिल्यै जित्न सक्दिनँ? म किन आफ्नो परिवार र मेरा छोराछोरीलाई छोड्न सक्दिनँ? किन परमेश्‍वर उनीहरूप्रति दयालु हुनुहुन्छ तर मप्रति दयालु हुनुहुन्न? किन पवित्र आत्माले मलाई अनुग्रह दिनुहुन्न? किन परमेश्‍वर मसँग हुनुहुन्न?” यो कस्तो अवस्था हो? मानिसहरू अति नै तर्कहीन छन्। उनीहरूले सत्यतालाई अभ्यास गर्दैनन्; बरु, उनीहरू परमेश्‍वरको बारेमा गुनासो गर्छन्। उनीहरूको कुनै पनि व्यक्तिपरक प्रयास हुँदैन, न त उनीहरूले व्यक्तिपरक रूपमा हासिल गर्नुपर्ने केही हुन्छ। उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू र उनीहरू हिँड्नुपर्ने मार्गलाई उनीहरूले छोडिदिएका छन्। उनीहरू सधैँ परमेश्‍वरले यो वा त्यो गर्नुभएको होस् भनी माग गर्दछन्, र परमेश्‍वर अन्धाधुन्ध उनीहरूप्रति दयालु हुनुभएको होस्, अन्धाधुन्ध उनीहरूलाई अनुग्रह दिनुभएको होस्, उनीहरूलाई डोऱ्याउनुभएको होस्, र उनीहरूलाई मनोरञ्‍जन दिनुभएको होस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरू सोच्छन्, “मैले आफ्नो घर छोडेको छु, मैले धेरै कुरा त्यागेको छु, म आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछु र मैले धेरै कष्ट भोगेको छु। त्यसैले परमेश्‍वरले मलाई अनुग्रह गर्नुपर्दछ, मलाई मेरो घरको याद आउन दिनु हुँदैन, मलाई मेरो परिवार त्याग्‍ने संकल्प दिनुपर्छ, र मलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। म किन यति कमजोर छु? किन अरू त्यति बलिया छन्? परमेश्‍वरले मलाई बलियो बनाउनुपर्छ।” “अरू मानिसहरू आफ्नो घर जान सक्छन्; म किन सतावटमा छु र आफ्नो घर जान सक्दिनँ? परमेश्‍वरले मलाई कुनै अनुग्रह देखाउनुहुन्न।” यी मानिसहरूले जे भन्छन् त्यो पूर्णतया अनुचित छ, र यसमा कुनै सत्यता हुने कुरा त परै जाओस्। मानिसहरूका गुनासोहरू कसरी आउँछन्? ती मानिसभित्रबाट प्रकट हुने कुराहरू हुन् र ती पूर्ण रूपमा मानिसको स्वभावको प्रतिनिधि हुन्। यदि मानिसले आफूभित्रका यी थोकहरूलाई फ्याँक्दैन भने तेरो कद जति नै ठूलो भए पनि, तैंले जति धेरै सत्यता बुझेको भए पनि, तँ खडा नै रहनेछस् भन्ने निश्‍चयता तैँले कहिल्यै पनि प्राप्त गर्नेछैनस्। तैंले कुनै पनि समयमा र कुनै पनि स्थानमा परमेश्‍वरको विरुद्धमा निन्दा गर्ने र उहाँलाई धोका दिने अनि सत्य बाटो त्याग्ने सम्भावना हुनेछ। यो सहजै हुनसक्‍ने कुरा हो। के अब तिमीहरूले स्पष्ट देख्यौ? मानिसहरूले उनीहरूका प्रकृतिले कुनै पनि बेला के प्रकट गर्न सक्छ भन्‍ने कुरालाई बुझ्नैपर्छ र त्यसमा निपुण हुनुपर्दछ; उनीहरूले होसियारीसाथ यो समस्याको सामना गर्नुपर्छ। सत्यताको विषयमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो बुझाइ भएकाहरूले कहिलेकहीँ यो कुरालाई केही मात्रामा जान्दछन्। जब उनीहरूले समस्या पत्ता लगाउँछन्, तिनीहरू गहिरो चिन्तन र आत्मनिरीक्षणमा संलग्न हुन सक्छन्। तापनि, कहिलेकहीँ तिनीहरूले समस्याको बारेमा जान्दैनन्, त्यसैले तिनीहरूले गर्न सक्ने केही पनि हुँदैन। त्यसैले तिनीहरू परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई प्रकट गर्नुभएको होस् वा तिनीहरूलाई तथ्यहरू प्रकट गर्नुभएको होस् भनी पर्खन मात्र सक्छन्। कहिलेकहीँ विचारहीन मानिसहरूले यी कुराहरू जान्दछन्, तर तिनीहरू यसो भन्दै यस कुरालाई सहजताको साथ लिन्छन्, “सबै मानिसहरू यस्तै हुन्छन्, त्यसकारण यसको कुनै अर्थ हुँदैन। परमेश्‍वरले मलाई माफ गर्नुहुनेछ; उहाँले सम्‍झनुहुनेछैन। यो सामान्य कुरा हो।” मानिसहरूले जे चुन्नुपर्छ र उनीहरूले जे गर्नुपर्दछ त्यो उनीहरूले न त गर्छन् न हासिल नै गर्छन्। उनीहरू सबै भ्रमित, अत्यन्तै निष्क्रिय हुन्छन्, र तिनीहरू अत्यन्तै परानिर्भर हुन्छन्, यहाँसम्‍म कि तिनीहरू अनौठा सोचविचारमा समेत लिप्त हुन्छन्। “यदि परमेश्‍वरले एक दिन हामीलाई पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ भने, हामी फेरि निष्क्रिय हुनेछैनौं। तब हामी ठीकसँग अगाडि बढ्न सक्छौं। परमेश्‍वरले हाम्रो बारेमा त्यति धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन।” तैंले अब स्पष्टसँग देख्नुपर्छ। तैंले आफू हिँड्नुपर्ने मार्गको सम्बन्धमा आफैले निर्णय गर्नुपर्छ; प्रत्येक व्यक्तिले गर्ने निर्णयहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तैँले त्यो पत्ता लगाउन सक्छस्, यसैले आत्मनियन्त्रण अभ्यासको हकमा तँ कति बलियो हुन्छस्? आफैलाई त्याग्‍ने विषयमा तँ कतिको बलियो छस्? यो सत्यता र मुख्य कुराहरू अभ्यास गर्नुको पूर्वसर्त हो। जब तैँले कुनै कुराको सामना गर्छस्, यदि त्यो त्यस्तो स्थिति हो जसमा सत्यता अनुरूप कसरी काम गर्ने सो तँलाई थाहा छ भने, तैंले कुन निर्णय गर्नुपर्छ र तैंले कुन कुराको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्‍ने कुरा स्पष्ट जान्दछस् भने मात्र, तँ अगाडि बढ्न सक्छस्। यदि तैंले आफ्नै अवस्थामा के सही र के गलत छ भनेर पत्ता लगाउन सक्छस् तर त्यसबारे अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट हुन सक्दैनस्, र तेरो भ्रमित तरिकामा नै अगाडि बढिरहन्छस् भने, तैंले कुनै उन्नति गर्नेछैनस् वा सफलताको अनुभव गर्नेछैनस्। यदि तँ जीवन प्रवेशको बारेमा गम्भीर छैनस् भने, तैंले आफैलाई रोकेर राखेको छस्, र यसले तँ सत्यतालाई प्रेम गर्दैनस् भन्ने मात्र प्रमाणित गर्दछ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “तेरो आफ्नै अवस्थालाई बुझेर मात्र तँ सही मार्गमा हिँड्न थाल्छस्” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८०
सत्यतालाई अभ्यास गर्नेहरूले काम-कुराहरू गर्ने क्रममा परमेश्‍वरको छानबिनलाई स्वीकार गर्न सक्दछन्। जब तैँले परमेश्‍वरको छानबिनलाई स्वीकार गर्छस्, तेरो हृदयलाई सोझो तुल्याइन्छ। यदि तँ अरूलाई देखाउनका लागि मात्र काम गर्छस् भने, र परमेश्‍वरको छानबिनलाई स्वीकार्दैनस् भने, के परमेश्‍वर अझै पनि तेरो हृदयमा हुनुहुन्छ? यस्ता व्यक्तिहरूमा परमेश्‍वरको निम्ति कुनै आदर हुँदैन। सधैँ तेरो आफ्नै खातिर मात्र काम नगर् र निरन्तर आफ्नै हितको मात्र विचार नगर्; तेरो आफ्नो कद, इज्जत वा प्रतिष्ठालाई मात्र विचार नगर्। साथै मानिसहरूको चासोमा पनि ध्यान नदे। तैंले पहिले परमेश्‍वरको घरको हितको बारेमा सोच्नुपर्छ, र त्यसलाई तेरो पहिलो प्राथमिकता बनाउनु आवश्यक हुन्छ। तैँले परमेश्‍वरको इच्छालाई ध्यान दिनुपर्छ र तँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने कार्यमा अशुद्ध भएको छस् कि, तैंले बफादार हुने सक्दो कोसिस गरेको छस् कि छैनस्, तेरा जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सक्दो प्रयास गरेको छस् कि छैनस् र तँसँग भएका सबै कुराहरू दिएको छस् कि छैनस्, साथै तैंले परमेश्‍वरको घरप्रतिको आफ्नो कर्तव्य र कामका लागि सम्पूर्ण हृदयले ध्यान दिएको छस् कि छैनस् भनी विचार गरेर यो काम सुरु गर्नुपर्छ। तैंले यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। तिनको बारेमा बारम्बार विचार गर्, र यसरी तँलाई आफ्नो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्न सजिलो हुनेछ। यदि तँ थोरै क्षमता, सतही अनुभव भएको व्यक्ति होस् भने वा तेरो व्यावसायिक काममा निपुण छैनस् भने, तेरो काममा केही गल्ती वा कमजोरीहरू हुन सक्छन्, र त्यसका परिणामहरू धेरै राम्रो नहुन सक्छ—तर तैंले आफ्नो सक्दो प्रयास लगाएको हुन्छस्। जब तैँले आफूले गर्ने कामहरूमा आफ्नै स्वार्थी चाहनाहरूको बारेमा सोचिरहेको हुँदैनस् वा आफ्नै हितको बारेमा विचार गरिरहेको हुँदैनस्, तर त्यसको साटो मनमा निरन्तर परमेश्‍वरको घरको हितहरूलाई ध्यान दिइरहेको छस्, र तेरो कर्तव्य राम्ररी पूरा गरिरहेको छस् भने, तैँले परमेश्‍वरको सामु असल कार्यहरू जम्मा गरिरहेको हुनेछस्। यस्ता असल कार्यहरू गर्ने मानिसहरू सत्यता भएका मानिसहरू हुन्; त्यसरी नै, उनीहरूले गवाही धारण गरेका हुन्छन्। यदि तँ सधैँ देह अनुसार जिउँछस्, निरन्तर आफ्नै स्वार्थी इच्छाहरूलाई पूरा गर्छस् भने, त्यस्ता मानिसहरूमा सत्यता हुँदैन; यो परमेश्‍वरलाई अनादर गर्ने कार्यको चिह्न हो। तँ भन्छस्, “मैले केही गरेको छैनँ; मैले कसरी परमेश्‍वरलाई अपमान गरेको छु?” तेरो विचार र धारणाहरूमा, तेरा कामहरूको पछाडिका अभिप्राय, लक्ष्य र आशयहरूमा, र तैंले गरेको कामको नतिजाहरूमा—हरप्रकारले तैंले शैतानलाई सन्तुष्ट पारिरहेको हुन्छस्, त्यसको हाँसोको पात्र बनिरहेको हुन्छस्, र त्यसलाई तँबाट केही प्राप्त गर्न दिइरहेको हुन्छस्। तँमा एक इसाइको हुनुपर्ने गवाही अलिकति पनि हुँदैन। तँ सबै कुरामा परमेश्‍वरको नाउँको अनादर गर्छस् र तँसँग साँचो गवाही हुँदैन। के तैंले गरेका कार्यहरूलाई परमेश्‍वरले सम्झनुहुनेछ? आखिरमा, परमेश्‍वरले तेरा कार्यहरू र तैंले पूरा गरेको कर्तव्यको बारेमा कस्तो निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ? के त्यसबाट केही, कुनै प्रकारको अभिव्यक्ति आउनु पर्दैन र? बाइबलमा, प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, “त्‍यस दिन मलाई धेरैले यसो भन्‍नेछन्, प्रभु, प्रभु, के हामीले तपाईंको नाउँमा अगमवाणी बोलेका छैनौं र? अनि तपाईंको नाउँमा दियाबलसहरू धपाएनौं र? र तपाईंको नाउँमा धेरै अचम्मका कामहरू गरेनौं र? अनि म तिनीहरूका निम्ती घोषणा गर्नेछु, मैले तिमीहरूलाई कहिल्‍यै चिनिनँ। दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर होओ।” प्रभु येशूले किन त्यसो भन्नुभयो? प्रभुको नाउँमा बिरामीहरूलाई निको पार्ने र भूतहरू निकाल्नेहरू, प्रभुको नाउँमा प्रचार गर्न यात्रा गर्नेहरू किन दुष्ट काम गर्नेहरू बनेका छन्? यी दुष्ट काम गर्नेहरू को हुन्? के उनीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास नगर्नेहरू हुन्? उनीहरू सबैले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन् र परमेश्‍वरलाई पछ्याउँछन्। उनीहरूले परमेश्‍वरका लागि काम-कुराहरूलाई पनि त्याग्छन्, आफूलाई परमेश्‍वरका निम्ति अर्पण गर्छन्, र आफ्‍ना कर्तव्य पूरा गर्छन्। तापनि, आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दा तिनीहरूमा भक्ति र गवाहीको अभाव हुन्छ, त्यसैले यो दुष्टता बन्छ। यसैले प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, “दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर होओ।”
कुन मापदण्डअनुसार व्यक्तिका कामहरू असल वा खराब हुन् भनी निर्धारित गरिन्छ? यो कुरा तेरा विचारहरू, शब्दहरू, र व्यवहारहरूमा तँसँग सत्यतालाई अभ्यास गर्ने र सत्यता वास्तविकतामा जिउने गवाही छ कि छैन भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। यदि तँसँग यो वास्तविकता छैन वा तँ यसअनुसार जिउँदैनस् भने, तँ दुष्ट कार्य गर्ने व्यक्ति होस् भन्‍ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। दुष्ट काम गर्नेहरूलाई परमेश्‍वरले कसरी हेर्नुहुन्छ? तेरा विचारहरू र बाहिरी कार्यहरूले परमेश्‍वरको साक्षी दिँदैन, न त तिनले शैतानलाई सर्ममा पार्छन् वा शैतानलाई हराउँछन्; यसको साटो, ती कुराले परमेश्‍वरलाई सर्ममा पार्छन्, र परमेश्‍वरलाई लज्जित पार्ने दागहरूले भरिएका छन्। तैंले परमेश्‍वरको लागि गवाही दिइरहेको हुँदैनस्, आफैलाई परमेश्‍वरको लागि समर्पित गरिरहेको पनि हुँदैनस्, न त तैंले परमेश्‍वरप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वहरूलाई पूरा गरिरहेको हुन्छस्; बरु, तैंले आफ्नै लागि मात्रै काम गरिरहेको हुन्छस्। “तेरो आफ्नै लागि” भन्‍ने वाक्यांशको अर्थ के हो? शैतानको लागि। त्यसकारण, आखिरमा, परमेश्‍वरले भन्नुहुनेछ, “दुष्ट काम गर्ने तिमीहरू मबाट दूर होओ।” परमेश्‍वरको नजरमा तैंले राम्रा कामहरू गरेको छैनस्, बरु तेरो व्यवहार बदलेर दुष्ट बनेको छ। तँलाई इनाम दिइनेछैन र परमेश्‍वरले तँलाई सम्‍झनुहुनेछैन। के यो पूर्ण रूपमा व्यर्थ छैन र? आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्ने तिमीहरू प्रत्येकको लागि, चाहे तैँले जति नै गहन रूपमा सत्यतालाई बुझेको भए पनि, यदि तँ सत्य वास्तविकतामा प्रवेश गर्न चाहन्छस् भने, अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सरल बाटो भनेको तैँले गर्ने हरेक कुराहरूमा परमेश्‍वरको घरको हितको बारेमा सोच्नु हो, अनि तेरा स्वार्थी चाहनाहरू, तेरा व्यक्तिगत आसय, अभिप्रायहरू, प्रतिष्ठा र हैसियतलाई छाड्नु हो। परमेश्‍वरको घरको हितलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राख्—कम्तीमा पनि तैँले गर्नुपर्ने कुरा यही हो। यदि कर्तव्य पूरा गर्दै गरेको व्यक्तिले यति पनि गर्न सक्दैन भने, उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र? यो त आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको कुरै भएन। तैँले सर्वप्रथम परमेश्‍वरको घरको हितको बारेमा सोच्नुपर्छ, परमेश्‍वरको आफ्नै हितको बारेमा सोच्नुपर्छ, अनि उहाँको कामको बारेमा सोच्नुपर्छ र यी सोचहरूलाई सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख ठान्‍नुपर्छ; त्यसपछि मात्र तैँले तेरो हैसियतको स्थिरता वा अरूले तँलाई कसरी हेर्छन् सो बारेमा सोच्न सक्छस्। जब यसलाई तिमीहरूले यी चरणहरूमा विभाजन गर्छौ र केही सम्झौता गर्छौ तब मात्र तिमीहरूले यो अलि सहज भएको महसुस गर्दैनौ र? यदि तैंले केही समयसम्‍म यसो गरिस् भने, तैँले परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न गाह्रो छैन रहेछ भन्ने महसुस गर्नेछस्। यसको साथै, यदि तैँले आफ्ना उत्तरदायित्वहरूलाई पूरा गर्छस्, आफ्ना दायित्वहरू र कर्तव्यहरू निभाउँछस्, आफ्ना स्वार्थी चाहनाहरूलाई पन्छाउँछस्, आफ्ना आशयहरू र अभिप्रायहरूलाई पन्छाउँछस्, परमेश्‍वरको इच्छाको बारेमा सोचविचार गर्छस् भने, र परमेश्‍वर र उहाँको घरको हितलाई सबैभन्दा अगाडि राख्छस् भने, तैँले केही समय यसलाई अनुभव गरिसकेपछि यो जीवन जिउने राम्रो शैली हो भन्ने कुरा तैँले महसुस गर्नेछस्। यो भनेको तुच्छ व्यक्ति वा बेकामे नबनीकन सोझो हिसाबले र इमानदार तरिकाले जिउनु हो, र संकीर्ण सोच राख्नु वा निर्दयी बन्नुको साटो न्यायसंगत रूपले र सम्मान पूर्वक जिउनु हो। व्यक्तिले यही शैलीमा जिउनु र कार्य गर्नुपर्छ भन्ने तैँले महसुस गर्नेछस्। तेरा आफ्ना चासोहरू सन्तुष्ट पार्ने तेरो हृदय भित्रको चाहना क्रमिक रूपमा कम हुँदै जानेछ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “परमेश्‍वरलाई आफ्नो साँचो हृदय देओ, अनि तिमीहरूले सत्यता प्राप्त गर्नेछौ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८१
धेरै जना मानिसहरूले परमेश्‍वरमाथिको आफ्नो विश्‍वासमा उनीहरूको व्यवहारलाई विशेष जोड् दिन्छन्, जसको फलस्वरूप उनीहरूको व्यवहारमा केही परिवर्तनहरू हुन्छन्। उनीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न थालेपछि, तिनीहरूले अरूसित झगडा गर्न, मानिसहरूको अपमान गर्न र उनीहरूसित झगडा गर्न, धूम्रपान गर्न र जाँड-रक्सी पिउन, र कुनै सार्वजनिक सम्पत्ति चोरी गर्न—चाहे यो काँटी होस् वा काठको ठूलो टुक्रा होस्—छोड्छन् र तिनीहरू यति हदसम्‍म जान्छन् कि, उनीहरूले हानि खप्नुपर्दा वा उनीहरूसित अन्याय हुँदा समेत उनीहरू अदालतमा जाँदैनन्। निस्सन्देह, तिनीहरूका व्यवहारमा साँच्चै परिवर्तन हुँदछ। मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेपछि, साँचो मार्ग स्वीकार गर्दा त्यसले तिनीहरूलाई विशेष खुशी महसुस गराउने हुनाले, र अब उनीहरूले पवित्र आत्माको कामको अनुग्रहको स्वाद पाएका हुनाले उनीहरू उत्साही हुन्छन्, र उनीहरूले त्याग्न नसक्ने वा कष्ट भोग्न नसक्ने कुनै पनि कुरा हुँदैन। तापनि, तीन, पाँच, दस वा तीस वर्षसम्म विश्‍वास गरेपछि पनि उनीहरूका स्वभावमा कुनै परिवर्तन नभएकोले आखिरमा तिनीहरू पुरानै चालमा फर्कन थाल्छन्; उनीहरूको अहङ्कार र हठीपन झन् स्पष्ट हुँदै बढ्दै जान्छ, उनीहरू शक्ति र फाइदाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न थाल्छन्, उनीहरू मण्डलीको पैसाको लालच गर्छन्, उनीहरू आफ्नो हित हुने जुनै पनि कुरा गर्छन्, उनीहरू प्रतिष्ठा र सुखविलासको ज्यादै चाहना गर्छन्, र उनीहरू परमेश्‍वरको परिवारमा परजीवी बन्छन्। विशेष रूपमा, अगुवाहरूको रूपमा सेवा गर्ने धेरै जनालाई मानिसहरूले त्यागिदिन्छन्। अनि यी तथ्यहरूले के प्रमाणित गर्दछन्? व्यवहारमा मात्र भएका परिवर्तनहरू अस्थिर हुन्छन्; यदि मानिसहरूको जीवनका स्वभावहरूमा कुनै परिवर्तन भएन भने, ढिलो वा चाँडो उनीहरूको भ्रष्ट पक्षहरू आफै प्रकट हुन्छन्। उत्साह, साथै त्यस समय पवित्र आत्माले गर्नुभएको केही काम नै उनीहरूको व्यवहारमा आएको परिवर्तनको स्रोत हुने भएकोले, उत्साहित हुनु वा क्षणिक दया देखाउनु तिनीहरूका निम्ति धेरै सजिलो हुन्छ। जसरी अविश्‍वासीहरू भन्छन्, “एउटा असल काम गर्नु सजिलो हुन्छ; जीवनभरि असल कामहरू गर्नुचाहिँ गाह्रो हुन्छ।” मानिसहरूले आफ्‍नो जीवनभरि नै असल कार्यहरू गरिरहन सक्दैनन्। व्यक्तिको व्यवहार जीवनद्वारा निर्देशित हुन्छ; व्यक्तिको जीवन जस्तो हुन्छ, उसको व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ, र प्राकृतिक रूपमा जे प्रकट हुन्छ त्यसले जीवनको साथै त्यस व्यक्तिको प्रकृतिको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। नक्कली चीजहरू टिक्न सक्दैनन्। जब परमेश्‍वरले मानिसलाई मुक्ति दिनका लागि काम गर्नुहुन्छ, त्यो मानिसलाई असल व्यवहारले सिँगार्नका निम्ति हुँदैन—परमेश्‍वरको कामको उद्देश्य मानिसहरूका स्वभावहरूलाई परिवर्तन गर्नु, उनीहरूलाई नयाँ मानिसहरूका रूपमा फेरि जन्माउनु भन्‍ने हुन्छ। यसप्रकार, भगवानको न्याय, दण्ड, परीक्षाहरू, र मानिसका शोधनहरू सबैले आफ्नो स्वभाव परिवर्तन गर्न सक्दछन् ताकि ऊ परमेश्‍वरप्रति पूर्ण अधीनता र भक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ, र सामान्यतया उहाँको आराधना गर्न आउँदछ। यो भगवानको कामको लक्ष्य हो। असल व्यवहार गर्नु नै परमेश्‍वरको अधीनमा बस्नु होइन, यो ख्रीष्टसँग मिल्दोजुल्दो हुनु हो भन्‍ने कुरा त परै जाओस्। व्यवहारमा परिवर्तनहरू हुने कुरा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ र उत्साहको कारण जन्मेका हुन्छन्; ती परमेश्‍वरको साँचो ज्ञान वा सत्यमा आधारित हुँदैनन्, ती पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनमा निर्भर हुने त परै जाओस्। कहिलेकहीँ यस्तो समय पनि हुन्छ जब मानिसहरूले गर्ने काम पवित्र आत्माद्वारा निर्देशित हुन्छ, तापनि त्यो जीवनको अभिव्यक्ति होइन, यो परमेश्‍वरलाई चिन्नु जस्तै हो भन्‍ने कुरा त परै जाओस्; व्यक्तिको व्यवहार जति सुकै राम्रो भए पनि, त्यसले उनीहरू परमेश्‍वरको अधीनमा बसेका छन् वा उनीहरूले सत्यको अभ्यास गरेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। व्यवहारमा हुने परिवर्तनहरू क्षणिक भ्रम मात्र हुन्; ती जोशका प्रकटीकरणहरू मात्र हुन्। ती कुराहरूलाई जीवनका अभिव्यक्तिहरू भनेर भन्न सकिँदैन।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “बाहिरी परिवर्तनहरू र स्वभावमा हुने परिवर्तनहरू बीचको भिन्नता” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८२
मानिसहरूले राम्रो व्यवहार गर्न सक्छन्, तर त्यसको अर्थ तिनीहरूसँग सत्य छ नै भन्ने हुँदैन। उत्साहले मात्र तिनीहरू सिद्धान्तमा रहन्छन् र नियमहरू पालन गर्छन्; सत्यता विहीन मानिसहरूसँग नितान्त समस्याहरू समाधान गर्ने कुनै उपाय हुँदैन, न त सिद्धान्तले सत्यताको ठाउँ लिन नै सक्छ। जुन मानिसहरूले आफ्नो स्वभावमा परिवर्तन अनुभव गरेका हुन्छन् तिनीहरू भिन्नै हुन्छन्; तिनीहरूले सत्यतालाई बुझेका हुन्छन्, तिनीहरू सबै विषयहरूमा विवेकी हुन्छन्, तिनीहरूलाई परमेश्‍वरको इच्छाबमोजिम कसरी काम गर्ने, सत्यको सिद्धान्तअनुसार कसरी व्यवहार गर्ने, र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न कसरी कार्य गर्ने भनी जानेका हुन्छन्, र आफूले प्रदर्शन गर्ने भ्रष्टताको प्रकृति तिनीहरूले बुझेका हुन्छन्। जब तिनीहरूका आफ्नै विचारहरू र धारणाहरू प्रकट हुन्छन्, तिनीहरू विवेकी हुन्छन् र देहलाई त्याग्‍ने बन्‍न सक्छन्। स्वभावमा भएको परिवर्तनलाई यसरी नै व्यक्त गरिन्छ। स्वभावको परिवर्तनबाट भएर जाने मानिसहरूको मुख्य कुरा भनेको तिनीहरूले सत्यतालाई स्पष्टसँग बुझेका हुन्छन् र कार्यहरू पूरा गर्दा तिनीहरूले सत्यतालाई तुलनात्मक रूपमा सटीक रूपले अभ्यास गर्छन् र तिनीहरूले बारम्बार भ्रष्टता प्रकट गर्दैनन्। सामान्यतया, जसको स्वभाव रूपान्तरण भएको हुन्छ तिनीहरू विशेष रूपमा व्यावहारिक र समझदार देखिन्छन्, र तिनीहरूमा सत्यको ज्ञान भएकोले, तिनीहरूले त्यति धेरै स्व-धार्मिकता वा अहङ्कार प्रकट गर्दैनन्। तिनीहरूमा प्रकट हुने धेरैजसो भ्रष्टता तिनीहरूले देख्न र बुझ्न सक्छन्, त्यसैले तिनीहरू अहङ्कार गर्दैनन्। मानिसको स्थान के हो, कसरी उचित तरिकाले व्यवहार गर्ने, कसरी कर्तव्यपरायण हुने, के भन्ने र के नभन्ने, कुन मानिसहरूलाई के भन्ने र के गर्ने सो तिनीहरूले निश्चित हदसम्म बुझ्न सक्छन्। यसैले यस्ता मानिसहरू तुलनात्मक रूपमा विवेकशील हुन्छन् भनेर भन्‍न सकिन्छ। आफ्ना स्वभावहरूमा परिवर्तनको प्रक्रियाबाट भएर जानेहरू साँच्चै मानिसको समानतामा जिउँछन्, र तिनीहरूसँग सत्यता हुन्छ। तिनीहरूले सधैँ सत्यताअनुसार बोल्न र स्थितिहरूलाई हेर्न सक्छन्, र आफूले गर्ने सबै कुरामा तिनीहरू सिद्धान्तअनुसार काम गर्छन्; तिनीहरू कुनै पनि व्यक्ति, वस्तु वा थोकको प्रभावमा परेका हुँदैनन्, र तिनीहरू सबैका आ-आफ्नै विचारहरू हुन्छन् र सत्यको सिद्धान्तलाई पक्रिराख्‍न सक्छन्। तिनीहरूका स्वभाव तुलनात्मक रूपमा स्थिर हुन्छ, तिनीहरू घरी तातो र घरी चिसो हुँदैनन्, र तिनीहरूका परिस्थितिहरू जस्तोसुकै भए पनि आफ्ना कर्तव्यहरू कसरी उचित रूपले पूरा गर्ने र परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्ने किसिमको व्यवहार कसरी गर्ने भन्‍ने तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ। जस-जसका स्वभाव साँच्चै परिवर्तन भएको हुन्छ तिनीहरूले आफैलाई बाहिरी रूपमा राम्रो देखाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान लाउँदैनन्; तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न के गर्नुपर्छ सो आन्तरिक रूपमा स्पष्ट बुझेका हुन्छन्। त्यसकारण, बाहिरबाट हेर्दा, तिनीहरू त्यत्ति उत्साहित वा तिनीहरूले कुनै ठूलो काम गरेको जस्तो नदेखिन सक्छ, तर तिनीहरूले गर्ने सबै कुरा अर्थपूर्ण, मूल्यवान् हुन्छन्, र तिनले व्यावहारिक परिणामहरू ल्याउँछन्। जस-जसका स्वभावहरू परिवर्तन भएका छन् तिनीहरूमा निश्चित रूपमा धेरै सत्यता हुन्छ, र यसलाई विभिन्न कुराहरूप्रति तिनीहरूका दृष्टिकोण र सिद्धान्तमा आधारित कार्यहरूद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ। जोसँग सत्यता छैन तिनीहरूले निश्चित रूपमा स्वभावमा कुनै परिवर्तन हासिल गरेका हुँदैनन्। स्वभाव परिवर्तन हुनु भनेको परिपक्व र अनुभवी मानिस हुनु होइन; यसले मुख्य रूपमा ती घटनाहरूलाई बुझाउँछ, जसमा परमेश्‍वरको ज्ञान र सत्यको बुझाई प्राप्त गरेको परिणामस्वरूप कुनै व्यक्तिको स्वभावभित्र रहेका केही शैतानी विषहरूमा परिवर्तन हुन्छ। भन्नुको अर्थ, ती शैतानी विषहरू पखालिन्छन्, र परमेश्‍वरले प्रकट गर्नुभएको सत्यले त्यस्ता व्यक्तिहरूमा जरा हाल्छ, त्यो तिनीहरूको जीवन बन्छ र तिनीहरूको अस्तित्वको आधार बन्छ। तब मात्र तिनीहरू नयाँ मानिसहरू बन्छन्, अनि त्यसरी, स्वभावको रूपान्तरणको अनुभव गर्दछन्। स्वभावमा रूपान्तरण हुनुको अर्थ मानिसका बाहिरी स्वभाव पहिलेको भन्दा अझ नम्र हुन्छ भन्ने होइन, पहिले तिनीहरू अहङ्कारी थिए, तर अब विवेकी भएर कुराकानी गर्न सक्दछन् भन्ने होइन, वा पहिले तिनीहरूले कसैको कुरा सुन्दैनथे, तर अब अरूका कुरा सुन्न सक्छन् भन्ने होइन; त्यस्ता बाहिरी परिवर्तनलाई स्वभावको रूपान्तरण भनी भन्न सकिँदैन। अवश्य, स्वभावमा हुने रूपान्तरणमा त्यस्ता अवस्थाहरू र अभिव्यक्तिहरू पनि पर्छन्, तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको आन्तरिक रूपमा, तिनीहरूका जीवन परिवर्तन भएको हुन्छ। परमेश्‍वरले प्रकट गर्नुभएको सत्यता नै तिनीहरूको जीवन बन्छ, तिनीहरू भित्रको शैतानी विषहरूलाई हटाइएका हुन्छन्, र तिनीहरूको दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको हुन्छ—र तीमध्ये कुनै पनि संसारको जस्तो हुँदैन। यी मानिसहरूले ठूलो रातो अजिङ्गरका योजनाहरू र विषहरू के हुन् भन्‍ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सक्छन्; तिनीहरूले जीवनको साँचो सारलाई बुझेका हुन्छन्। यसैले, तिनीहरूको जीवनको मूल्य परिवर्तन भएको हुन्छ, र यो अति नै आधारभूत किसिमको रूपान्तरण हो, साथै स्वभाव परिवर्तनको सार हो।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८३
व्यक्तिको स्वभावमा रूपान्तरण हुनु भनेको व्यवहारमा परिवर्तन हुनु होइन, न त यो बाहिरी परिवर्तनको स्वाङ हो, न जोसका कारण गरिएको अस्थायी परिवर्तन हो; बरु, यो स्वभावको वास्तविक रूपान्तरण हो, जसले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउँछ। व्यवहारमा हुने त्यस्तो परिवर्तन व्यक्तिको बाहिरी व्यवहार र कार्यहरूमा देखिने परिवर्तन जस्तो होइन। स्वभावको रूपान्तरण हुनु भनेको तैंले सत्यतालाई बुझेको र अनुभव गरेको छस्, र सत्यता तेरो जीवन भएको छ भन्ने हो। विगतमा, तैंले यस विषयको सत्यता बुझेको थिइस्, तर तैँले यसलाई अभ्यास गर्न सकेको थिइनस्; तेरो निम्ति सत्यता केवल एउटा धर्मसिद्धान्त मात्र थियो, जुन टिकेन। अब तेरो स्वभाव रूपान्तरण भएको हुनाले, तैंले सत्यतालाई बुझेको मात्र छैनस्, तर त्यसअनुसार तँ अभ्यास पनि गर्दछस्। विगतमा तैंले जुन थोकहरू धेरै मन पराउँथिस्, जुन कुराहरू गर्न तँ इच्छुक हुन्थिस्, तेरा कल्पनाहरू र तेरा धारणाहरू, तिनलाई अब तँ छोड्न सक्छस्। विगतमा तैँले जुन कुराहरूलाई छोड्न सक्दैनथिइस्, अहिले तँ तिनलाई छोड्न सक्छस्। स्वभावको रूपान्तरण यही हो, र तेरो स्वभाव रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि यही हो। यो एकदम सरल सुनिन सक्छ, तर वास्तवमा, यो प्रक्रियामा पर्नेहरूले धेरै कठिनाइ भोग्नुपर्दछ, आफ्नो शरीरलाई वशमा राख्नुपर्छ, र उसको प्रकृतिको हिस्साको रूपमा रहेका उसको शरीरका पक्षहरूलाई त्याग्‍नुपर्छ। यस्तै व्यक्ति निराकरण र छिँवल्ने कार्यबाट, सजाय र दण्ड, र परीक्षा र शोधनबाट भएर जानुपर्छ। यी सबै अनुभव गरेपछि मात्र व्यक्तिले केही हदसम्म आफ्नो स्वभावलाई बुझ्न सक्छ। तापनि यसलाई केही मात्रामा बुझेपछि त्यो व्यक्ति तुरुन्तै परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने होइन; यस प्रक्रियामा व्यक्तिले कठिनाइहरू सहनुपर्छ। त्यसरी नै, के तँ कुनै कुराको विषयमा केही बुझेपछि के त्यसलाई तुरुन्तै अभ्यास गर्न थाल्न सक्छस्? तँ तुरुन्तै अभ्यास सुरु गरिहाल्न सक्दैनस्। तँसित ज्ञान भए पनि, अरूले तँलाई छिँवल्छन् र तेरो निराकरण गर्छन्, र तेरो वातावरणले तँलाई त्यो सत्यता सिद्धान्तहरू अनुरूप काम गर्न बाध्य बनाउँछ। कहिलेकहीँ मानिसहरूले यसो भन्दै यसबाट भएर जाने अनिच्छा गर्छन्, “म किन त्यस प्रकारले काम गर्न सक्दिनँ? के मैले यसलाई यही तरिकाले गर्नुपर्छ?” अरूले भन्छन्, “यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस् भने तैंले यसलाई यही तरिकाले गर्नुपर्दछ। यस तरिकाले काम गर्नु सत्यता अनुरूप हुन्छ।” जब मानिसहरू केही परीक्षाहरूको अनुभव गरिसकेको अवस्थामा पुग्छन् र परमेश्‍वरको इच्छा र केही सत्यताहरू बुझ्छन्, तब उनीहरू केही हदसम्म खुसी हुनेछन् र सत्यता सिद्धान्तहरू अनुसार कार्य गर्न इच्छुक हुनेछन्। सुरुमा, मानिसहरू सत्यताको अभ्यास गर्न हिचकिचाउँछन्। उदाहरणको रूपमा समर्पित रूपले एउटा कर्तव्य पूरा गर्ने कुरालाई लिऊँ: तँलाई आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्ने र परमेश्‍वरप्रति समर्पित हुने बारेमा केही बुझाइ छ, र तैँले त्यससित सम्बन्धित सत्यताहरूलाई पनि बुझेको छस्, तर तैँले आफैलाई कहिले परमेश्‍वरमा समर्पित गर्न सक्‍नेछस्? तैँले कहिले नाम र काम दुवैमा तेरा कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्‍नेछस्? यसको लागि एउटा प्रक्रियाको आवश्यकता पर्दछ। यस प्रक्रियाको क्रममा, तैंले धेरै कष्टहरू भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। कतिपय मानिसहरूले तेरो निराकरण गर्न सक्छन्, र अरूले तेरो आलोचना गर्न सक्छन्। सबैको आँखा तँमा केन्द्रित हुनेछ, तब मात्र तँ गलत रहेछस् र वास्तवमा खराब काम गर्ने व्यक्ति तँ नै होस्, तैँले भक्ति रहीत रूपमा तेरो कर्तव्य पूरा गरेको कार्य स्वीकार्य छैन र तँ असावधान वा लापरवाह हुनु हुँदैन भन्‍ने थाहा पाउन थाल्नेछस्। पवित्र आत्माले तँलाई भित्रबाट अन्तर्दृष्टि दिनुहुनेछ, र तैंले गल्ती गर्दा तेरो निन्दा गर्नुहुन्छ। यस प्रक्रियाको अवधिमा, तैंले आफ्नै बारेमा केही कुराहरू बुझ्नेछस्, र तँ अत्यन्तै अशुद्ध छस्, तैंले हृदयमा धेरै वटा व्यक्तिगत अभिप्रायहरू राख्छस्, र तेरा कर्तव्यहरू पूरा गर्दा तँमा धेरै वटा अत्याधिक इच्छाहरू हुन्छन् भन्‍ने जान्‍नेछस्। तैंले यी कुराहरूको सार बुझेपछि, तँ प्रार्थना र साँचो पश्चात्ताप गर्दै परमेश्‍वरको सामु आउन सक्छस्; यसरी, तँ ती अशुद्धताहरूबाट शुद्ध हुन सक्छस्। यदि तैंले आफ्ना व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गर्न यस्तै प्रकारले बारम्बार सत्यताको खोजी गरिस् भने, तैंले बिस्तारै विश्‍वासको सही मार्गमा पाइला टेक्नेछस्। कुनै व्यक्तिको भ्रष्टतालाई जति-जति शुद्ध पारिन्छ, उनीहरूका जीवनको स्वभाव उति नै बढी रूपान्तरण हुनेछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, अहिले तैंले आफ्नो कर्तव्य साँच्चै कति हदसम्म पूरा गर्दैछस्? तेरो स्वभाव रूपान्तरण भएपछि तैंले सत्यताअनुसार आफ्नो कर्तव्य कतिसम्म पूरा गर्दैछस्? यो कुरा जाँचेर, तैँले तेरो स्वभाव वास्तवमा कति हदसम्म रूपान्तरण भएको छ भनी जान्न सक्छस्। व्यक्तिको स्वभावमा रूपान्तरण हासिल गर्नु साधारण कुरा होइन; यसको अर्थ व्यवहारमा केही परिवर्तनहरू हुनु, सत्यको केही ज्ञान प्राप्त गर्नु, सत्यको प्रत्येक पक्षसँगको आफ्नो अनुभव अलि-अलि बताउन सक्नु वा अनुशासनमा परेपछि केही परिवर्तन गर्नु वा केही आज्ञाकारी हुनु मात्र होइन। यी कुराहरूले व्यक्तिको जीवन स्वभावको रूपान्तरणलाई जनाउँदैन। म यो किन भन्छु? तैँले केही थोकलाई पन्छ्याउन सके पनि, तैँले जे अभ्यास गरिरहेको हुन्छस् त्यो सत्यलाई साँच्चै अभ्यास गर्ने स्तरसम्म पुगेको हुँदैन। वा, सायद तँ केही समयका निम्ति उपयुक्त वातावरण र अनुकूल अवस्थामा भएकोले, वा तेरो वर्तमान अवस्थाले तँलाई बाध्य तुल्याएकोले, तँ यस प्रकारले व्यवहार गर्छस्। यसबाहेक, जब तेरो मनस्थिति स्थिर हुन्छ र पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ, तैँले अभ्यास गर्न सक्छस्। यदि तँ परीक्षाहरूबाट भएर जाँदै थिइस् र तीद्वारा अय्यूब वा पत्रुस, जसलाई परमेश्‍वरले मर् भनी भन्‍नुभयो, तिनीहरूले झैं दुःख भोगिरहेको थिइस् भने के तँ यसो भन्न सक्छस्, “यदि तपाईंलाई चिनेपछि म मरेँ भने पनि, त्यो ठीकै हुन्छ”? स्वभावको परिवर्तन रातारात हुँदैन, र तैँले सत्यतालाई बुझेपछि त्यसलाई तैँले हरेक वातावरणमा अभ्यास गर्न सक्छस् नै भन्ने छैन। यसमा मानिसको प्रकृति समावेश हुन्छ। कहिलेकहीँ तैँले सत्यको अभ्यास गरिरहेको छस् भन्‍ने जस्तो लाग्छ, तर वास्तविकतामा, तेरा कार्यहरूको प्रकृतिले तैँले त्यसो गरिरहेको छस् भन्‍ने देखाउँदैन। धेरै मानिसहरूमा निश्‍चित बाहिरी आचरण हुन्छन्, जस्तै आफ्नो परिवार र पेसालाई पन्साएर आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्न सक्नु, र यसरी तिनीहरू आफूले सत्य अभ्यास गरिरहेका छौं भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्। तापनि, तिनीहरूले सत्यको अभ्यास गरिरहेका छन् भनी परमेश्‍वरले पहिचान गर्नुहुन्न। यदि तैँले गर्ने सबै कुराको पछि कुनै व्यक्तिगत उद्देश्य र मिश्रण छ भने, तैँले सत्यको अभ्यास गरिरहेको हुँदैनस्; तैँले केवल सतही आचरण देखाइरहेको हुन्छस्। निश्‍चित रूपमा भन्नुपर्दा, परमेश्‍वरले सायद तेरो चरित्रलाई दोषी ठहराउनुहुनेछ; उहाँले त्यसको प्रशंसा वा सम्झना गर्नुहुनेछैन। यसलाई अझ विश्‍लेषण गर्दै जाँदा, तैँले खराबी गरिरहेको हुन्छस् र तेरो चरित्र परमेश्‍वरको विरोधमा हुन्छ। बाहिरबाट, तैँले कुनै कुरालाई रोकावट वा बाधा दिइरहेको हुँदैनस् र तैँले वास्तविक क्षति गरेको वा कुनै सत्यलाई उल्लङ्घन गरेको हुँदैनस्। यो तर्कसंगत र उचित देखिन्छ, तर तेरो कार्यको सार खराबी गर्ने र परमेश्‍वरको विरोध गर्ने कार्यसित सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण, तेरो स्वभावमा परिवर्तन आएको छ वा छैन र परमेश्‍वरको वचनको आधारमा तेरा कामहरूको पछि रहेका हेतुहरूलाई ध्यान दिँदै तैँले सत्यको अभ्यास गरेको छस् कि छैनस् सो तैँले निर्धारण गर्नुपर्छ। तेरा कार्यहरू मानवीय कल्पना र मानवीय अभिप्रायहरू अनुरूप छन् वा छैनन्, वा ती तेरा स्वाद सुहाउँदो छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मानवीय दृष्टिकोणमा निर्भर हुँदैन; त्यस्ता कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। बरु, यो त तँ परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार चलेको छस् कि छैनस्, तेरा कार्यहरूमा साँचो वास्तविकता छन् वा छैनन्, र तिनले उहाँका मागहरू र मापदण्डहरू पूरा गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषयमा उहाँले भन्नुहुने कुरामा निर्भर हुन्छ। परमेश्‍वरका मागहरूको तुलनामा आफैलाई नाप्नु मात्रै सटीक हुन्छ। स्वभावमा रूपान्तरण ल्याउने र सत्यलाई अभ्यास गर्ने कार्य मानिसहरूले कल्पना गरेजस्तो सरल र सजिलो हुँदैन। के अब तिमीहरूले यो बुझ्यौ? के तिमीहरूसँग यसको बारेमा कुनै अनुभव छ? जब समस्याको सारको कुरा आउँदछ, तिमीहरूले यसलाई नबुझ्न सक्छौ; तिमीहरूको प्रवेश अत्यन्तै सतही भएको छ। तिमीहरू चाँडै उठेर ढिलो सुतेर बिहानदेखि बेलुकीसम्‍मै दिनभर दौडधूप गर्छौ, तर तिमीहरूले आफ्नो जीवनको स्वभावमा रूपान्तरण प्राप्त गर्न सकेका छैनौ, र त्यस्तो परिवर्तनमा के समावेश हुन्छ भन्ने कुरा तिमीहरूले बुझ्न सक्दैनौ। यसको अर्थ तिमीहरूको प्रवेश अत्यन्तै सतही छ भन्‍ने हुन्छ, होइन र? तिमीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको जति लामो समय भए पनि, तिमीहरूले स्वभावमा रूपान्तरण हासिल गर्नका लागि अनुभूति गर्नुपर्ने सार र गहिरा चीजहरूलाई तिमीहरूले सायद महसुस गरेका छैनौ। तिमीहरूको स्वभाव परिवर्तन भएको छ भनेर भन्‍न सकिन्छ? परमेश्‍वरले तँलाई स्याबासी दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्‍न भनी तैँले कसरी जान्दछस्? कम्तीमा पनि, आफूले गर्ने सबै कार्यहरूमा तैँले आफूलाई अत्यन्तै अटल भएको महसुस गर्नेछस्, र तैंले तेरा कर्तव्यहरू पूरा गरिरहेको बेला, परमेश्‍वरको भवनमा कुनै पनि काम गरिरहेको बेला वा साधारण काम गरिरहेको बेला पवित्र आत्माले तँलाई अगुवाइ गर्नुभएको र ज्ञान दिइरहनुभएको महसुस गर्नेछस्। तेरो आचरण परमेश्‍वरको वचनसँग मिल्दोजुल्दो हुनेछ, र तैंले केही हदसम्म अनुभव प्राप्त गरेपछि, तैंले विगतमा जसरी व्यवहार गरिस् त्यो तुलनात्मक रूपमा उचित थियो भन्‍ने महसुस गर्नेछस्। तापनि, निश्‍चित अवधिसम्म अनुभव प्राप्त गरेपछि, यदि तैंले विगतमा गरेका केही कामहरू उचित थिएन जस्तो लाग्यो भने, र तँ तीप्रति असन्तुष्ट हुन्छस्, र तैंले गरेका कार्यहरूमा कुनै सत्यता थिएन भन्‍ने महसुस गर्छस् भने, तैंले गरेको सबै कुराहरू परमेश्‍वरको विरोधमा थिए भन्‍ने यसले प्रमाणित गर्छ। यो तेरा सेवा विद्रोहीपन, प्रतिरोध र काम गर्ने मानवीय तरिकाहरूले भरिएको थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “कसैको स्वभाव रूपान्तरण गर्ने बारेमा के थाहा हुनुपर्दछ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८४
मानिसहरूले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुराको मापन गर्ने क्रममा, ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा भनेको तिनीहरूले परमेश्‍वरबाट कुनै अत्याधिक थोकहरू चाहन्छन् कि चाहँदैनन्, अनि तिनीहरूको आफ्नै गुप्त अभिप्रायहरू छन् कि छैनन् भन्‍ने हो। यदि मानिसहरूले सधैँ परमेश्‍वरसँग माग गरिरहेका छन् भने, त्यसले तिनीहरू उहाँप्रति आज्ञाकारी छैनन् प्रमाणित गर्दछ। तँलाई जेसुकै भए पनि, यदि तैँले त्यो परमेश्‍वरबाट प्राप्त गर्न सक्दैनस् भने, सत्यको खोजी गर्न सक्दैनस् भने, सधैँ तेरा आफ्नै व्यक्तिपरक तर्कबाट बोलिरहेको हुन्छस् भने, र सधैँ तँ मात्र सही छस् भन्‍ने महसुस गर्छस् भने, र अझै पनि तँ परमेश्‍वरलाई शङ्का गर्न सक्छस् भने, तँ समस्यामा पर्नेछस्। त्यस्ता मानिसहरू परमेश्‍वरप्रति सबैभन्दा बढी अहङ्कारी र विद्रोही हुन्छन्। सधैँ परमेश्‍वरसँग माग गर्ने मानिसहरूले कहिल्यै पनि उहाँको आज्ञापालन गर्न सक्दैनन्। यदि तैँले परमेश्‍वरसँग माग गर्छस् भने, त्यसले तँ परमेश्‍वरसँग सौदाबाजी गर्दैछस्, तैँले आफ्नै विचारहरू चुनिरहेको छस्, र तेरा आफ्नै विचारअनुसार कार्य गरिरहेको छस् भन्‍ने प्रमाणित गर्दछ। यसो गरेर, तैँले परमेश्‍वरलाई धोका दिन्छस्, र तँमा आज्ञाकारीता हुँदैन। परमेश्‍वरसँग माग गर्नु मूर्खता हो; यदि तँ साँच्चै उहाँ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी विश्‍वास गर्छस् भने, तैँले उहाँसँग माग गर्ने हिम्मत गर्नेछैनस्, न त तँ उहाँसँग कुनै माग गर्ने योग्यको नै हुनेछस्, चाहे ती उचित होऊन् वा नहोऊन्। यदि तँसँग साँचो विश्‍वास छ, र उहाँ परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर विश्‍वास गर्छस् भने, उहाँको आराधना गर्ने र आज्ञापालन गर्ने बाहेक अरू कुनै विकल्प तँसँग हुनेछैन। आजका मानिसहरूसँग छनौट मात्र हुँदैन, तर परमेश्‍वरले तिनीहरूका आफ्नै विचारहरू अनुसार काम गरून् भनी माग समेत गर्छन्। तिनीहरूले आफ्नै विचारहरूलाई छनौट गर्छन् र तिनीहरूले भने अनुसार परमेश्‍वरले काम गरून् भनी माग गर्छन्, र तिनीहरू आफैले चाहिँ परमेश्‍वरका विचारहरू अनुसार काम गर्न आवश्यक ठान्दैनन्। त्यसैले, तिनीहरूभित्र कुनै साँचो विश्‍वास हुँदैन, न त तिनीहरूका विश्‍वासको कुनै सार नै हुन्छ। जब तैँले परमेश्‍वरसित थोरै मागहरू गर्न सक्छस्, तेरो साँचो विश्‍वास र तेरो आज्ञापालन बढ्नेछ, र तेरो समझशक्ति पनि तुलनात्मक रूपमा सामान्य हुनेछ। प्रायजसो के हुन्छ भने, मानिसहरू जति तर्कशील हुने प्रवृत्ति हुन्छ, र उनीहरूले जति धेरै स्पष्टीकरण दिन्छन्, उनीहरूलाई निराकरण गर्न उति नै गाह्रो हुन्छ। उनीहरूका मागहरू धेरै मात्र हुँदैनन्, तर उनीहरूलाई औँलो दिँदा डुँडुलो पनि निल्छन्। जब एउटा क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुन्छन्, तब उनीहरूले अर्को क्षेत्रमा माग गर्छन्, उनीहरू सबै क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुनुपर्दछ, र यदि तिनीहरू सन्तुष्ट भएनन् भने, उनीहरूले गुनासो गर्न थाल्छन्, र आफैलाई आशारहित ठान्छन्। पछि उनीहरू ऋणी र अफसोस महसुस गर्छन्, र उनीहरू धरधरी आँसु बगाउँदै रुन्छन्, र मर्न चाहन्छन्। त्यसको के फाइदा हुन्छ? के यसले समस्या समाधान गर्न सक्छ? त्यसैले कुनै घटना घट्नुभन्दा अघि तैंले आफ्नो प्रकृतिलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ—त्यसभित्र के-कस्ता कुराहरू छन्, तँलाई के मन पर्छ, र तैँले आफ्ना मागहरूद्वारा के प्राप्त गर्न चाहन्छस्। कतिपय मानिसहरू आफूमा केही योग्यता र वरदानहरू छ भन्‍ने विश्‍वास गर्छन्, र उनीहरू जहिल्यै पनि अगुवा बन्न चाहन्छन्, र अरूभन्दा माथि उठ्न चाहन्छन्, त्यसैले उनीहरू परमेश्‍वरले उनीहरूलाई प्रयोग गरून् भनी माग गर्छन्। र यदि परमेश्‍वरले उनीहरूलाई प्रयोग गर्नुभएन भने, उनीहरू भन्छन्: “हे परमेश्‍वर, तपाईं किन मलाई निगाह गर्नुहुन्न? मलाई धेरै प्रयोग गर्नुहोस्, म सुनिश्‍चितता दिन्छु, म आफैलाई तपाईंको निम्ति समर्पित गर्नेछु।” के यस्ता अभिप्रायहरू ठीक हुन्? परमेश्‍वरका लागि समर्पित हुनु राम्रो कुरा हो, तर परमेश्‍वरका लागि समर्पित हुने तिनीहरूका इच्छाले दोस्रो स्थान लिन्छ; उनीहरूका हृदयमा, उनीहरूले चाहने भनेको हैसियत हो—यही कुरामा उनीहरूले ध्यान केन्द्रित गर्छन्। यदि तैँले साँच्चै आज्ञापालन गर्न सक्छस् भने, उहाँले तँलाई प्रयोग गर्नुभए पनि वा नगर्नुभए पनि तैँले एउटै हृदय र मनले उहाँलाई पछ्याउनेछस्, तेरो कद भए पनि वा नभए पनि तैँले उहाँका निम्ति आफैलाई समर्पित गर्न सक्नेछस्। तब मात्र तँसित समझ हुनेछ र तँ परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्ने व्यक्ति हुनेछस्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “मानिसहरूले परमेश्‍वरसँग अत्यन्तै धेरै मागहरू गर्छन्” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८५
सृष्टि गरिएको प्राणीमा आफ्नो सृष्टिकर्ताप्रति हुनुपर्ने एक मात्र मनोवृत्ति भनेको आज्ञापालन हो, सर्तबिनाको आज्ञापालन। यो यस्तो कुरा हो, जसलाई आज केही मानिसहरूले स्वीकार्न सक्दैनन्। किनकि मानिसको कद धेरै सानो छ र तिनीहरू सत्य वास्तविकतारहित छन्। यदि यसले तेरो अवस्थाको वर्णन गर्छ भने, तँ परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न सक्षम हुनबाट धेरै टाढा छस्। मानिसलाई परमेश्‍वरको वचनद्वारा भरणपोषण र सिञ्चन गरिँदा, वास्तवमा मानिस एउटै कुराको लागि तयारी गर्दै हुन्छ। त्यो अन्त्यमा बिनासर्त परमेश्‍वरप्रति पूर्ण समर्पणता हासिल गर्न सक्नु हो, जुन बेला तँ, यो सृष्टि आवश्यक स्तरमा पुगेको हुनेछस्। कहिलेकहीं, परमेश्‍वरले जानाजानी त्यस्ता कार्यहरू गर्नुहुन्छ, जुन तेरा धारणाहरूसँग अमिल्दा हुन्छन्, जुन तेरा चाहनाहरूको विरुद्ध जान्छन्, वा जुन सिद्धान्तहरूको वा मानवीय विचारहरू, मानवता वा भावनाहरूको विरुद्धमा गएको जस्तो देखिन्छ, जसले तँलाई ती कुराहरू स्वीकार गर्न र बुझ्न असमर्थ बनाउँछ। तैंले त्यसलाई जुनसकै तरिकाले हेरे पनि सही देखिँदैन, तँ त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्दै सक्दैनस्, र उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो तँलाई केवल अनुचित जस्तो लाग्छ। त्यसो भए, यी कुराहरू गर्नमा परमेश्‍वरको उद्देश्य के हुन्छ त? यो तँलाई जाँच्नका निम्ति हो। परमेश्‍वरले के गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा तैंले कसरी र किन भनी छलफल गर्न आवश्यक छैन; तैंले गर्नुपर्ने कार्य भनेको उहाँ सत्य हुनुहुन्छ भनी तेरो विश्‍वासलाई कायम राख्नु र उहाँ तेरा सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, र उहाँ तेरा परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी पहिचान गर्नु मात्र हो। यो सबै सत्यताभन्दा उच्‍च छ, यो सारा सांसारिक बुद्धिभन्दा, मानिसको तथाकथित सदाचार, नैतिकता, ज्ञान, शिक्षा, दर्शन वा परम्परागत संस्कृतिभन्दा उच्‍च छ, र यो मानिसहरूबीचको स्नेह वा मित्रता वा तथाकथित प्रेम भन्दा पनि उच्‍च छ—यो कुनै पनि कुराभन्दा पूर्ण रूपमा उच्‍च हुन्छ। यदि तैँले यो कुरा बुझ्न सक्दैनस् भने, ढिलो वा चाँडो, जब तँलाई केही हुन्छ, तब तँ अन्त्यमा पश्‍चात्ताप गर्न र परमेश्‍वर कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ र उहाँले गर्नुहुने कामको महत्त्व कति छ भनी पहिचान गर्नअघि परमेश्‍वरको विरुद्धमा विद्रोह गर्न र भड्केर जान सक्छस्; वा, अझै नराम्रो के हुन सक्छ भने, त्यसको कारण तँ ठक्‍कर खान र पतन हुन सक्छस्। … कुनै एक व्यक्तिले परमेश्‍वरमा जति नै लामो समयदेखि विश्‍वास गरेको भए पनि, उनीहरूले जति नै लामो बाटोको यात्रा गरेका भए पनि, उनीहरूले जति नै धेरै काम गरेका भए पनि र उनीहरूले जति नै धेरै कर्तव्यहरू निर्वाह गरेका भए पनि, यी सबै समयले उनीहरूलाई एउटै कुराका लागि तयार पार्दै आएको हुन्छ: अन्त्यमा तैंले बिनासर्त, पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरप्रतिको समर्पणता हासिल गर्न सक्षम हुन। त्यसो भए, “बिनासर्त” भनेको अर्थ के हो त? यसको अर्थ तेरो व्यक्तिगत औचित्यहरूलाई बेवास्ता गर्नु, तेरो वस्तुगत तर्कलाई बेवास्ता गर्नु, र कुनै पनि कुरामा झगडा नगर्नु हो: तँ सृष्टि गरिएको एक प्राणी होस्, र तँ योग्य छैनस्। जब तँ परमेश्‍वरसँग झगडा गर्छस् तब तँ गलत स्थानमा हुन्छस्; जब तँ परमेश्‍वरको अगाडि आफैलाई न्ययोचित ठहराउने कोसिस गर्छस्, एकचोटि फेरि तँ गलत स्थानमा हुन्छस्; जब तँ परमेश्‍वरसँग तर्क गर्छस्, जब तँ किन भन्दै कारण सोध्न चाहन्छस्, वास्तवमा के हुँदैछ भनी बुझ्ने कोसिस गर्छस्, यदि तँ पहिले नबुझी आज्ञापालन गर्न सक्दैनस, र सबै कुरा तँलाई स्पष्ट भएपछि मात्र तँ समर्पित हुन्छस् भने, तँ एकपटक फेरि गलत स्थानमा हुन्छस्। जब तँ रहेको स्थान नै गलत हुन्छ, के परमेश्‍वरप्रतिको तेरो आज्ञापालन निरपेक्ष हुन्छ त? के तैँले परमेश्‍वरसित जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यस्तो व्यवहार गरिरहेको हुन्छस् त? के तैँले उहाँलाई सारा सृष्टिका प्रभुको रूपमा आराधना गर्छस् त? होइन, तैँले गर्दैनस्, त्यस्तो अवस्थामा परमेश्‍वरले तँलाई पहिचान गर्नुहुन्न। कुन-कुन कुराहरूले तँलाई परमेश्‍वरप्रति निरपेक्षित, बिनासर्तको आज्ञापालन हासिल गर्न सक्ने बनाउँछ? यो कसरी अनुभव गर्न सकिन्छ? एकातिर, सामान्य विवेक र सामान्य मानिसको बुद्धि चाहिन्छ; अर्कोतिर, तैंले आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्दा, सत्यको प्रत्येक पक्षलाई बुझ्न आवश्यक छ, ताकि तैँले परमेश्‍वरको इच्छा बुझ्न सक्। कहिलेकहीं मानिसको योग्यता कम हुनआउँछ र मानिससँग सबै सत्यता बुझ्ने शक्ति वा उर्जा हुँदैन। तापनि, त्यहाँ एक कुरा छः तँमाथि जस्तोसुकै वातावरण, मानिस, घटना, र परिस्थितिहरू आइलागे पनि र परमेश्‍वरले नै ती प्रबन्ध गर्नुभएको भए पनि, तँसँग सधैं एक आज्ञाकारी मनोवृत्ति हुनुपर्छ र तैँले किन भनी कारण सोध्नुहुँदैन। यदि यो मनोवृत्ति तेरो लागि धेरै परको कुरा हो र तँ परमेश्‍वरबाट जोगिने, परमेश्‍वरको बारेमा अनुमान लगाउनेसम्मको हदमा जान सक्छस्, वा मनमनै “परमेश्‍वरले जे गरिरहनुभएको छ त्यो वास्तवमै धार्मिक छ कि छैन भनी मैले विचार गर्नुपर्छ। उनीहरू परमेश्‍वर प्रेम हुनुहुन्छ भनी भन्छन्, उहाँले मसँग जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा प्रेम छ कि छैन र कहीं यही नै वास्तविक प्रेम हो कि होइन हेरौं,” भनी सोच्छस् भने, यदि तँ परमेश्‍वरले गरिरहनुभएका कार्यहरू तेरा धारणाहरूसँग मिल्छन् कि मिल्दैनन् भनी सधैं जाँचिरहन्छस्, परमेश्‍वरले तँलाई मनपर्ने कुराहरू गरिरहनुभएको छ कि छैन भनी हेर्छस् वा त्यो तैंले सत्यको रूपमा विश्‍वास गरेको कुरासित मेल खान्छ कि खाँदैन भनी हेर्छस् भने, तेरो स्थान गलत छ, र यसले तँलाई समस्यामा पार्नेछ र तैँले परमेश्‍वरको स्वभावलाई उल्लङ्घन गरेकोमा उत्तरदायी हुनुपर्नेछ।
— ख्रीष्ट विरोधीहरूको पर्दाफासको “तिनीहरूले अरूलाई सत्यता वा परमेश्‍वरको पालना गर्न होइन तर तिनीहरूको आफ्‍नै कुरा पालना गर्न लगाउँथे (२)” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८६
यदि तँ परमेश्‍वरको सार्वभौमिकतामा विश्‍वास गर्छस् भने, तैंले दैनिक घटनाहरू, चाहे ती राम्रो होस् वा नराम्रो, ती कुनै पनि विनाउद्देश्यका हुँदैनन् भन्‍ने विश्‍वास गर्नुपर्छ। यो कसैले जानी-जानी तँसँग कठोर व्यवहार गरेको वा तँलाई निशाना बनाइरहेको भन्‍ने हुँदैन; यो सब परमेश्‍वरले प्रबन्ध गर्नुभएको हुन्छ। परमेश्‍वरले किन यी सबै कुराहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा मिलाउनुहुन्छ? त्यो तँ को होस् भनी प्रकट गर्न वा तँलाई पर्दाफास गर्नका लागि होइन; तँलाई प्रकट गर्ने कार्य अन्तिम लक्ष्य होइन। लक्ष्यचाहिं तँलाई सिद्ध बनाउनु र मुक्ति दिनु हो। परमेश्‍वरले त्यो कसरी गर्नुहुन्छ? उहाँले तेरो आफ्नै भ्रष्ट स्वभाव, तेरो प्रकृति र सार, तेरा कमजोरीहरू र तेरो कमीबारे तँलाई थाहा गराउँदै यो सुरु गर्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई जानेर र ती कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझेर मात्र, तँ सत्यताको पछि लाग्न सक्छस् र तैँले बिस्तारै तेरो भ्रष्ट स्वभावलाई हटाउन सक्छस्। यो परमेश्‍वरले तँलाई मौका दिनुभएको हो। यो मौकालाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ त्यो तैंले जान्नुपर्छ, र तैंले परमेश्‍वरसँग टाउको जुधाउनु हुँदैन। निश्‍चित रूपमा, परमेश्‍वरले तेरो वरिपरि मिलाउनुभएका मानिसहरू, मामलाहरू, र परिस्थितिहरूको सामना गर्दा, ती कुराहरू तैंले चाहना गरे अनुसार छैनन् भनी बारम्बार महसुस नगर्; तीबाट बारम्बार उम्कने इच्छा नगर् वा सधैँ परमेश्‍वरलाई दोष लाउने र गलत प्रकारले बुझ्ने नगर्। यदि तँ निरन्तर यी कुराहरू गर्छस् भने, तैंले परमेश्‍वरको कामको अनुभव गरिरहेको हुँदैनस्, र त्यसले तेरो निम्ति सत्यता वास्तविकतामा प्रवेश गर्न धेरै कठिन बनाउनेछ। जब तैंले पूर्ण रूपमा बुझ्न नसक्‍ने कुनै कुराको सामना गर्छस्, जब कुनै कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ, तैंले अधीनमा बस्न सिक्नुपर्छ। तैंले परमेश्‍वरको अगाडि आएर अझ धेरै प्रार्थना गर्दै यो काम सुरु गर्नुपर्छ। त्यसरी, तैंले थाहै नपाई, तेरो आन्तरिक अवस्थामा परिवर्तन आउनेछ, र तैँले आफ्नो समस्या समाधान गर्नका निम्ति सत्यताको खोजी गर्न सक्नेछस्। त्यसरी, तैँले परमेश्‍वरको कामको अनुभव गर्न सक्नेछस्। जब यस्तो हुन्छ, तँभित्र सत्यता वास्तविकता आउँछ, र तैँले यसरी नै उन्नति गर्नेछस् र तेरो जीवनको अवस्थामा रूपान्तरण आउनेछ। तँ यो परिवर्तनबाट भएर गएपछि र तैँले यो सत्यता वास्तविकता प्राप्त गरेपछि, तैंले कद पनि प्राप्त गर्नेछस्, र कदको साथमा जीवन पनि आउनेछ। यदि कुनै व्यक्ति सधैँ भ्रष्ट शैतानी स्वभावको आधारमा जिउँछ भने, उनीहरूसँग जति धेरै उत्साह वा ऊर्जा भए पनि, उनीहरूसँग कद, वा जीवन छ भनेर मानिँदैन। परमेश्‍वरले प्रत्येक व्यक्तिमा काम गर्नुहुन्छ, र उहाँको काम गर्ने तरिका जस्तोसुकै भए पनि, उहाँले आफ्नो सेवामा जस्तोसुकै प्रकारको मानिस, मामला र परिस्थितिहरूलाई प्रयोग गर्नुभए पनि, वा उहाँका वचनहरूको शैली जस्तो प्रकारको भए पनि, उहाँको अन्तिम लक्ष्य एउटै मात्र हुन्छ: तँलाई मुक्ति दिनु। तँलाई मुक्ति दिनुभन्दा अघि, उहाँले तँलाई रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ, त्यसैले तैंले थोरै कष्ट नभोग्नु कसरी सम्भव हुन्छ? तैंले कष्ट भोग्नु पर्नेछ। यस कष्टमा धेरै कुराहरू समावेश हुन सक्छन्। तैंले आफैलाई चिन्न सक् भनेर कहिलेकहीँ परमेश्‍वरले तेरो वरपरका मानिसहरू, मामलाहरू र परिस्थितिहरू खडा गर्नुहुन्छ वा तँलाई प्रत्यक्ष निराकरण गरिन्छ, छिँवलिन्छ र खुलासा गरिन्छ। शल्यक्रियाको टेबलमा पस्रिएको व्यक्तिजस्तै—राम्रो परिणाम पाउनका निम्ति तैंले केही पीडा भोग्नुपर्छ। यदि हरेक पटक तँलाई छिँवलिंदा र तँलाई निराकरण गरिँदा, र हरेक पटक उहाँले मानिसहरू, मामलाहरू र परिस्थितिहरू खडा गर्नुहुँदा, त्यसले तेरा भावनाहरूलाई जगाउँछ र तँलाई प्रोत्साहन दिन्छ भने, त्यो सही हुन्छ, र तँसित कद हुनेछ र तँ सत्यता वास्तविकता प्रवेश गर्नेछस्। हरेक पटक तँलाई छिँवल्दा र निराकरण गरिँदा, र परमेश्‍वरले तेरो वातावरण खडा गर्नुहुँदा, हरेक पटक नै तँलाई कुनै पनि प्रकारको पीडा वा असुविधा अनुभूति हुँदैन, र तैँले केही पनि महसुस गर्दैनस् भने, यदि तँ परमेश्‍वरको सामु आउँदैनस् र उहाँको इच्छाको खोजी गर्दैनस्, प्रार्थना गर्दैनस् र सत्यताको खोजी पनि गर्दैनस् भने, तँ साँच्चै अति चेतनाशून्य छस्! यदि व्यक्ति अत्यन्तै चेतनाशून्य छ र आत्मिक रूपमा कहिल्यै सचेत हुँदैन भने, परमेश्‍वरसँग तिनीहरूमा काम गर्ने कुनै उपाय हुँदैन। उहाँले भन्नुहुनेछ, “यो व्यक्ति अति नै चेतनाशून्य छ, र धेरै गहन रूपमा भ्रष्ट भएको छ। मैले गरेका सबै कुरा र मैले गरेका सबै प्रयासहरूलाई हेर। मैले त्यसमाथि धेरै कार्य गरेको छु, तर म अझै पनि त्यसको हृदयलाई प्रभावित गर्न वा त्यसको आत्मालाई जगाउन सक्दिनँ। यो व्यक्ति समस्यामा पर्नेछ; त्यसलाई मुक्ति दिन सजिलो छैन।” यदि परमेश्‍वरले तेरो लागि केही वातावरण, मानिसहरू, मामलाहरू, र काम-कुराहरू मिलाउनुहुन्छ भने, यदि उहाँले तँलाई छिँवल्नुहुन्छ र निराकरण गर्नुहुन्छ भने र यदि तैंले त्यसबाट पाठ सिक्छस् भने, यदि तैंले परमेश्‍वरको सामु आउन सिकेको छस् भने, सत्यको खोजी गर्न सिकेको छस्, र अनजानमा, अन्तर्दृष्टि र प्रकाश पाएको छस् र सत्यता प्राप्त गरेको छस् भने, यदि तैंले यी वातावरणहरूमा परिवर्तन अनुभव गरेको छस्, इनामहरू कटनी गरेको छस्, र उन्नति गरेको छस् भने, यदि तैंले परमेश्‍वरको इच्छालाई अलि-अलि बुझ्न थालेको छस् र गुनासो गर्न छोडेको छस् भने, यी सबैको अर्थ तँ यी वातावरणहरूका सबै परीक्षाहरूको बीचमा दह्रो भई खडा भएको छस्, र तैँले त्यो जाँचको सामना गरेको छस् भन्ने हुन्छ। त्यसरी तँ त्यो कठिन जाँचबाट पार भएर गएको हुनेछस्।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “सत्यता प्राप्त गर्नको लागि तैंले आफ्नो वरिपरिका मानिसहरू, मामलाहरू र स्थितिहरूबाट सिक्नुपर्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८७
मण्डलीका अगुवाहरू र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो काम गर्दा दुई वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ: एउटा हो, कामको बन्दोबस्तहरूद्वारा निर्धारित गरिएका ठीक सिद्धान्तहरू अनुसार काम गर्नु, ती सिद्धान्तहरू कहिल्यै पनि उल्लङ्घन नगर्नु र तिनीहरूले गरेका कल्पना वा तिनीहरूका आफ्‍नै विचारलाई तिनीहरूका कामको आधार नबनाउनु। तिनीहरूले गर्ने सबै कुरामा, तिनीहरूले परमेश्‍वरको घरको काममा चासो देखाउनु पर्छ, र सधैँ त्यसको हितलाई पहिलो स्थानमा राख्नु पर्छ। अर्को कुरा—यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ—सबै कुरामा तिनीहरूले पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनलाई पछ्याउने कार्यमा ध्यान दिनुपर्छ, र परमेश्‍वरको वचन कडाइका साथ पालन गर्दै सबै कुरा गर्नुपर्छ। यदि तँ अझै पनि पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनको विरुद्धमा जान सक्छस् भने, वा यदि तँ हठी बन्दै आफ्नै विचारहरूमा चल्छस्, र आफ्नै कल्‍पनाहरू अनुसार कार्यहरू गर्छस् भने, तेरा कार्यहरू परमेश्‍वरको विरुद्ध अति गम्भीर प्रतिरोध बन्नेछन्। पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि र मार्गनिर्देशनप्रति बारम्बार आफ्नो पिठ्यूँ फर्काउँदा त्यसले तँलाई मृतान्तमा पुऱ्याउँछ। यदि तैँले पवित्र आत्माको काम गुमाइस् भने, तैँले काम गर्न सक्नेछैनस्; र यदि तैँले कुनै प्रकारले काम गर्न सकिस् भने पनि, तैँले केही पनि हासिल गर्नेछैनस्। काम गर्ने क्रममा पालन गर्नुपर्ने दुई मुख्य सिद्धान्तहरू यिनै हुन्: एउटा भनेको माथिबाटका बन्दोबस्तहरू अनुसार तेरा काम ठीकसँग गर्नु, साथै माथिबाट तोकिएका सिद्धान्तहरू अनुसार कार्य गर्नु; र अर्कोचाहिँ तँभित्रको पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनलाई पछ्याउनु। यी दुई बुँदाहरूलाई बुझेपछि तैँले गल्तीहरू गर्ने सम्‍भावना हुनेछैन। तिमीहरू, जसको अनुभव यस क्षेत्रमा अझै सीमित छ, तिमीहरूका आफ्नै विचारहरूले तिमीहरूको कामलाई अझ केही बढी अशुद्ध तुल्याउँछ। कहिलेकहीँ, पवित्र आत्माबाट आउने तँभित्रको ज्ञान वा अगुवाइलाई तैँले बुझ्न सक्दैनस्; अरू बेला, तैंले त्यो बुझेको जस्तो देखिन्छ, तर तैंले त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सम्भावना हुन्छ। तँ सधैँ मानवीय तरिकाले कल्पना गर्छस् वा निष्कर्षमा पुग्छस्, तँलाई जे उचित लाग्छ त्यसै गर्छस्, पवित्र आत्माका उद्देश्यहरूको कुनै वास्ता गर्दैनस्। पवित्र आत्माबाट आउने कुनै पनि अन्तर्दृष्टिलाई पन्छ्याउँदै तँ पूर्ण रूपमा आफ्नै विचारअनुसार काम गर्छस्। यस्ता परिस्थितिहरू बारम्बार आउँछन्। पवित्र आत्माको भित्री मार्गनिर्देशन कुनै पनि प्रकारले अनुभव गर्न सक्नेभन्दा परको हुँदैन; यो वास्तवमा अति सामान्य हुन्छ। अर्थात्, तेरो हृदयको गहिराइमा, तँलाई व्यवहार गर्ने उचित र सर्वोत्तम तरिका यही हो भन्‍ने थाहा हुन्छ। यो विचार वास्तवमा एकदम स्पष्ट छ; यो तेरो सोचविचारबाट आएको होइन, तर तैँले हृदयभित्रबाट उब्जाएको एउटा भावना थियो, र कहिलेकहीँ तँलाई केले त्यस्तो प्रकारले व्यवहार गर्ने तुल्याउँछ सो तैँले बुझ्दैनस्। यो प्रायजसो पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि बाहेक अरू केही हुँदैन, र अधिकांश मानिसहरूमा सामान्यतः यस्तै हुने गर्दछ। व्यक्तिको आफ्ना विचारहरू प्रायजसो धारणा र सोचविचारबाट आउँदछ, र सबै आफ्‍नै इच्‍छाबाट, व्यक्तिले आफ्‍नो व्यक्तिगत फाइदा पाउन सक्‍ने क्षेत्रहरूको बारेमा रहेका विचारहरू, र आफ्नै निम्ति के-के फाइदाहरू हुन सक्छन् भन्ने विचारहरू मिश्रित हुन्छन्; मानिसको प्रत्येक निर्णयमा यी कुराहरू हुन्छन्। तापनि, पवित्र आत्माको मार्गनिर्देशनमा कुनै पनि हिसाबले त्यस्तो मिश्रण हुँदैन। पवित्र आत्माबाट प्राप्त हुने मार्गनिर्देशन वा अन्तर्दृष्टिमा सावधानीपूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ; विशेष गरी मुख्य विषयहरूमा, त्यसलाई बुझ्नका निम्ति तँ होसियार हुनुपर्छ। आफ्‍नै दिमाग प्रयोग गर्न मन पराउने, र आफ्नै विचारहरूमा काम गर्न मन पराउने मानिसहरू, तिनीहरूले त्यस्तो मार्गनिर्देशन वा अन्तर्दृष्टिलाई गुमाउने धेरै सम्‍भावना हुन्छ। योग्य अगुवाहरू र कार्यकर्ताहरूले पवित्र आत्माको काममा ध्यान दिन्छन्। जसले पवित्र आत्माको आज्ञापालन गर्छन् तिनीहरू परमेश्‍वरसँग डराउँछन् र थकित नभई सत्यको पछि लाग्छन्। परमेश्‍वरलाई सन्तुष्ट पार्न र उचित रूपले उहाँको गवाही दिनका निम्ति व्यक्तिले आफ्‍नो काममा मिलावट र अभिप्रायहरूका तत्वहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ, त्यसपछि कामको कति भाग मानिसको विचारद्वारा प्रेरित छ, र कति पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टिद्वारा प्रेरित छ, र कतिचाहिँ परमेश्‍वरको वचनसँग मिल्दछ त्यो हेर्नुपर्छ। तैँले लगातार, र सबै परिस्थितिहरूमा, आफ्ना बोलीवचनहरू र कार्यहरूलाई जाँच्नुपर्छ। यस तरिकाले बारम्बार अभ्यास गर्दा त्यसले तँलाई परमेश्‍वरको सेवा गर्ने सही मार्गमा राख्दछ। परमेश्‍वरको सेवा उहाँकै अभिप्रायहरू अनुरूप प्राप्त गर्नका निम्ति व्यक्तिमा धेरै सत्यताहरू हुनु आवश्यक पर्छ। सत्य बुझेपछि मात्र मानिसहरूसँग समझशक्तिको क्षमता हुन्छ र तिनीहरूका आफ्नै विचारहरूबाट उत्पन्न हुने कुरा र तिनलाई केले उत्प्रेरित गर्छ त्यसलाई जनाउने कुरालाई चिन्न सक्छन्। तिनीहरूले मानिसका अशुद्धताहरू, साथै सत्यको आधारमा काम गर्नुको अर्थ के हो सो बुझ्न सक्छन्। त्यसपछि मात्र तिनीहरूले अझ शुद्ध रूपमा कसरी समर्पित हुने सो जान्न सक्छन्। सत्यताविना, मानिसहरूले समझशक्तिको प्रयोग गर्नु असम्भव छ। एउटा भ्रमित व्यक्तिले उसको आफ्नै भ्रष्टता प्रकट हुनु भनेको के हो वा परमेश्‍वरको प्रतिरोध गर्नुको अर्थ के हो भनी नजानी आफ्नो जीवनभरि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको हुन सक्छ, किनकि उसले सत्यतालाई बुझ्दैन; त्यो विचार उसको मनमा अस्तित्वमा समेत रहेको हुँदैन। अत्यन्तै कम क्षमता भएका मानिसहरूका लागि, सत्यता तिनीहरूको पहुँचदेखि बाहिर हुन्छ; त्यस विषयमा तैँले उनीहरूसित जति नै सङ्गति गरे पनि उनीहरूले अझै बुझ्दैनन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू भ्रममा परेका हुन्छन्। तिनीहरूको विश्‍वासमा, भ्रमित मानिसहरूले परमेश्‍वरको गवाही दिन सक्दैनन्; तिनीहरूले थोरै मात्र सेवा गर्न सक्छन्। परमेश्‍वरले सुम्पनुभएको काम पूरा गर्न यी दुई सिद्धान्तहरू बुझ्नु आवश्यक छ। व्यक्तिले माथिबाट गरिएको कामको बन्दोबस्तहरूलाई कडाइका साथ पालन गर्नुपर्छ, र पवित्र आत्माको कुनै मार्गनिर्देशन पालन गर्नमा ध्यान दिनैपर्छ। यी दुई वटा सिद्धान्तहरू बुझेपछि मात्र व्यक्तिको कार्य प्रभावकारी हुन सक्छ र परमेश्‍वर सन्तुष्ट हुन सक्नुहुन्छ।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “अगुवाहरू र कार्यकर्ताहरूका निम्ति कामका मुख्य सिद्धान्तहरू” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८८
पत्रुसले खोजेको कुरा भनेको आफैलाई जान्नु र परमेश्‍वरको वचनको शोधनद्वारा र परमेश्‍वरले तिनलाई प्रदान गर्नुभएका विभिन्‍न परीक्षाहरूमा प्रकट गरिएको कुरा बुझ्नु थियो। जब पत्रुसले आफैलाई साँचो रूपमा बुझे, तब तिनले मानिसहरू कति गहन रूपमा भ्रष्ट भएका छन्, उनीहरू परमेश्‍वरको सेवा गर्नका निम्ति कति धेरै बेकम्मा र अयोग्य छन्, र उनीहरू उहाँको सामु जिउने योग्यको छैनन् भन्‍ने बुझे। त्यसपछि पत्रुस परमेश्‍वरको सामु लम्‍पसार परे। आखिरमा तिनले यस्तो सोचे, “परमेश्‍वरलाई चिन्नु नै सबैभन्दा अनमोल कुरा हो! यदि म उहाँलाई चिन्नुभन्दा पहिले नै मरेँ भने, त्यो दुःखको कुरा हुनेछ; मलाई लाग्छ, परमेश्‍वरलाई चिन्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, अर्थपूर्ण कुरा हो। यदि मानिसले परमेश्‍वरलाई चिन्दैन भने, ऊ जिउने योग्यको हुँदैन, र ऊसित जीवन पनि हुँदैन।” पत्रुसको अनुभव यो अवस्थामा पुगिसक्दा, तिनले आफ्नै स्वभावलाई जान्‍न पुगे र यसको बारेमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो बुझाइ प्राप्त गरे। सायद पत्रुसले आजका मानिसहरूले जस्तो यसको स्पष्ट वर्णन गर्न सकेनन्, तापनि उनी साँच्चै यो अवस्थामा पुगेका थिए। त्यसकारण, जीवनको पछि लाग्नु र परमेश्‍वरद्वारा सिद्धता प्राप्त गर्नका लागि मानिसले परमेश्‍वरका वाणीहरूबाट आफ्नो स्वभावलाई जान्नु आवश्यक हुन्छ, साथै आफ्‍नो स्वभावका पक्षहरू बुझ्नु र शब्दहरूमा त्यसको सही वर्णन गर्नु, स्पष्ट र सरल रूपमा बोल्नु आवश्यक हुन्‍छ। आफूलाई राम्ररी चिन्नु भनेको यही हो, र तैँले परमेश्‍वरले चाहनुभएको परिणाम प्राप्त गरेको हुनेछस्। यदि तेरो ज्ञान अहिलेसम्म यस बिन्दुमा पुगेको छैन, तर तैँले आफैलाई चिनेको दाबी गर्छस् र तैंले जीवन प्राप्त गरेको छस् भनी भन्छस् भने, के तैंले सेखी गरिरहेको हुँदैनस् र? तैँले आफैलाई चिन्दैनस्, न त परमेश्‍वरको अगाडि तँ के होस्, तैंले मानव हुनुका मापदण्डहरू साँच्चै पूरा गरेको छस् कि छैनस् वा तँभित्र अझै पनि कसरी धेरै शैतानिक तत्वहरू छन् भन्‍ने कुरा नै जान्दछस्। तँ कसको होस् भन्ने विषयमा तँ अझै पनि अस्पष्ट छस्, र तँसँग अझै पनि आफ्नै बारेमा कुनै ज्ञान छैन—त्यसैले परमेश्‍वरको सामु तँसँग कसरी तर्कशक्ति हुनसक्छ? जब पत्रुसले जीवनको खोजी गरिरहेका थिए, तिनले परीक्षाहरूको अवधिमा आफूलाई जाँच्न र आफ्नो स्वभाव बदल्‍नमा आफ्‍नो ध्यान केन्द्रित गरे, र तिनले परमेश्‍वरलाई चिन्ने प्रयास गरे, अनि अन्त्यमा तिनले सोचे, “मानिसहरूले जीवनमा परमेश्‍वरको ज्ञान खोज्नुपर्छ; उहाँलाई चिन्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि म परमेश्‍वरलाई चिन्दिनँ भने, म मरेपछि शान्तिमा विश्राम गर्न सक्दिनँ। मैले उहाँलाई चिनेपछि, यदि परमेश्‍वरले मलाई मर्नुपर्छ भनी भन्नुभयो भने, म सबैभन्दा सन्तुष्ट भई त्यसो गर्नेछु; म अलिकति पनि गुनासो गर्नेछैनँ, र मेरो सम्पूर्ण जीवन पूर्ण हुनेछ।” पत्रुसले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न थाल्‍नसाथ उनी यस स्तरको बुझाइ प्राप्त गर्न वा तुरुन्तै यस बिन्दुमा पुग्न सकेनन्; पहिले उनी धेरै पटक ठूला-ठूला परीक्षाहरूबाट भएर जानु परेको थियो। तिनले परमेश्‍वरलाई चिन्‍नुको महत्त्वलाई अनुभूति गर्नुभन्दा पहिले, तिनको अनुभव एक निश्चित विन्दुसम्‍म पुग्नुपर्थ्यो, र तिनले आफूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नुपर्थ्यो। त्यसकारण, पत्रुसले लिएको मार्ग जीवन प्राप्त गर्ने र सिद्धता बन्ने मार्ग थियो; तिनको निश्‍चित अभ्यास मुख्य रूपमा यही पक्षमा केन्द्रित थियो।
तिमीहरू सबै अहिले कुन मार्गमा हिँडिरहेका छौ? यदि जीवनको खोजी गर्ने, आफैलाई बुझ्ने र परमेश्‍वरलाई जान्ने हकमा यो पत्रुसकै स्तरमा छैन भने, तँ पत्रुसको मार्गमा हिँडिरहेको छैनस्। आजभोलि, धेरैजसो मानिसहरू यस्तै प्रकारको अवस्थामा छन्: “आशिषहरू प्राप्त गर्नको लागि, मैले आफूलाई परमेश्‍वरमा समर्पित गर्नुपर्दछ र उहाँको निम्ति मूल्य चुकाउनुपर्छ। आशिषहरू प्राप्त गर्नका लागि, मैले सबै कुरा परमेश्‍वरको लागि त्याग्नुपर्छ; मैले उहाँले मलाई सुम्पनुभएको काम पूरा गर्नुपर्छ र मेरो कर्तव्य राम्रोसँग पूरा गर्नुपर्दछ।” यसमाथि आशिषहरू पाउने अभिप्रायको प्रभुत्व हुन्छ, जुन परमेश्‍वरबाट इनाम र मुकुट प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफूलाई पूर्ण रूपमा अर्पण गर्नुको एउटा उदाहरण हो। त्यस्ता मानिसहरूको हृदयमा सत्यता हुँदैन, र निश्‍चय उनीहरूको बुझाइमा सिद्धान्तका केही शब्द मात्र समावेश हुन्छन्, जसलाई उनीहरूले जहाँ गए पनि देखाउँछन्। उनीहरूको मार्ग पावलको मार्ग हो। त्यस्ता मानिसहरूको विश्‍वास भनेको निरन्तर परिश्रम गर्ने कार्य हो, र तिनीहरूले आफ्‍नो हृदयको गहिराइमा के सोचेका हुन्छन् भने, उनीहरूले जति धेरै परिश्रम गर्छन् त्यसले परमेश्‍वरप्रतिको उनीहरूको बफादारीतालाई त्यतिकै प्रमाणित गर्छ; उनीहरूले जति धेरै परिश्रम गर्छन्, उनीहरू त्यति नै बढी परमेश्‍वरद्वारा मुकुट प्राप्त गर्ने योग्यका हुन्छन्, र उहाँको घरमा सबैभन्दा महान् आशिषहरू पाउँछन्। उनीहरूलाई के लाग्छ भने, यदि उनीहरूले कष्ट भोग्न, प्रचार गर्न र ख्रीष्टको लागि ज्यान दिन सके भने, यदि उनीहरूले आफ्नै जीवन बलिदान दिन सके भने, र यदि परमेश्‍वरले उनीहरूलाई सुम्पनुभएका सबै जिम्मेवारीहरू तिनीहरूले पूरा गर्न सके भने, उनीहरू परमेश्‍वरको सबैभन्दा आशिषित मानिसहरू मध्येमा—सबैभन्दा महान् आशिषहरू पाउनेहरू मध्येमा—पर्नेछन्, त्यसपछि उनीहरूले मुकुटहरू पाउने निश्चित हुनेछ। पावलले यही कल्पना गरेका थिए र तिनले यही कुरा खोजेका थिए; तिनले हिँडेको मार्ग ठीक यही थियो, र यस्तै विचारहरूको मार्गदर्शनमा तिनले परमेश्‍वरको सेवा गर्ने काम गरे। के त्यस्ता विचार र उद्देश्यहरू शैतानी स्वभावबाट उत्पन्न हुँदैनन् र? यो त पृथ्वीमा हुँदा आफू ज्ञानको पछि लाग्नुपर्छ, र त्यो प्राप्त गरेपछि मात्र भीडबाट बाहिर निस्किन, अधिकृतहरू बन्‍न र प्रतिष्ठा पाउन सकिन्छ भन्‍ने कुरामा विश्‍वास गर्ने सांसारिक मानिसहरू जस्तै हो; उनीहरूलाई के लाग्छ भने, प्रतिष्ठा प्राप्त गरेपछि उनीहरूले आफ्नो महत्वाकांक्षालाई पूरा गर्न र आफ्‍ना घर र व्यवसायलाई निश्चित तहसम्म ल्याउन सक्छन्। के सबै अविश्‍वासीहरू यही मार्गमा हिँड्दैनन् र? यो शैतानी स्वभावको प्रभुत्वमा परेका मानिसहरू आफ्नो विश्‍वासमा पावलजस्तो मात्र हुन सक्छन्: “आफैलाई परमेश्‍वरको निम्ति अर्पण गर्न मैले सबै कुरा त्याग्नुपर्छ; म उहाँको सामु विश्‍वासयोग्य हुनुपर्छ र आखिरमा, मैले सबैभन्दा उत्कृष्ट मुकुट र सबैभन्दा ठूलो आशिष् पाउनेछु।” सांसारिक थोकहरूको पछि लाग्ने सांसारिक मानिसहरूको मनोवृत्ति पनि यस्तै हुन्छ; उनीहरू कुनै पनि हालतमा फरक हुँदैनन्, र त्यही प्रकृतिको अधीनमा हुन्छन्। जब संसारमा मानिसहरूसित यस प्रकारको शैतानी स्वभाव हुन्छ, तब उनीहरूले ज्ञान, प्रतिष्ठा, शिक्षा प्राप्त गर्न खोज्छन्, र भीडभन्दा अलग हुन खोज्छन्; परमेश्‍वरको घरमा उनीहरूले आफैलाई परमेश्‍वरको लागि अर्पण गर्ने, विश्‍वासयोग्य हुने र अन्त्यमा मुकुट र ठूला आशिष्‌हरू पाउने कोसिस गर्नेछन्। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेपछि, यदि मानिसहरूमा सत्यता हुँदैन र उनीहरूको स्वभावमा परिवर्तन भएको हुँदैन भने, निश्चय उनीहरू यही मार्गमा हुनेछन्। यो कसैले पनि स्वीकार गर्न नसक्‍ने वास्तविकता हो, र यो पत्रुसको भन्दा बिलकुलै फरक मार्ग हो। तिमीहरू सबै अहिले कुन मार्गमा छौं? तैंले पावलको मार्ग अपनाउने योजना गरेको नभए पनि, तेरो प्रकृतिले नै तँ यस बाटोमा हिँड्छस्, र तँ आफै त्यस दिशामा जाँदैछस् भन्ने देखाउँछ। तैंले पत्रुसको मार्गमा पाइला टेक्न चाहे पनि, यदि कसरी त्यसो गर्ने भन्नेबारे तँ स्पष्ट छैनस्, तैँले नचाहेर पनि पावलको मार्ग अपनाउनेछस्: परिस्थितिको वास्तविकता यही हो।
आजको समयमा व्यक्ति कसरी पत्रुसको मार्गमा हिँड्नुपर्छ? यदि तैँले पत्रुस र पावलका मार्गहरू बीचको भिन्नतालाई छुट्याउन सक्दैनस् भने, वा यदि तँ तीप्रति खासै परिचित छैनस् भने, तैंले पत्रुसको बाटोमा हिँड्छु भनेर जति नै दाबी गरे पनि, ती खोक्रा शब्‍दहरू मात्र हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले तँलाई पत्रुसको मार्ग के हो र पावलको मार्ग के हो भन्ने कुराको स्पष्ट ज्ञान हुनुपर्छ। यदि तैँले पत्रुसको मार्ग जीवन मार्ग हो, र सिद्ध बनाउने एक मात्र मार्ग हो भन्‍ने कुरा स्पष्ट बुझ्छस् भने मात्र तैँले सत्यताहरू र उनको मार्ग अपनाउने विशेष तरिकाहरू जान्न र बुझ्न सक्नेछस्। यदि तैँले पत्रुसको मार्गलाई बुझ्दैनस् भने, तैंले लिने मार्ग निश्चय नै पावलको मार्ग हुनेछ, किनकि तेरो निम्ति अर्को कुनै मार्ग हुनेछैन; तँसँग कुनै विकल्प हुनेछैन। जुन मानिसहरूमा सत्यता हुँदैन र कुनै संकल्प हुँदैन उनीहरूलाई पत्रुसको बाटोमा हिँड्न गाह्रो हुनेछ। परमेश्‍वरले अहिले तिमीहरूलाई मुक्ति र सिद्धताको मार्ग प्रकट गर्नुभएको छ भनेर भन्‍न सकिन्छ। यो परमेश्‍वरको अनुग्रह र उत्थान गर्ने कार्य हो, र तिमीहरूलाई पत्रुसको मार्गमा डोर्‍याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। परमेश्‍वरको मार्गदर्शन र अन्तर्दृष्टिविना, कसैले पनि पत्रुसको मार्ग लिन सक्नेछैन; एक मात्र विकल्प भनेको पावलको विनाशको पाइलाहरू पछ्याउँदै पावलको मार्गमा ओर्लनु मात्र हुनेछ। त्यो बेला पावललाई त्यो बाटोमा हिँड्नु गलत हो जस्तो लागेको थिएन; तिनले यो बाटो नै सही हो भनी पूर्ण विश्‍वास गरेका थिए। तिनीसित सत्यता थिएन, र तिनी विशेष गरी स्वभावमा परिवर्तनबाट भएर गएनन्। तिनले आफैमा धेरै नै विश्‍वास गर्थे, र त्यो मार्गमा हिँड्ने कार्यमा कुनै पनि समस्या छैन भन्‍ने तिनलाई लागेको थियो। तिनी पूर्ण हिम्मतसाथ र पूर्ण आत्मविश्‍वाससाथ निरन्तर अगाडि बढिरहे। अन्त्यमा, तिनी कहिल्यै होसमा आएनन्; तिनले अझै पनि तिनी जिउनु भनेको ख्रीष्ट हो भन्‍ने सोचे। त्यसरी, पावल आखिरीसम्म त्यही ओह्रालो बाटोमा हिँडिरहे, अनि त्यस बेला अन्त्यमा तिनलाई दण्ड दिइयो, र तिनका निम्ति सबै कुरा समाप्त भयो। पावलको मार्गमा तिनी आफैलाई चिन्ने कुरा समावेश थिएन, स्वभावमा परिवर्तन गर्ने कुरा त निकै परको कुरा थियो। तिनले आफ्नै प्रकृतिको बारेमा कहिल्यै पनि विश्लेषण गरेनन्, न त तिनी के थिए भन्ने कुराको बारमा नै तिनले कुनै ज्ञान प्राप्त गरे; तिनले यति मात्र जान्दथे कि येशूलाई गरिएको सतावटको मुख्य दोषी तिनी नै थिए। तिनले आफ्नै स्वभावको बारेमा अलिकति पनि ज्ञान प्राप्त गरेका थिएनन्, र आफ्‍नो काम समाप्त गरेपछि, तिनले वास्तवमा आफू ख्रीष्ट भएको र तिनलाई इनाम दिइनुपर्छ भन्‍ने लागेको थियो। पावलले गरेका काम केवल परमेश्‍वरका निम्ति गरिएको सेवा थियो। किनकि व्यक्तिगत रूपमा, पावलले पवित्र आत्माबाट केही प्रकाश प्राप्त गरेका भए पनि, तिनीसित कुनै एउटै पनि सत्यता वा जीवन थिएन। तिनलाई परमेश्‍वरले मुक्ति दिनुभएको थिएन; तिनलाई परमेश्‍वरले सजाय दिनुभएको थियो। पत्रुसको मार्गलाई किन सिद्धतामा पुऱ्याउने मार्ग भनेर भनिन्छ? किनकि, पत्रुसको अभ्यासमा तिनले जीवनलाई, परमेश्‍वरलाई चिन्न खोज्ने कार्यलाई, र आफैलाई चिन्ने कुरालाई विशेष जोड दिए। परमेश्‍वरको काम सम्‍बन्धी तिनको अनुभवबाट तिनले आफैलाई चिन्न सके, मानिसका भ्रष्ट अवस्थाहरूको ज्ञान प्राप्त गर्न सके, आफ्नै कमजोरीहरूको बारेमा थाहा पाए, र मानिसहरूले अनुसरण गर्नुपर्ने सबैभन्दा मूल्यवान् कुरा पत्ता लगाए। तिनले परमेश्‍वरलाई साँचो प्रेम गर्न सके, तिनले परमेश्‍वरको ऋण कसरी चुकाउनुपर्छ भन्‍ने कुरा जाने, तिनले केही सत्यता प्राप्त गरे, र परमेश्‍वरले माग गर्नुभएका केही वास्तविकता तिनमा थियो। पत्रुसले आफ्‍ना परीक्षाहरूको अवधिमा बोलेका सबै कुराबाट यो बुझ्न सकिन्छ, कि तिनी वास्तवमा परमेश्‍वरलाई सबैभन्दा धेरै बुझ्ने व्यक्ति थिए। तिनले परमेश्‍वरको वचनबाट धेरै सत्यता बुझ्न सकेका हुनाले, तिनको मार्ग उज्यालो र चहकिलो हुँदै गयो, र झन्-झन् बढी परमेश्‍वरको इच्छासँग मिल्दै गयो। यदि पत्रुसमा यो सत्यता नभएको भए, तिनले लिएको मार्ग त्यत्ति धेरै सही हुनेथिएन।
— आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका वार्तालापहरूका अभिलेखहरूको “पत्रुसको मार्गमा कसरी हिँड्ने” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३८९
पत्रुस धेरै वर्षसम्म मप्रति विश्‍वासयोग्य थिए, तापनि उसले कहिल्यै गनगन गरेन न त कुनै गुनासो गरे; अय्यूब समेत पनि उसको बराबरीमा थिएन, र युगहरूभरि नै, सन्तहरू पत्रुसको तहसम्म पुग्नबाट चुकेका छन्‌। उसले केवल मलाई जान्न मात्र खोजेन‌, तर शैतानले त्यसका छली युक्तिहरू मञ्चन गर्दै गरेको समयावधिमा पनि उसले मलाई जान्न आयो। यसले, सदैव मेरो इच्छाको धारमा रहेर, धेरै वर्षसम्म मेरो सेवा गर्न पत्रुसलाई अभिप्रेरित गर्यो र यस कारणले गर्दा, ऊ शैतानद्वारा कहिल्यै शोषित भएन। पत्रुसले अय्यूबको विश्‍वासबाट पाठहरू सिके, तापनि अय्यूबका कमजोरीहरूलाई पनि प्रस्टै देखे। यद्यपि अय्यूबसँग ठूलो विश्‍वास थियो, उससँग आत्मिक क्षेत्रमा भएका कुराहरूको बारेमा ज्ञानको अभाव थियो, त्यसैले उसले धेरै कुराहरू भने जुन वास्तविकतासँग मेल खाएनन्‌; यसले देखाउँछ कि अय्यूबको ज्ञान सतही र सिद्धताको निम्ति असक्षम थियो। त्यसैले, पत्रुसले सदैव आत्माको भाव प्राप्त गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्यो, र आत्मिक क्षेत्रका गतिशीलताहरूलाई अवलोकन गर्न सदैव ध्यान दियो। परिणाम स्वरूप, ऊ मेरो चाहनाका कुराहरू पत्ता लगाउन मात्र सक्षम भएन, तर उसले शैतानको छली युक्तिहरूको बारेमा पनि थोरै ज्ञान पाए। यसले गर्दा, मेरो बारे उसको ज्ञान युगहरूभरिका जोसुकैको भन्दा पनि महान्‌ भएर बढ्यो।
पत्रुसले गरेको अनुभवबाट, यो कुरा देख्‍न कठिन छैन कि यदि मानिसहरूले मलाई जान्न चाहन्छन्‌ भने, तिनीहरूले आफ्ना आत्माहरूभित्र नै सचेत भएर हेक्का राख्ने कुरामाथि जोड दिनुपर्छ। तैंले आफ्नो निश्चित मात्रा मलाई बाह्य रूपमा “समर्पण” गर भनेर म भन्दिनँ; यो त द्वितीय सरोकारको विषय हो। यदि तैंले मलाई चिन्दैनस्‌ भने, सबै विश्‍वास, प्रेम, र निष्ठा जसको विषयमा तँ कुरा गर्छस्‌ ती भ्रमहरू मात्र हुन्छन्‌; ती बकबक हुन्छन्‌, र तँ मेरो सामुन्ने निकै ठूलो गर्व गर्ने तर आफैलाई नचिन्ने व्यक्ति बन्ने निश्चित छस्‌। यसको मतलब, तँ फेरि एक पटक शैतानद्वारा पासोमा फसाइने छस्‌ र आफैलाई मुक्त गर्न असमर्थ हुनेछस्‌; तँ अनन्त विनाशको पुत्र र विध्वंसको पात्र हुनेछस्। तापनि, यदि तँ मेरा वचनहरूप्रति मन्द र बेमतलबी हुन्छस्‌ भने, तैंले निःसन्देह मेरो विरोध गर्छस्। यो वास्तविकता हो, र मद्वारा सजाय प्राप्त गरेका धेरै र विविध आत्माहरूलाई तैंले आत्मिक क्षेत्रको द्वारबाट चियाएर हेर्नु बेस होला। मेरा वचनहरूसँग सामना गर्दा, तिनीहरूमध्ये को निष्क्रिय, बेमतलबी, र अस्वीकारी थिएन र? तिनीहरूमध्ये को मेरा वचनहरूको बारेमा निन्दनीय थिएन र? तिनीहरूमध्ये कसले मेरा वचनहरूमा खोट पत्ता लगाउने कोसिस गरेन र? तिनीहरूमध्ये कसले आफैलाई “रक्षा” गर्न मेरा वचनहरूलाई “प्रतिरक्षात्मक शस्त्रहरू” को रूपमा प्रयोग गरेन र? तिनीहरूले मलाई जान्ने माध्यमको रूपमा मेरा वचनहरूमा भएका विषयवस्तुहरूलाई प्रयोग गरेनन्‌, तर केवल खेल्ने खेलौनाहरूको रूपमा प्रयोग गरे। यसमा, के तिनीहरूले मलाई सीधै विरोध गर्दै थिएनन्‌ र? मेरा वचनहरू को हुन्‌? मेरो आत्मा को हो? मैले तिमीहरूलाई यस्ता प्रश्नहरू धेरै पटक सोधेको छु, तापनि के तिमीहरूले तीबारे कहिल्यै कुनै अझ उच्चतम‌ र स्पष्ट अन्तर्दृष्टिहरू पाएका छौ? तिमीहरूले कहिल्यै तिनलाई साँच्चै अनुभव गरेका छौ? म तिमीहरूलाई फेरि एक पटक स्मरण गराउँछु: यदि तिमीहरूले मेरा वचनहरू जान्दैनौ, वा तिनलाई स्विकार गर्दैनौ, वा तिनलाई अभ्यासमा लगाउँदैनौ भने, तिमीहरू पक्कै पनि मेरो सजायका पात्रहरू बन्नेछौ! तिमीहरू पक्कै पनि शैतानका सिकारहरू बन्नेछौ!
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको लागि परमेश्‍वरका वचनहरूको “अध्याय ८” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९०
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९१
मानिसले परमेश्‍वरलाई विश्‍वास गर्न थालेदेखि उसले के उपलब्धि प्राप्त गरेको छ? तैँले परमेश्‍वरको बारेमा के कुरा जानेको छस्? परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेको कारण तँ कति हदसम्म परिवर्तन भएको छस्? आज, तिमीहरू सबैलाई के कुरा थाहा छ भने मानिसले प्राणको मुक्तिको लागि र देहको हितको लागि मात्रै परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्दैन, न त प्रेमिलो परमेश्‍वरद्वारा आफ्नो जीवन समृद्ध पार्न र त्यस्तै इत्यादि कुरा प्राप्त गर्नको लागि मात्रै उसले विश्‍वास गर्छ। यसैले, यदि तैँले देहको हितको लागि वा क्षणिक सुख-चैनको लागि परमेश्‍वरलाई प्रेम गरिस् र अन्त्यमा परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेम चरम अवस्थामा पुग्यो अनि तैँले उप्रान्त केही मागेनस् भने पनि, तैँले खोज्ने यो प्रेम कलङ्कित र परमेश्‍वरलाई प्रसन्‍न नपार्ने किसिमको प्रेम हुनेछ। आफ्नो सुस्त किसिमको अस्तित्वलाई समृद्ध बनाउन र आफ्नो हृदयको रिक्ततालाई भर्नको लागि परमेश्‍वरको प्रेमलाई प्रयोग गर्ने मानिसहरू जीवनको सहजताको लागि लालच गर्ने मानिसहरू हुन्, परमेश्‍वरको प्रेमलाई साँचो रूपमा खोज्ने मानिसहरू होइनन्। यस किसिमको प्रेम जबरजस्ती गरिने प्रेम हो, यो मानसिक आनन्दको खोजी मात्रै हो र परमेश्‍वरलाई यसको कुनै आवश्यकता पर्दैन। त्यसो भए, तेरो प्रेम कस्तो किसिमको प्रेम हो? के कुराको लागि तँ परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस्? तँभित्र अहिले परमेश्‍वरप्रतिको साँचो प्रेम कति छ? तिमीहरूमध्ये धेरैको प्रेम यसभन्दा पहिले उल्लेख गरिएको किसिमको प्रेम नै हो। त्यस किसिमको प्रेमले वर्तमान-स्थितिलाई मात्रै कायम राख्‍नसक्छ; यसले कुनै पनि स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन, न त यसले मानिसमा जरा नै लगाउन सक्छ। यस किसिमको प्रेम फुलेर पनि फल नफलाई ओइलाएर जाने फूल जस्तो हो। अर्को शब्दमा भन्दा, तैँले परमेश्‍वरलाई यस किसिमले प्रेम गरिसकेको छस्, र तँलाई अगाडि बाटोमा डोर्‍याउने कोही पनि छैन भने, तँ पतन भएर जानेछस्। यदि तैँले परमेश्‍वर प्रेमिलो हुनुभएको समयमा मात्रै परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्छस् तर त्यसपछि तेरो जीवन स्वभाव परिवर्तन हुँदैन भने, तँ अन्धकारको प्रभावको कफनबाट बाहिर निस्केर आउने अवस्थामा रहनेछैनस्, तँ शैतानको बन्धन र यसको चलाकीहरूलाई तोड्न नसक्‍ने अवस्थामा रहनेछस्। यस किसिमको कुनै पनि व्यक्तिलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुहुनेछैन; आखिरमा, तिनीहरूको आत्मा, प्राण, र शरीर शैतानको हातमा पर्नेछ। यसको बारेमा कुनै शङ्का हुन सक्दैन। परमेश्‍वरले पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न नसक्‍ने मानिसहरू तिनीहरूको सुरुको अवस्थामा नै फर्कनेछन्, अर्थात् शैतानको हातमा फर्कनेछन्, र तिनीहरू परमेश्‍वरको अर्को चरणको दण्ड भोग्‍नका लागि आगो र गन्धकको खाडलमा पर्नेछन्। परमेश्‍वरले प्राप्त गरेका मानिसहरू तिनीहरू नै हुन् जसले शैतानलाई त्यागेका छन् र त्यसको अधिकार क्षेत्रबाट उम्केका छन्। तिनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा नै परमेश्‍वरको राज्यका मानिसहरूका बीचमा थपिन्छ। यसरी राज्यका मानिसहरूको निर्माण हुन्छ। के तँ यस किसिमको व्यक्ति बन्‍न इच्छुक छस्? के तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन चाहन्छस्? के तँ शैतानको अधिकार क्षेत्रबाट निस्केर परमेश्‍वरकहाँ फर्केर आउन चाहन्छस्? तँ अहिले शैतानको स्वामित्वमा छस् कि राज्यका मानिसहरूमध्येका एक होस्? यस्ता कुराहरू पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्छ, र यसको लागि कुनै थप व्याख्याको आवश्यकता पर्दैन।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “विश्‍वासीहरूले कस्तो दृष्टिकोण राख्‍नुपर्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९२
विगतमा, धेरैले ठूला-ठूला अभिलाषाहरू र धारणाहरूको खोजी गरे, तिनीहरूले आफ्नै आशाको परिणामस्वरूप तिनको खोजी गरे। केही क्षणको लागि हामी त्यस किसिमका कुराहरूलाई पन्छ्याएर राखौं; अहिले हाम्रो लागि प्रमुख महत्त्वको विषय भनेको, परमेश्‍वरको अघि सामान्य अवस्था कायम गर्न र शैतानको प्रभावका बन्धनहरूबाट बिस्तारै स्वतन्त्र हुँदै जानको लागि तिमीहरू प्रत्येकलाई सक्षम गर्ने किसिमको अभ्यास पत्ता लगाउनु हो, ताकि तँलाई परमेश्‍वरले प्राप्त गर्न सक्‍नुभएको होस्, र परमेश्‍वरले तँलाई आज्ञा गर्नुभए अनुसारको जीवन तैँले जिउन सकेको होस्। यसरी मात्रै तैँले परमेश्‍वरका अभिप्रायहरूलाई पूरा गर्न सक्‍नेछस्। धेरैले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्, तैपनि तिनीहरूलाई न त परमेश्‍वरले के चाहनुहुन्छ भन्‍ने बारेमा थाहा हुन्छ न त शैतानले के चाहन्छ भन्‍ने थाहा हुन्छ। जे पर्छ त्यही टर्छ भन्दै तिनीहरू मूर्ख र बेवकुफ मार्गमा विश्‍वास गर्छन्, जसले गर्दा तिनीहरूले कहिल्यै पनि सामान्य इसाई जीवन जिएका हुँदैनन्; यति मात्र होइन, तिनीहरूका व्यक्तिगत सम्बन्धहरू कहिल्यै पनि सामान्य रहेका हुँदैनन्, परमेश्‍वरसँगको सामान्य सम्बन्धको त कुरै छोडौं। यसबाट हामीले के कुरा देख्‍न सक्छौं भने मानिसको कठिनाइ र कमजोरीहरू, अनि परमेश्‍वरको इच्छालाई वाधा दिन सक्‍ने अन्य तत्वहरू धेरै नै छन्। मानिस परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको सहि मार्गमा आइपुगेको छैन, न त ऊ मानव जीवनको वास्तविक अनुभवमा नै प्रवेश गरेको छ भन्‍ने कुरालाई प्रमाणित गर्न यो नै पर्याप्त छ। त्यसो भए परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको सही मार्गमा आउनु भनेको के हो? सहि मार्गमा आउनु भनेको मानिसमा जे कुराको कमी छ, त्यस कुरालाई बिस्तारै बुझ्दै र परमेश्‍वर सम्बन्धी गहन ज्ञानलाई बिस्तारै प्राप्त गर्दै, परमेश्‍वरको सामने सँधै आफ्नो हृदयलाई शान्त राख्‍नु र परमेश्‍वरसँग सामान्य कुराकानी गर्नु हो। यसद्वारा, तेरो आत्माले दैनिक रूपमा नयाँ ज्ञान र नयाँ अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्दै जानेछ; तेरो तृष्णा बढ्दै जान्छ, तँ सत्यतामा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्छस्, र हरेक दिन नयाँ ज्योति र नयाँ ज्ञान प्राप्त हुनेछ। यो मार्गद्वारा, तँ शैतानको प्रभावबाट बिस्तारै स्वतन्त्र हुँदै जानेछस् र आफ्नो जीवनमा वृद्धि हुँदै जानेछस्। त्यस किसिमका मानिसहरू सहि मार्गमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। आफ्ना अनुभवहरूलाई जाँच गर् अनि आफ्नो विश्‍वासमा तैँले खोजेको मार्गलाई जाँच्। आफैलाई यी सबै कुराहरूको विरुद्धमा खडा गर्: के तँ सहि मार्गमा छस्? के-कस्ता कुराहरूमा तैँले शैतानका बन्धनहरू र शैतानको प्रभावबाट आफूलाई स्वतन्त्र पारेको छस्? यदि तँ सहि मार्गमा आउन बाँकी नै छ भने, शैतानसँगको तेरो बन्धन तोडिएको छैन। यसो हो भने, के परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने तेरो प्रयासले तँलाई सच्‍चा, एकचित्त, र शुद्ध प्रेममा लैजानेछ? परमेश्‍वरप्रतिको मेरो प्रेम अटल किसिमको र हृदयबाट निस्केको प्रेम हो भनेर तैँले भन्छस्, तैपनि शैतानको बन्धनबाट तैँले छुटकारा भने पाएको छैनस्। के तैँले परमेश्‍वरलाई मूर्ख बनाउने प्रयास गरिरहेको छैनस् र? यदि तँ त्यस्तो अवस्थामा पुग्‍न चाहन्छस् जहाँ परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेम निष्कलङ्क हुन्छ, यदि तँ पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिन चाहन्छस् र राज्यका मानिसहरूमध्येमा पर्न चाहन्छस् भने, सुरुमा तैँले आफूलाई परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको सहि मार्गमा लैजानुपर्छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९३
सबै मानिसहरूमा हुने साधारण समस्या चाहिँ यो हो कि उनीहरूले सत्यता बुझ्छन् तर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नलाई असफल हुन्छन्। एकातिर उनीहरू मूल्य चुकाउन अनिच्छुक हुन्छन्, भने अर्कोतिर उनीहरूको विवेक अति नै अपर्याप्‍त हुन्छ; उनीहरू दैनिक जीवनका धेरै अप्ठ्याराहरू के-के हुन् भन्‍ने कुरा देख्‍न असक्षम छन्, अनि कसरी ठीकसँग अभ्यास गर्ने भन्‍ने कुरा थाहा छैन। किनभने मानिसहरूका अनुभवहरू अति सतही हुन्छन्, उनीहरूको क्षमता अति कमजोर हुन्छ, र जुन नापमा उनीहरूले सत्यता बुझ्छन्, त्यो सीमित छ, उनीहरूले आफ्ना दैनिक जीवनमा सामना गर्ने कठिनाइहरूको समाधान गर्न उनीहरूसँग कुनै उपाय छैन। उनीहरूले मुखले मात्र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्, र आफ्नो दैनिक जीवनमा परमेश्‍वरलाई ल्याउन असमर्थ छन्। यसो भन्‍न सकिन्छ, परमेश्‍वर चाहिँ परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ, जीवन चाहिँ जीवन नै हो, र यो चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो जीवनमा परमेश्‍वरसँग कुनै सम्बन्ध नभएको जस्तै हो। प्रत्येक व्यक्तिले यस्तै विचार गर्छन्। यसरी, वास्तवमा परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेर पनि मानिसहरूलाई उहाँले आफ्नो बनाउनु भएको वा र सिद्ध तुल्याउनु भएको हुँदैन। वास्तवमा, परमेश्‍वरको वचनले पूर्ण अभिव्यक्ति नपाएको होइन, तर केवल उहाँको वचन ग्रहण गर्ने मानिसको क्षमता अति नै अपर्याप्‍त भएको हो। कसैले भन्‍न सक्छ कि परमेश्‍वरको मौलिक अभिप्रायहरू अनुसार प्रायः कसैले पनि काम गर्दैन; बरु, आफ्नै अभिप्रायहरू, आफूहरूले विगतमा पक्रिराखेका धार्मिक धारणाहरू र काम गर्ने आफ्नै तरिका अनुसार उनीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छन्। थोरै व्यक्तिहरू परमेश्‍वरको वचनलाई ग्रहण गरेर उनीहरू रूपान्तरण भएका हुन्छन् र उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्न थाल्छन्। त्यसको सट्टामा, तिनीहरू आफ्नै गलत विश्‍वासमा लागिरहन्छन्। जब मानिसहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न थाल्छ, उनीहरूले धर्मको परम्परागत नियमहरूमा आधारित भएर त्यसो गर्छन्, र उनीहरू पूर्ण रूपले जिउनको लागि बनाइएका आफ्नै दर्शनशास्त्रमा आधारित भएर जिउँछन् र अरूसँग अन्तरक्रिया गर्छन्। कसैले भन्‍न सक्छ कि दश जना मानिसहरू मध्ये नौ जनाको अवस्था यस्तै हुन्छ। थोरै मानिसहरूले मात्र परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्न थालेपछि अर्को योजना बनाएर नयाँ पात पलाउन थाल्छन्। मानवजातिले परमेश्‍वरको वचनलाई सत्यताको रूपमा कदर गर्न वा सत्यताको रूपमा लिन, र व्यवहारमा उतार्न असफल भएका छन्।
उदाहरणको लागि, येशूमा विश्‍वासलाई लिऔं। चाहे कसैले भर्खरै विश्‍वास गर्न सुरु गरेको होस् वा धेरै समय पहिले देखि विश्‍वास गरेको होस्, उनीहरूसँग भएको प्रतिभालाई प्रयोग गरे र उनीहरूसँग भएका सीपहरू प्रदर्शन गरे। मानिसहरूले “परमेश्‍वरमा विश्‍वास” भन्‍ने यी दुई शब्दहरू आफ्नो सामान्य जीवनमा यत्तिकै थपिदिए, तैपनि उनीहरूको स्वभावमा केही परिवर्तन आएन, र परमेश्‍वरमा उनीहरूको विश्‍वास कत्ति पनि वृद्धि भएन। उनीहरूको खोज न तातो थियो न त चिसो नै थियो। उनीहरूले आफ्नो विश्‍वासलाई त्याग्‍ने कुरा गरेनन्, न त उनीहरूले परमेश्‍वरलाई सबै कुरा समर्पण गरे। उनीहरूले कहिल्यै पनि परमेश्‍वरलाई साँचो प्रेम गरेनन् अथवा उहाँको आज्ञापालन गरेनन्। परमेश्‍वरमा उनीहरूको विश्‍वास साँचो र झूटो मिश्रित थियो, उनीहरूले यसलाई एउटा आँखा खुल्ला र एउटा आँखा बन्द गरेर नियाले, र आफ्नो विश्‍वास अभ्यास गर्नलाई इमान्दार थिएनन्। उनीहरूले यस्तो भ्रमपूर्ण अवस्थालाई निरन्तरता दिए, र आखिरमा अस्त व्यस्ततामै मरे। ती सबैको के अर्थ भयो त? आज, तैँले व्यावहारिक परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नलाई सही मार्गमा पाइला राख्‍नुपर्छ। यदि तँ परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस् भने, तैँले आशिषहरू मात्रै खोज्नु हुँदैन, तर परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न र उहाँलाई चिन्‍न खोज्नुपर्छ। उहाँको प्रकाशद्वारा, तेरो आफ्नै व्यक्तिगत खोजीद्वारा, तैँले उहाँको वचन खान र पिउन सक्छस्, परमेश्‍वरको वास्तविक बुझाइको विकास गर्न, र परमेश्‍वरको साँचो प्रेम पाउन सक्छस्, जुन तेरो भित्री हृदयबाट आउँछ। अर्को शब्दमा, जब परमेश्‍वरको लागि तेरो प्रेम धेरै निष्कपट हुन्छ, र उहाँको लागि तेरो प्रेमलाई कसैले नाश पार्न सक्दैन अथवा कोही तेरो मार्गमा खडा हुन सक्दैन, यस समयमा तँ परमेश्‍वरको विश्‍वासको सही मार्गमा छस्। यसले प्रमाणित गर्दछ कि तँ परमेश्‍वरको होस्, किनभने तेरो हृदय अघिबाटै परमेश्‍वरको नियन्त्रणमा छ र अरू केही कुराले पनि तँलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। तेरो अनुभवद्वारा, तैँले चुकाउनुभएको मूल्यद्वारा, र परमेश्‍वरको कार्यद्वारा उहाँको लागि अचुक प्रेम विकास गर्न तँ सक्षम भएको छ—र जब तैँले यसो गर्छस्, तँ शैतानको प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनेछस् र परमेश्‍वरको वचनको प्रकाशमा जिउनेछस्। जब तँ अन्धकारको प्रभावबाट स्वतन्त्र बन्छस् तब मात्र परमेश्‍वरले तँलाई आफ्नो बनाउनुभएको छ भनी भन्‍न सकिन्छ। परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा यो लक्ष्य खोज्न कोसिस गर्नुपर्छ। यो तिमीहरू प्रत्येकको कर्तव्य हो। तिमीहरू कोही पनि अहिलेको अवस्थामा सन्‍तुष्‍ट हुनु हुँदैन। तिमीहरू परमेश्‍वरको कामप्रति दोमनमा पर्नु हुँदैन, न त यसलाई तिमीहरूले हल्का रूपमा लिन सक्छौ। तिमीहरूले परमेश्‍वरको बारेमा पूर्ण श्रद्धाका साथ हरसमय विचार गर्नुपर्छ, र सबै कुराहरू उहाँको खातिर गर्नुपर्छ। र जब तिमीहरू बोल्छौ अथवा काम गर्छौ, तिमीहरूले परमेश्‍वरको घरको हितलाई पहिलो स्थानमा राख्‍नुपर्छ। यसरी मात्रै तिमीहरू परमेश्‍वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति बन्‍न सक्छौ।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “तैँले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने हुँदा तँ सत्यताको निम्ति जिउनुपर्छ” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९४
परमेश्‍वरमा आफ्नो विश्‍वासको सम्बन्धमा मानिसहरूको सबै भन्दा ठूलो गल्ती उनीहरूले मुखले मात्र विश्‍वास गर्नु, र परमेश्‍वरलाई आफ्नो दैनिक जीवनबाट पूर्ण रूपले टाढा राख्‍नु हो। वास्तवमा, सबै मानिसहरूले परमेश्‍वरको अस्तित्वमा विश्‍वास गर्छन्, तर परमेश्‍वर उनीहरूको दैनिक जीवनको हिस्सा भने हुनुहुन्‍न। मानिसहरूका मुखहरूले परमेश्‍वरलाई धेरै प्रार्थनाहरू चढाउँछन्, तर उनीहरूको हृदयमा परमेश्‍वरको स्थान थोरै छ, र त्यसैले परमेश्‍वरले तिनीहरूको बारम्बार जाँच गर्नुहुन्छ। किनभने मानिसहरू अशुद्ध छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जाँच गर्नु बाहेक परमेश्‍वरसँग अरू कुनै विकल्प हुँदैन, ताकि उनीहरू लाजमा परून् र यी परीक्षाहरूका बीचमा आफैलाई चिन्‍न सकून्। यदि होइन भने, मानवजाति प्रधान दूतको सन्तानहरूको रूपमा परिणत हुन्थे, र अझ धेरै भ्रष्‍ट हुन्थे। परमेश्‍वरमा उनीहरूको विश्‍वासको प्रक्रियामा, परमेश्‍वरको अनन्त शुद्धीकरणको दायरामा हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत अभिप्रायहरू र उद्देश्यहरू ल्याउँछन्। यदि यसो भएन भने, परमेश्‍वरसँग कसैलाई पनि प्रयोग गर्ने कुनै उपाय हुँदैनथ्यो, र उहाँले जे काम मानिसमा गर्नुपर्थ्यो, त्यो कुनै पनि हालतमा हुँदैनथ्यो। परमेश्‍वरले पहिला मानिसहरूलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, र यो प्रक्रियामार्फत उनीहरूले आफैलाई चिन्‍न सक्छन् र परमेश्‍वरले उनीहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै परमेश्‍वरले आफ्नो जीवनद्वारा उनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ, र त्यसरी मात्रै तिनीहरूको हृदयहरू परमेश्‍वरतिर पूर्ण रूपले फर्किन सक्छ। त्यसैले म भन्छु, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु चाहिँ मानिसहरूले भने जस्तो सजिलो छैन। जसरी परमेश्‍वरले त्यसलाई हेर्नुहुन्छ, यदि तँसँग ज्ञान मात्रै छ तर उहाँको जीवनरूपी वचन छैन भने, र यदि तँ आफ्नो ज्ञानमा मात्र सीमित छस् तर सत्यतालाई अभ्यास गर्न र परमेश्‍वरको वचन अनुसार जिउन सक्दैनस् भने, तँसँग परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने हृदय छैन भन्‍ने कुराको प्रमाण यही हो, तेरो हृदय परमेश्‍वरको होइन भनी यसले देखाउँछ। एक व्यक्तिले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गरेर उहाँलाई चिन्दछ: यो नै अन्तिम लक्ष्य हो, र मानिसको खोजको लक्ष्य हो। तैँले परमेश्‍वरको वचन अनुसार जिउनलाई प्रयत्‍न गर्नैपर्छ, ताकि तेरो अभ्यासमा ती फलदायी हुन सकून्। यदि तँसँग सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र छ भने, परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वास शून्य हुनेछ। यदि तैँले उहाँको वचन अभ्यास गरिस् र त्यसमा जिइस् भने मात्रै तेरो विश्‍वास पूर्ण भएको र उहाँको इच्छा अनुसार भएको मान्‍न सकिन्छ। यस मार्गमा, धेरै मानिसहरूले थुप्रै ज्ञानको कुरा गर्न सक्छन्, तर तिनीहरूको मृत्युको समयमा, उनीहरूका आँखाहरू आँसुले भरिन्छन्, र आफ्नो जीवनकाल व्यर्थमा खेर फालेकोमा र परिपक्‍व वृद्धावस्था शून्यतामा जिएकोमा आफैलाई घृणा गर्छन्। उनीहरूले सिद्धान्तहरू मात्र बुझ्छन्, तर सत्यतालाई व्यवहारमा लागू गर्न सक्दैनन् अथवा परमेश्‍वरको साक्षी हुन सक्दैनन्; बरु, उनीहरू यत्तिकै यता उता दौडिरहन्छन्, मौरी झैँ व्यस्त हुन्छन्, र अन्त्यमा मृत्युको छेउमा पुगेपछि मात्र उनीहरूले आफूमा साँचो गवाहीको अभाव भएको र उनीहरूले परमेश्‍वरलाई बिलकुल नचिनेको थाहा गर्छन्। के यो धेरै ढिलो भएन र? किन तँ समयको उपयोग गर्दैनस् र तैँले प्रेम गरेको सत्यताको खोजी गर्दैनस्? किन भोलिलाई कुर्छस्? यदि जीवनमा तँ सत्यताको लागि दुःख भोग्दैनस् अथवा यसलाई प्राप्‍त गर्न खोज्दैनस् भने तँ मृत्युको घडीमा पछुताउन चाहन्छस् भन्‍ने अर्थ लाग्दैन र? यदि त्यसो हो भने किन परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस्? वास्तवमा, मानिसहरूले यदि अलिकति परिश्रम गर्‍यो भने पनि सत्यतालाई अभ्यास गर्न सक्‍ने थुप्रै विषयहरू छन् र यसरी परमेश्‍वरलाई सन्‍तुष्‍ट पार्न सक्छन्। किनकी उनीहरूले परमेश्‍वरको खातिर काम गर्न नसकोस् भनेर मानिसहरूका हृदयहरू दुष्‍टद्वारा नियन्त्रित छन्, र निरन्तर रूपमा उनीहरूको शरीरको खातिर दौडधूप गर्छन्, अन्त्यमा केही पनि प्राप्‍त गर्दैनन्। यस कारणले, मानिसहरू निरन्तर रूपमा समस्याहरू र कठिनाइहरूद्वारा पीडित हुन्छन्। के यिनीहरू शैतानका यातनाहरू होइनन्? के यो शरीरको भ्रष्‍टता होइन? तैँले आफ्नो ओठ चलाएर परमेश्‍वरलाई मूर्ख बनाउने कोसिस गर्नु हुँदैन। बरु, तैँले स्पष्‍ट कार्य गर्नुपर्छ। आफैलाई धोका नदे—त्यसको अर्थ के हुन सक्छ? आफ्नो शरीरको खातिर जिएर फाइदा र प्रसिद्धिको लागि सङ्घर्ष गरेर तैँले के प्राप्‍त गर्न सक्छस्?
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९५
अब, तिमीहरूले परमेश्‍वरका मानिसहरू बन्‍ने प्रयास गर्नुपर्छ, र सम्पूर्ण प्रवेशलाई सहि बाटोमा सुरु गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरका मानिसहरू बन्‍नु भनेको राज्यको युगमा प्रवेश गर्नु हो। आज, तिमीहरू आधिकारिक रूपमा राज्यको तालिममा प्रवेश गर्नथालनी गर्छौ, र तिमीहरूको भविष्यको जीवन पहिलेको जस्तो सुस्त र मन्द बन्‍न छोड्नेछ; त्यसरी जिएर, परमेश्‍वरले माग गर्नुभएका मापदण्डहरूलाई पूरा गर्नु असम्‍भव हुन्छ। यदि तैँले कुनै आतुरीको अनुभूति गर्दैनस् भने, तँसँग आफैलाई सुधार गर्ने इच्‍छा छैन, तेरो प्रयास अन्योल र दोधारमा छ, र तैँले परमेश्‍वरको इच्‍छा पूरा गर्न सक्दैनस् भन्‍ने यसले देखाउँछ। राज्यको तालिममा प्रवेश गर्नु भनेको परमेश्‍वरका मानिसहरूको जीवन सुरु गर्नु हो—के तँ त्यस्तो तालिम स्वीकार गर्न इच्‍छुक छस्? के तँ आतुरीको आभास अनुभूति गर्न इच्‍छुक छस्? के तँ परमेश्‍वरको अनुशासनमा जिउन इच्‍छुक छस्? के तँ परमेश्‍वरको सजायमा जिउन इच्‍छुक छस्? जब परमेश्‍वरको वचन तँकहाँ आउँछ र तँलाई जाँच गर्छ, तैँले कसरी व्यवहार गर्नेछस्? र तैँले सबै किसिमका तथ्यहरूको सामना गर्दा के गर्नेछस्? विगतमा, तेरो ध्यान जीवनमा केन्द्रित थिएन; आज, तँ जीवनको वास्तविकतामा प्रवेश गर्नैपर्छ, र तैँले तेरो जीवन स्वभावमा परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। राज्यका मानिसहरूले यसलाई हासिल गर्नैपर्छ। जो परमेश्‍वरका मानिसहरू हुन् उनीहरूमा जीवन हुनैपर्छ, उनीहरूले राज्यको तालिम स्वीकार गर्नैपर्छ, र आफ्‍नो जीवनको स्वभावलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। राज्यका मानिसहरूबाट परमेश्‍वरले चाहनुहुने कुरा यही नै हो।
राज्यका मानिसहरूका लागि परमेश्‍वरका मापदण्डहरू निम्‍नानुसार छन्:
१. तिनीहरूले परमेश्‍वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्नैपर्छ। भन्‍नुको अर्थ, तिनीहरूले आखिरी दिनहरूका परमेश्‍वरको कार्यमा बोलिएका सबै वचनहरूलाई स्वीकार गर्नैपर्छ।
२. तिनीहरू राज्यको तालिममा प्रवेश गर्नैपर्छ।
३. तिनीहरूले परमेश्‍वरद्वारा आफ्‍नो हृदयलाई छुवाउने प्रयास गर्नैपर्छ। जब तेरो हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरमा फर्किएको हुन्छ, र तँसँग सामान्य आत्मिक जीवन हुन्छ, तँ स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा जिउनेछस्, जसको अर्थ तँ परमेश्‍वरको प्रेमको वास्ता र सुरक्षामा जिउनेछस् भन्ने हुन्छ। तँ परमेश्‍वरको वास्ता र सुरक्षामा जिउँदा मात्र तँ परमेश्‍वरको स्वामित्वमा हुनेछस्।
४. तिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिनैपर्छ।
५. तिनीहरू पृथ्वीमा परमेश्‍वरको महिमाको प्रकटीकरण बन्‍नैपर्छ।
यी पाँच बुँदाहरू तिमीहरूको लागि मेरा आज्ञाहरू हुन्। मेरा वचनहरू परमेश्‍वरका मानिसहरूका अघि बोलिन्छन्, र यदि तँ यी आज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्न अनिच्‍छुक छस् भने, म तँलाई जबरजस्ती गर्नेछैन—तर यदि तैँले तिनलाई साँचो रूपमा स्वीकार गरिस् भने, तिमीहरूले परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूरा गर्न सक्‍नेछौ। आज, तिमीहरूले परमेश्‍वरका आज्ञाहरू स्वीकार गर्न, र राज्यका मानिसहरू बन्‍ने प्रयास गर्न र राज्यका मानिसहरू बन्‍नका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डहरू पूरा गर्नका लागि सुरु गर्छौ। प्रवेशको पहिलो चरण यही नै हो। यदि तँ पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूरा गर्न चाहन्छस् भने, तैँले यी पाँच आज्ञालाई स्वीकार गर्नैपर्छ, र यदि तैँले तिनलाई हासिल गर्न सकिस् भने, तँ परमेश्‍वरको हृदय अनुसारको हुनेछस् र परमेश्‍वरले अवश्य नै तँलाई बृहत् रूपमा प्रयोग गर्नुहुनेछ। राज्यको तालिममा प्रवेश गर्नु नै आजको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। राज्यको तालिमको प्रवेशले आत्मिक जीवन संलग्न गर्छ। यसभन्दा पहिले, आत्मिक जीवनको बारेमा कुनै कुरा उठाइएको थिएन, तर आज, तँ राज्यको तालिमको प्रवेशलाई सुरु गर्ने क्रममा, तँ आधिकारिक रूपमा आत्मिक जीवनमा प्रवेश गर्छस्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९६
कस्तो प्रकारको जीवन आत्मिक जीवन हो? आत्मिक जीवन भनेको त्यो जीवन हो जहाँ तेरो हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरमा फर्केको हुन्छ, र परमेश्‍वरको प्रेमप्रति सचेत हुन सक्‍ने हुन्छ। यो त्यो जीवन हो जसमा तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा जिउँछस्, र तेरो हृदयमा अरू कुनै कुरालेओगट्दैन, र तैँले आजको परमेश्‍वरको इच्‍छालाई बुझ्‍न सक्छस्, र तँ तेरो कर्तव्यलाई पूरा गर्नको लागि पवित्र आत्माको आजको ज्योतिद्वारा अगुवाइ हुन्छस्। मानिस र परमेश्‍वरको बीचमा रहेको त्यो जीवन नै आत्मिक जीवन हो। यदि तैँले आजको ज्योतिलाई पछ्याउन सक्दैनस् भने, परमेश्‍वरसँगको तेरो सम्‍बन्धमा दरार खुलेको छ—यो तोडिएको समेत हुन सक्छ—अनि तँ सामान्य आत्मिक जीवनविहीन छस्। परमेश्‍वरसँगको सामान्य सम्‍बन्ध आजको परमेश्‍वरको वचनलाई स्वीकार गर्ने कार्यको जगमा निर्मित हुन्छ। के तँमा सामान्य आत्मिक जीवन छ? के तँमा परमेश्‍वरसँगको सामान्य सम्‍बन्ध छ? के तँ पवित्र आत्‍माको कार्यलाई पछ्याउने व्यक्ति होस्? यदि तँ आज पवित्र आत्माको ज्योतिलाई पछ्याउन सक्छस्, र उहाँका वचनहरूभित्रको परमेश्‍वरको इच्‍छालाई बुझ्‍न, र यी वचनहरूमा प्रवेश गर्न सक्छस् भने, तँ पवित्र आत्माको प्रवाहलाई पछ्याउने व्यक्ति होस्। यदि तँ पवित्र आत्माको प्रवाहलाई पछ्याउँदैनस् भने, तँ सत्यताको पछि नलाग्‍ने व्यक्ति होस् भन्‍नेमा कुनै शङ्का छैन। आफैलाई सुधार गर्न इच्‍छा नगर्नेहरूभित्र पवित्र आत्माले काम गर्ने कुनै मौका हुँदैन, र परिणाम स्वरूप, त्यस्ता मानिसहरूले कहिल्यै पनि आफ्‍नो सामर्थ्य बटुल्‍न सक्दैनन्, र तिनीहरू सधैँ नै निष्क्रिय हुन्छन्। आज, के तँ पवित्र आत्माको प्रवाहलाई पछ्याउँछस्? के तँ पवित्र आत्माको प्रवाहमा छस्? के तँ निष्क्रिय स्थितिबाट निस्किआएको छस्? परमेश्‍वरको वचनमा विश्‍वास गर्ने, परमेश्‍वरको वचनलाई जगको रूपमा लिने, र पवित्र आत्माको आजको ज्योतिलाई पछ्याउनेहरू सबै—तिनीहरू सबै पवित्र आत्माको प्रवाहमा हुन्छन्। यदि तँ परमेश्‍वरका वचनहरू स्पष्ट रूपमा साँचो र सहि छन् भन्‍ने विश्‍वास गर्छस् भने, र यदि तँ उहाँले जे भन्‍नुभए तापनि परमेश्‍वरका वचनहरूमा विश्‍वास गर्छस् भने, तँ परमेश्‍वरको काममा प्रवेश गर्न लागिपर्ने व्यक्ति होस्, र यसरी तैँले परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूरा गर्छस्।
पवित्र आत्माको प्रवाहमा प्रवेश गर्नको लागि, तँमा परमेश्‍वरसँगको सामान्य सम्‍बन्ध हुनुपर्छ, र तैँले पहिले आफूलाई तेरो निष्क्रिय स्थितिबाट छुटकारा गर्नैपर्छ। कतिपय मानिसहरू सधैँ नै भीडको पछि लाग्छन्, र तिनीहरूको हृदय परमेश्‍वरबाट निकै टाढा जान्छ; त्यस्ता मानिसहरूसँग आफैलाई सुधार गर्ने कुनै इच्‍छा हुँदैन, र तिनीहरूले पछ्याउने मापदण्डहरू अत्यन्तै न्यून हुन्छन्। परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्न र परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिनको लागि लागिपर्नु मात्रै परमेश्‍वरको इच्‍छा हो। परमेश्‍वरको प्रेमको ऋण तिर्नको लागि आफ्‍नो विवेक मात्रै प्रयोग गर्ने मानिसहरू पनि छन्, तर यसले परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूरा गर्न सक्दैन; तैँले जति उच्‍च मापदण्डहरूको खोजी गर्छस्, यो त्यति नै परमेश्‍वरको इच्‍छा अनुरूप हुनेछ। एक सामान्य व्यक्ति र परमेश्‍वरको प्रेमलाई खोजी गर्ने व्यक्तिको रूपमा, परमेश्‍वरका मानिसहरूमध्ये एक बन्‍नको लागि राज्यमा प्रवेश गर्नु नै तिमीहरूको साँचो भविष्य, र सबैभन्दा मूल्यवान् र महत्त्वको जीवन हो; तिमीहरू जत्तिको आशिषित कोही पनि हुँदैन। म किन यसो भन्छु? किनभने परमेश्‍वरमा विश्‍वास नगर्नेहरू देहको लागि जिउँछन्, र तिनीहरू शैतानको लागि जिउँछन्, तर आज तिमीहरू परमेश्‍वरको लागि जिउँछौ, र परमेश्‍वरको इच्‍छालाई पूरा गर्नको लागि नै जिउँछौ। यही कारणले गर्दा नै तिमीहरूको जीवन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर म भन्छु। परमेश्‍वरले चुन्‍नुभएका मानिसहरूको यो समूहले मात्रै सबैभन्दा महत्त्वको जीवन जिउन सक्छन्: पृथ्वीमा अरू कोही पनि त्यस्तो मूल्य र अर्थको जीवन जिउन सक्षम छैनन्। तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले चुन्‍नुभएको, र परमेश्‍वरले नै हुर्काउनुभएको कारणले गर्दा, यसको साथै, तिमीहरूप्रतिको परमेश्‍वरको प्रेमको कारणले गर्दा, तिमीहरूले साँचो जीवनलाई बुझेका छौ, र अति मूल्यकोजीवन कसरी जिउने सो जान्दछौ। तिमीहरूको खोजी असल भएकोले होइन, तर परमेश्‍वरको अनुग्रहले गर्दा नै यसो भएको हो; तिमीहरूको आत्माको आँखा खोलिदिने परमेश्‍वर नै हुनुहुन्थ्यो, र तिमीहरूलाई उहाँको सामने आउने सौभाग्य प्रदान गर्दै तिमीहरूको हृदयलाई छुने परमेश्‍वरका आत्मा नै हुनुहुन्थ्यो। यदि परमेश्‍वरका आत्माले तिमीहरूलाई अन्तर्दृष्टि नदिनुभएको भए, परमेश्‍वरको बारेमा के प्रेमिलो छ सो कुरा तिमीहरूले देख्‍न सक्दैनथियौ, न त तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्नु नै सम्‍भव हुनेथियो। परमेश्‍वरका आत्माले मानिसहरूको हृदय छुनुभएको कारणले नै तिनीहरूको हृदय परमेश्‍वरतर्फ फर्केको छ। कहिलेकहीँ, जब तैँले परमेश्‍वरको वचनको आनन्द लिइरहेको हुन्छस्, तब तेरो आत्मास्पर्शित हुन्छ, अनि तैँले परमेश्‍वरलाई प्रेम नगरिकन बस्‍न सक्दैनस्, तँलाई तँभित्र ठूलो सामर्थ्य छ, र तैँले पन्छ्याउन नसक्‍ने केही पनि छैन भन्‍ने लाग्छ। यदि तँलाई यस्तो अनुभूति हुन्छ भने, तँलाई परमेश्‍वरको आत्माले छुनुभएको छ, र तेरो हृदय पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरतर्फ फर्केको छ, अनि तैँले परमेश्‍वरलाई यसो भन्दै प्रार्थना गर्नेछस्: “हे परमेश्‍वर! हामीलाई तपाईंले अघिबाटै निर्धारित गर्नुभएको र चुन्‍नुभएको छ। तपाईंको महिमाले मलाई गर्व गराउँछ, र तपाईंका प्रजामध्ये एक बन्‍न पाउँदा मलाई गौरवको आभास हुन्छ। म तपाईंको इच्‍छा पुरा गर्नको निम्ति सबै थोक खर्चनेछु र सबै थोक दिनेछु, र मेरा सबै वर्षहरू, र सम्पूर्ण जीवनभरिको प्रयास तपाईंप्रति नै समर्पित गर्नेछु।” जब तँ यसरी प्रार्थना गर्छस्, तेरो हृदयमा परमेश्‍वरप्रति कहिल्यै नटुङ्गिने प्रेम र साँचो आज्ञापालन हुनेछ। के तैँले कहिल्यै यस्तो अनुभव गरेको छस्? यदि मानिसहरू धेरै पटक परमेश्‍वरका आत्माद्वारा छोइएका छन् भने, तिनीहरू आफ्‍ना प्रार्थनामा आफैलाई विशेष रूपमा परमेश्‍वरमा समर्पित गर्न इच्‍छुक हुन्छन्: “हे परमेश्‍वर! म तपाईंको महिमाको दिनलाई हेर्न चाहन्छु, र म तपाईंकै लागि जिउन चाहन्छु—तपाईंको लागि जिउनु जत्तिको योग्य वा अर्थपूर्ण कुरा केही पनि छैन, र शैतान र देहको लागि जिउने थोरै इच्‍छा समेत मसँग छैन। आज तपाईंको लागि जिउने तुल्याउँदै तपाईंले मलाई उठाउनुभयो।” जब तैँले यसरी प्रार्थना गरेको हुन्छस्, तँ परमेश्‍वरलाई तेरो हृदय नदिइ बस्‍न सक्दैनस्, तैँले परमेश्‍वरलाई प्राप्त गर्नैपर्छ, र तँ जीवित हुँदा परमेश्‍वरलाई प्राप्त नगरिकन मर्न परे तँ त्यसलाई घृणा गर्नेथिइस् भन्‍ने तँलाई लाग्‍नेछ। त्यस्तो प्रार्थना गरिसकेपछि, तँभित्र असीम सामर्थ्य हुनेछ, र यो कहाँबाट आउँछ सो तँलाई थाहा हुनेछैन; तेरो हृदयमा असीमित शक्ति हुनेछ, र परमेश्‍वर अत्यन्तै प्रेमिलो हुनुहुन्छ, र उहाँ प्रेम गर्न योग्य हुनुहुन्छ भन्‍ने तैँले अनुभूति गर्नेछस्। यही बेला तँ परमेश्‍वरद्वारा छोइएको हुनेछस्। यस्तो अनुभव प्राप्त गरेका सबैलाई परमेश्‍वरले छुनुभएको हुन्छ। परमेश्‍वरद्वारा धेरै पटक छोइएकाहरूका हकमा, तिनीहरूको जीवनमा परिवर्तनहरू आउँछन्, तिनीहरू संकल्प गर्न सक्छन् र परमेश्‍वरलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्न इच्‍छुक हुन्छन्, तिनीहरूको हृदयमा परमेश्‍वरप्रतिको प्रेम अझै दह्रिलो हुन्छ, तिनीहरूको हृदय परमेश्‍वरमा पूर्ण रूपले फर्केका हुन्छन्, तिनीहरूलाई परिवार, संसार, जाल-झेल, वा तिनीहरूको भविष्यको कुनै ख्याल हुँदैन, र तिनीहरू आफ्‍नो जीवनभरिको प्रयास परमेश्‍वरमा समर्पित गर्न इच्‍छुक हुन्छन्। परमेश्‍वरका आत्माले छोइएकाहरू सबै सत्यताको पछि लाग्‍ने, र परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध तुल्याउने आशा भएका मानिसहरू हुन्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९७
परमेश्‍वरलाई पछ्याउनुको प्रमुख महत्त्व भनेको सबै कुरा परमेश्‍वरको आजको वचन अनुसार नै हुनुपर्छ भन्‍ने नै हो: चाहे तैँले जीवनमा प्रवेशको खोजी गरिरहेको होस् वा परमेश्‍वरको इच्‍छाको पूर्णता नै, सबै कुरा परमेश्‍वरको आजको वचन वरिपरि नै केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि तेरो कुराकानी र खोजी परमेश्‍वरको आजको वचनहरू वरिपरि केन्द्रित छैनन् भने, तँ परमेश्‍वरको वचनको लागि अपरिचित छस्, र तँमा पवित्र आत्‍माको कार्यको पूर्ण अभाव छ। परमेश्‍वरले चाहनुभएको कुरा भनेको उहाँका पाइलाहरूलाई पछ्याउने मानिसहरू नै हुन्। तैँले पहिले बुझेको कुरा जति सुन्दर र शुद्ध भए तापनि, परमेश्‍वरले यो चाहनुहुन्‍न, र तैँले यस्ता कुराहरूलाई पन्छ्याउन सक्दैनस् भने, भविष्यमा तेरो प्रवेशमा निकै ठूलो वाधा हुनेछ। पवित्र आत्‍माको वर्तमान ज्योतिलाई पछ्याउन सक्‍नेहरू सबै आशिषित छन्। विगतका युगका मानिसहरूले पनि परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई पछ्याए, तैपनि तिनीहरूले आजको दिनसम्‍म पछ्याउन सकेनन्; आखिरी दिनहरूका मानिसहरूको आशिष्‌ यही नै हो। पवित्र आत्‍माको वर्तमान कार्यलाई पछ्याउन सक्‍ने, र उहाँले तिनीहरूलाई जता डोर्याउनुभए पनि परमेश्‍वरलाई नै पछ्याउने गरी परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउन सक्‍नेहरू—यिनीहरू परमेश्‍वरद्वारा आशिषित मानिसहरू हुन्। पवित्र आत्माको वर्तमान कार्यलाई नपछ्याउनेहरू, परमेश्‍वरका वचनहरूको कार्यमा प्रवेश गरेका हुँदैनन्, र तिनीहरूले जति नै धेरै काम गरे तापनि, वा तिनीहरूको कष्ट-भोग जति नै ठूलो भए तापनि, वा तिनीहरूले जति नै धेरै दौडधूप गरे पनि, यीमध्ये कुनै पनि कुरा परमेश्‍वरको लागि कुनै अर्थको हुँदैन, र उहाँले तिनीहरूलाई स्याबासी दिनुहुनेछैन। आज, परमेश्‍वरको वर्तमान वचनहरूलाई पछ्याउनेहरू पवित्र आत्माको प्रवाहमा हुन्छन्; परमेश्‍वरको आजको वचनप्रति अपरिचित हुनेहरू पवित्र आत्माको प्रवाहभन्दा बाहिर हुन्छन्, र त्यस्ता मानिसहरूलाई परमेश्‍वरले स्याबासी दिनुहुन्‍न। पवित्र आत्माको वर्तमान वाणीहरूबाट अलग रहेको सेवा देहको, र धारणाहरूको सेवा हो, र यो परमेश्‍वरको इच्‍छा अनुसार हुनु असम्‍भव छ। यदि मानिसहरू धार्मिक धारणाहरूका बीचमा जिउँछन् भने, तिनीहरूले परमेश्‍वरको इच्‍छाको निम्ति उपयुक्त केही पनि गर्न सक्दैनन्, र तिनीहरूले परमेश्‍वरको सेवा गरे तापनि, तिनीहरूले तिनीहरूका कल्‍पना र धारणाहरूका बीचमा सेवा गर्छन्, अनि परमेश्‍वरको इच्‍छा अनुसार सेवा गर्न तिनीहरू पूर्ण रूपमा असमर्थ हुन्छन्। पवित्र आत्माको कामलाई पछ्याउन नसक्‍नेहरूले परमेश्‍वरको इच्‍छालाई बुझ्‍दैनन्, र परमेश्‍वरको इच्‍छालाई नबुझ्‍नेहरूले परमेश्‍वरको सेवा गर्न सक्दैनन्। परमेश्‍वरले उहाँको आफ्‍नै हृदय अनुसारको सेवा चाहनुहुन्छ; उहाँले धारणाहरू र देहको सेवा चाहनुहुन्‍न। यदि मानिसहरूले पवित्र आत्माको कार्यका चरणहरूलाई पछ्याउन सक्दैनन् भने, तिनीहरू धारणाहरूका बीचमा जिउँछन्। त्यस्ता मानिसहरूको सेवाले बिथोल्छ र वाधा दिन्छ, अनि त्यस्तो सेवा परमेश्‍वरको विपरीत हुन्छ। त्यसकारण परमेश्‍वरका पाइलाहरू पछ्याउन नसक्‍नेहरूले परमेश्‍वरको सेवा गर्न सक्दैनन्; परमेश्‍वरका पाइलाहरूलाई पछ्याउन नसक्‍नेहरूले अवश्य नै परमेश्‍वरको विरोध गर्छन्, र तिनीहरू परमेश्‍वरको अनुरूप हुन सक्दैनन्। “पवित्र आत्माको कार्यलाई पछ्याउनु” को अर्थ आजको परमेश्‍वरको इच्‍छालाई बुझ्‍नु, परमेश्‍वरका वर्तमान मापदण्डहरू अनुसार काम गर्न सक्‍नु, आजको परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न र उहाँलाई पछ्याउन, र परमेश्‍वरका सबैभन्दा नयाँ वाणीहरू अनुसार प्रवेश गर्न सक्‍नु भन्‍ने हुन्छ। पवित्र आत्‍माको कार्यलाई पछ्याउने र पवित्र आत्माको प्रवाहमा रहने व्यक्ति यही मात्रै हो। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्‍वरको प्रशंसा प्राप्त गर्न र परमेश्‍वरलाई देख्‍न सक्ने मात्रैहोइनन्, तर परमेश्‍वरको हालैको कामबाट परमेश्‍वरको स्वभावलाई जान्‍न सक्छन्, र उहाँको हालैको कामबाट मानिसका धारणाहरू र अनाज्ञाकारीतालाई, अनि मानिसको स्वभावर सारलाई जान्‍न सक्छन्; यसको साथै, तिनीहरूको सेवाको अवधिमा तिनीहरूले आफ्‍नो स्वभावमा क्रमिक रूपमा परिवर्तन हासिल गर्न सक्छन्। यस्ता मानिसहरू मात्रै परमेश्‍वरलाई प्राप्त गर्न सक्‍ने, र साँचो मार्गलाई यथार्थ रूपमा पाएका मानिसहरू हुन्। पवित्र आत्‍माको कामद्वारा हटाइएकाहरू परमेश्‍वरको हालैको कामलाई पछ्याउन नसक्‍ने, र परमेश्‍वरको हालैको कामको विरुद्ध विद्रोह गर्ने मानिसहरू हुन्। त्यस्ता मानिसहरूले परमेश्‍वरलाई खुल्‍लमखुल्‍ला विरोध गर्नुको कारण, परमेश्‍वरले नयाँ काम गर्नुभएकोले, र परमेश्‍वरको स्वरूप तिनीहरूको धारणामा भएको जस्तो नभएकोले हो—यसको परिणाम स्वरूप, तिनीहरूले खुल्‍लमखुल्‍ला परमेश्‍वरको विरोध गर्छन्, र परमेश्‍वरको न्याय गर्छन्, जसले गर्दा परमेश्‍वरले तिनीहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ र इन्कार गर्नुहुन्छ। परमेश्‍वरको हालैको कामको ज्ञान प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो बिषय छैन, तर यदि मानिसहरूमा परमेश्‍वरको कामलाई पालना गर्ने र परमेश्‍वरको कामको खोजी गर्ने मन छ भने, तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई देख्‍ने मौका पाउनेछन्, र तिनीहरूले पवित्र आत्‍माको सबैभन्दा नयाँ अगुवाइलाई प्राप्त गर्ने मौका पाउनेछन्। परमेश्‍वरको कामलाई जानी-जानी विरोध गर्नेहरूले पवित्र आत्‍माको अन्तर्दृष्टि वा परमेश्‍वरको अगुवाइ प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण, मानिसहरूले परमेश्‍वरको हालैको काम प्राप्त गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्‍ने कुरा परमेश्‍वरको अनुग्रहमा निर्भर हुन्छ, यो तिनीहरूको खोजीमा निर्भर हुन्छ, र यो तिनीहरूका अभिप्रायहरूमा निर्भर हुन्छ।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९८
पवित्र आत्माका वर्तमान वाणीहरूलाई पालन गर्न सक्‍नेहरू सबै आशिषितहरू हुन्। तिनीहरू पहिले जस्तो हुने गरेको भए तापनि, वा पवित्र आत्माले तिनीहरूमा जसरी काम गर्ने गर्नुभएको भए तापनि—परमेश्‍वरको हालैको कार्यलाई प्राप्त गर्नेहरू नै सबैभन्दा आशिषितहरू हुन्, र आज हालैको कामलाई पछ्याउन नसक्‍नेहरूलाई हटाइन्छन्। परमेश्‍वर नयाँ ज्योति स्वीकार गर्न सक्‍नेहरूलाई नै चाहनुहुन्छ, र उहाँले उहाँको हालैको कामलाई स्वीकार गर्ने र चिन्‍नेहरूलाई चाहनुहुन्छ। तँ विशुद्ध कन्या हुनुपर्छ भनेर किन भनिन्छ? विशुद्ध कन्याले पवित्र आत्‍माको कार्यलाई खोज्न र नयाँ कुराहरूलाई बुझ्‍न सक्छ, यति मात्र होइन, उसले पुराना धारणाहरूलाई पन्छ्याएर, आजको परमेश्‍वरको कामलाई पालना गर्न सक्‍छ। आजको सबैभन्दा नयाँ कार्यलाई स्वीकार गर्ने मानिसहरूको यो समूहलाई युगौं-युग पहिले नै परमेश्‍वरले अघिबाटै निर्धारित गर्नुभएको थियो, र तिनीहरू सबैभन्दा आशिषित मानिसहरू हुन्। तिमीहरूले परमेश्‍वरको आवाज प्रत्यक्ष रूपमै सुन्छौ, र परमेश्‍वर देखा पर्ने घटनालाई देख्छौ, र त्यसकारण, स्वर्ग र पृथ्वीभरि, र युगौँ-युगभरि नै, तिमीहरू, मानिसहरूको यो समूहभन्दा बढी कोही पनि आशिषित भएको छैन। यो सबै नै परमेश्‍वरको कार्यले गर्दा, परमेश्‍वरले अघिबाटै निर्धारित गर्नुभएको र चुन्‍नुभएकोले गर्दा, अनि परमेश्‍वरको अनुग्रहले गर्दा नै हो; यदि परमेश्‍वरले आफ्‍ना वचनहरू नबोल्‍नुभएको भए र वाणी नभन्नु भएको भए, के तिमीहरूका अवस्थाहरू आजको जस्तो हुन सक्थ्यो र? तसर्थ, सारा महिमा र प्रशंसा परमेश्‍वरलाई नै होस्, किनभने परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई उठाउनुहुने भएकोले नै यो सबै भएको हो। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै, के तँ अझै पनि निष्क्रिय हुन सक्छस्? के तेरो सामर्थ्य अझै पनि माथि उठ्न सक्दैन?
तैँले परमेश्‍वरका वचनहरूको न्याय, सजाय, प्रहार, र शोधनलाई स्वीकार गर्न सक्छस्, यसको साथै तँ परमेश्‍वरका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्न सक्छस् भन्‍ने कुरा युगौं-युग पहिले नै परमेश्‍वरले अघिबाटै निर्धारित गर्नुभएको थियो, तसर्थ तँलाई सजाय दिइँदा तँ हैरान हुनुहुँदैन। तिमीहरूमा गरिएको काम, र तिमीहरूलाई दिइएका आशिषहरूलाई कसैले पनि खोस्‍न सक्दैन, अनि तिमीहरूलाई दिइएका सबै कुराहरू कसैले पनि खोसेर लैजान सक्दैन। धर्मका मानिसहरूलाई तिमीहरूसँग तुलना गर्न सकिँदैन। तिमीहरूमा बाइबल सम्‍बन्धी विशेषज्ञता छैन, र तिमीहरू धार्मिक सिद्धान्तद्वारा सुसज्‍जित छैनौ, तर परमेश्‍वरले तिमीहरूभित्र काम गर्नुभएको हुनाले, तिमीहरूले युगौं-युगको अवधिका अरू कसैले भन्दा बढी प्राप्त गरेका छौ—त्यसकारण यो तिमीहरूको सबैभन्दा ठूलो आशिष्‌ हो। यही कारणले गर्दा, तिमीहरू परमेश्‍वरप्रति अझै समर्पित हुनुपर्छ, र परमेश्‍वरप्रति अझै निष्ठावान हुनुपर्छ। परमेश्‍वरले तँलाई माथि उठाउनुहुने भएकोले, तैँले आफ्‍नो प्रयासहरूलाई जोड दिनुपर्छ, र परमेश्‍वरको आज्ञालाई स्वीकार गर्नको लागि तेरो कदलाई तयार गर्नुपर्छ। परमेश्‍वरले तँलाई दिनुभएको स्थानमा तँ दह्रिलो गरी खडा हुनैपर्छ, परमेश्‍वरका मानिसहरूमध्ये एक बन्‍न तँ लागी पर्नुपर्छ, राज्यको तालिमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिनुपर्छ र आखिरमा परमेश्‍वरको महिमित गवाही बन्‍नुपर्छ। के तँमा यी संकल्‍पहरू छन्? यदि तँमा यस्ता संकल्‍पहरू छन् भने, आखिरमा तँलाई अवश्य नै परमेश्‍वरले प्राप्त गर्नुहुनेछ, र तँ परमेश्‍वरको महिमित गवाही बन्‍नेछस्। मुख्य आज्ञा भनेको परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिनु र परमेश्‍वरको महिमित गवाही बन्‍नु नै हो भन्‍ने कुरालाई तैँले बुझ्‍नुपर्छ। परमेश्‍वरको इच्‍छा यही नै हो।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ३९९
पवित्र आत्माको आजका वचनहरू पवित्र आत्माका कार्यका गतिशीलताहरू हुन्, र यो अवधिमा पवित्र आत्माले मानिसलाई निरन्तर अन्तर्दृष्टि दिनु नै पवित्र आत्माको कामको प्रवृत्ति हो। र आज पवित्र आत्माको कामको प्रवृत्ति के हो? यो परमेश्‍वरको आजको काममा, र सामान्य आत्मिक जीवनमा मानिसहरूको नेतृत्व गर्नु हो। सामान्य आत्मिक जीवनमा गरिने प्रवेशका धेरै चरणहरू छन्:
१. पहिलो, तैँले आफ्‍नो हृदयलाई परमेश्‍वरको वचनमा खन्याउनैपर्छ। तैँले विगतको परमेश्‍वरको वचनलाई पछ्याउनुहुँदैन, र तिनलाई अध्ययन गर्नुहुँदैन, न त तिनलाई आजको वचनहरूसँग नै तुलना गर्नुहुन्छ। बरु, तैँले आफ्‍नो हृदयलाई पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरको वर्तमान वचनमा लगाउनुपर्छ। यदि अझै पनि विगतका परमेश्‍वरको वचन, आत्मिक पुस्तकहरू, वा अरू प्रचारका विवरणहरूलाई पढ्न चाहने, र आजको पवित्र आत्माको वचनलाई नपछ्याउने मानिसहरू छन् भने, तिनीहरू सबैभन्दा मूर्ख मानिसहरू हुन्; परमेश्‍वरले त्यस्ता मानिसहरूलाई तिरस्कार गर्नुहुन्छ। यदि तँ आजको पवित्र आत्माको ज्योतिलाई स्वीकार गर्न इच्‍छुक छस् भने, परमेश्‍वरको आजका वाणीहरूमा आफ्‍नो हृदयलाई पूर्ण रूपमा खन्याऊ। तैँले हासिल गर्नुपर्ने पहिलो कुरा यही नै हो।
२. तैँले आजको परमेश्‍वरले बोल्‍नुभएका वचनहरूको जगमा प्रार्थना गर्नैपर्छ, तँ परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गरेर परमेश्‍वरसँग कुराकानी गर्नैपर्छ, र तैँले पछ्याउन चाहने उपलब्धिको लागि मापदण्डहरू स्थापित गर्दै परमेश्‍वरको अघि तैँले आफ्‍ना संकल्पहरू गर्नैपर्छ।
३. तैँले पवित्र आत्‍माको आजको कामको जगमा सत्यताको गहन प्रवेशको खोजी गर्नुपर्छ। विगतका म्याद सकिएका वाणीहरू र सिद्धान्तहरूलाई पक्री नराख्।
४. तैँले पवित्र आत्‍माद्वारा छोइने र परमेश्‍वरका वचनहरूमा प्रवेश गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।
५. तँ आज पवित्र आत्‍माले हिँड्नुभएको मार्गमा प्रवेश गर्न लागि पर्नुपर्छ।
अनि तँ कसरी पवित्र आत्‍माद्वारा छोइनलाई खोजी गर्छस्? महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको परमेश्‍वरका वर्तमान वचनहरूमा जिउनु, र परमेश्‍वरका मापदण्डहरूको जगमा रही प्रार्थना गर्नु हो। यसरी प्रार्थना गरिसकेपछि, पवित्र आत्‍माले तँलाई अवश्य नै छुनुहुन्छ। यदि तँ आज परमेश्‍वरले बोल्‍नुभएका वचनहरूको जगमा रही खोजी गर्दैनस् भने, यो व्यर्थ हुन्छ। तैँले यसो भन्दै प्रार्थना गर्नुपर्छ: “हे परमेश्‍वर! म तपाईंको विरोध गर्छु, र म तपाईंको धेरै ऋणी छु; म धेरै अनाज्ञाकारी छु, र म कहिल्यै पनि तपाईंलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सक्दिनँ। हे परमेश्‍वर, तपाईंले मलाई मुक्ति दिनुभएको होस् भन्‍ने मेरो कामना छ, म तपाईंलाई अन्त्यसम्‍मै सेवा दिन चाहन्छु, म तपाईंकोनिम्ति मर्न चाहन्छु। तपाईंले मलाई न्याय गर्नुहोस् र मलाई सजाय दिनुहोस्, अनि मसँग कुनै गुनासो छैन; म तपाईंको विरोध गर्छु र म मर्न योग्य छु, ताकि मेरो मृत्युमा सबै मानिसहरूले तपाईंको धर्मी स्वभावलाई देख्‍न सकून्।” जब तँ हृदयबाटै यसरी प्रार्थना गर्छस्, परमेश्‍वरले तँलाई सुन्‍नुहुनेछ र तँलाई अगुवाइ गर्नुहुनेछ; यदि तँ पवित्र आत्माको आजका वचनहरूको जगमा रही प्रार्थना गर्दैनस् भने, पवित्र आत्माले तँलाई छुनुहुन्छ भन्‍ने कुराको कुनै सम्‍भावना हुँदैन। यदि तँ परमेश्‍वरको इच्‍छा अनुसार, र आज परमेश्‍वरले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार प्रार्थना गर्छस् भने, तैँले यसो भन्‍नेछस्: “हे परमेश्‍वर! म तपाईंका आज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्न र तपाईंका आज्ञाहरूप्रति विश्‍वासयोग्य हुन चाहन्छु, अनि म मेरो सम्पूर्ण जीवन नै तपाईंकै महिमामा अर्पण गर्न इच्‍छुक छु, ताकि मैले गर्ने सबै कुरा परमेश्‍वरका मानिसहरूका मापदण्डहरूसम्‍म पुग्‍न सकून्। मेरो हृदय तपाईंद्वारा छोइएको होस्। तपाईंको आत्माले मलाई सधैँ अन्तर्दृष्टि दिनुभएको होस्, मैले गर्ने सबै कुराले शैतानलाई शर्ममा पारोस्, आखिरमा मलाई तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको होस् भन्‍ने मेरो कामना छ।” यदि तँ यसरी, परमेश्‍वरको इच्‍छावरिपरि केन्द्रित भई प्रार्थना गर्छस् भने, पवित्र आत्माले अपरिहार्य रूपमै तँमा काम गर्नुहुनेछ। तेरो प्रार्थनाका शब्‍दहरू कति धेरै छन् त्यसले केही फरक पार्दैन—तैँले परमेश्‍वरको इच्‍छालाई बुझ्छस् कि बुझ्दैनस्, मुख्य कुरा त्यही हो। तिमीहरू सबैले सायद निम्‍न अनुभव प्राप्त गरेका छौ: भेलामा प्रार्थना गरिरहेको बेला कहिलेकहीँ पवित्र आत्‍माको कार्यका गतिशीलताहरू तिनको चरम अवस्थामा पुग्छन् र त्यसले सबैको सामर्थ्यलाई माथि उठाउँछ। कतिपय मानिसहरू प्रार्थना गर्दा-गर्दै परमेश्‍वरको अघि पछुतोले भरिएर नराम्ररी रुन्छन् अनि रोएर बरर आँसु झार्छन्, र कतिपय मानिसहरू तिनीहरूका सङ्कल्प देखाउछन् र भाकल गर्छन्। पवित्र आत्माको कामले हासिल गर्नुपर्ने प्रभाव त्यस्तै हो। आज, सबै मानिसहरूले परमेश्‍वरको वचनमा आफ्‍नो हृदय पूर्ण रूपमा खन्याउनुमहत्त्वपूर्ण छ। पहिले बोलिएका वचनहरूमा ध्यान नदे; पहिले जे आएको थियो त्यसलाई नै तँ अझै पक्रिरहन्छस् भने, पवित्र आत्‍माले तँभित्र काम गर्नुहुनेछैन। के तँ यो कति महत्त्वपूर्ण छ भन्‍ने देख्छस्?
के तँ आज पवित्र आत्‍माले हिँड्नुभएको मार्ग चिन्छस्? माथि उल्‍लेख गरिएका विभिन्‍न बुँदाहरू पवित्र आत्माले आज र भविष्यमा पूरा गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्; ती पवित्र आत्माले लिनुभएको मार्ग हो, र मानिसले पछ्याउनुपर्ने प्रवेश हो। जीवनमा हुने तेरो प्रवेशमा, तैँले कम्तीमा पनि तेरो हृदयलाई परमेश्‍वरका वचनहरूमा खन्याउनुपर्छ, र परमेश्‍वरका वचनहरूको न्याय र सजायलाई स्वीकार गर्न सक्‍नुपर्छ; तेरो हृदय परमेश्‍वरको लागि तृषित हुनैपर्छ, तैँले सत्यताको गहन प्रवेश, र परमेश्‍वरले तोक्‍नुभएका उद्देश्यहरूलाई खोजी गर्नुपर्छ। जब तँमा यस्तो सामर्थ्य हुन्छ, यसले तँलाई परमेश्‍वरले छुनुभएको छ, र तेरो हृदय परमेश्‍वरतर्फ फर्कन थालेको छ भन्‍ने देखाउँछ।
जीवनमा प्रवेश गर्ने कार्यको पहिलो चरण भनेको तेरो हृदयलाई पूर्ण रूपमा परमेश्‍वरका वचनहरूमा खन्याउनुहो, र दोस्रो चरण बनेको पवित्र आत्‍माको छुवाइलाई स्वीकार गर्नु हो। पवित्र आत्माको छुवाइलाई स्वीकार गरेर के प्रभाव हासिल गरिन्छ? यो अझै गहन सत्यताको तृष्णा गर्न, त्यसको खोजी गर्न, र अन्वेषण गर्न सक्‍नु, र सकारात्मक तरिकाले परमेश्‍वरसँग सहकार्य गर्न सक्‍नु हो। आज, तँ परमेश्‍वरसँग सहकार्य गर्छस्, भन्‍नुको अर्थ, तेरो खोजी, तेरा प्रार्थनाहरू, र परमेश्‍वरका वचनहरूसँगको तेरो सहभागिताको उद्देश्य छ, र तैँले तेरो कर्तव्य परमेश्‍वरका मापदण्डहरू अनुसार पूरा गर्छस्—परमेश्‍वरसँग सहकार्य गर्नु भनेको यही मात्रै हो। यदि तँ परमेश्‍वरलाई काम गर्न दिने बारेमा मात्रै बोल्छस्, तर प्रार्थना गर्ने न खोजी गर्ने गर्नु त कता हो कता तैँले कुनै काम समेत गर्दैनस् भने, के यसलाई सहकार्य भन्‍न सकिन्छ र? यदि तँमा सहकार्यको कुनै छाप नै छैन, र तँमा उद्देश्य सहितको प्रवेशको तालिमको अभाव छ भने, तैँले सहकार्य गरिरहेको छैनस्। कतिपय मानिसहरूले यसो भन्छन्: “सबै कुरा परमेश्‍वरले गर्नुभएको पूर्वनिर्धारणमा नै निर्भर हुन्छ, यो सबै परमेश्‍वर स्वयमले गर्नुहुन्छ; यदि यो परमेश्‍वरले गर्नुभएको होइन भने, मानिसले कसरी गर्न सक्थ्यो र?” परमेश्‍वरको कार्य सामान्य छ, र अलिकति पनि अलौकिक छैन, र तेरो सक्रिय खोजीद्वारा मात्रै पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ, किनभने परमेश्‍वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्‍न—तैँले परमेश्‍वरलाई काम गर्ने अवसर दिनैपर्छ, र यदि तँ खोजी वा प्रवेश गर्दैनस् भने, र तेरो हृदयमा अलिकति पनि तृष्णा छैन भने, परमेश्‍वरसँग काम गर्ने कुनै मौका हुँदैन। परमेश्‍वरद्वारा छोइनको लागि तँ कुन मार्गको खोजी गर्छस्? प्रार्थनाद्वारा, र परमेश्‍वरको नजिक आएर। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो परमेश्‍वरले बोल्‍नुभएका वचनहरूको जगमा नै हुनुपर्छ भन्‍ने याद गर्। जब तँ धेरै पटक परमेश्‍वरद्वारा स्पर्शित हुन्छन्, तँ देहको दासत्वमा परेको हुँदैनस्: पति, पत्‍नी, छोराछोरी, र रुपियाँपैसा—ती सबैले तँलाई बन्धनमा पार्न सक्दैनन्, र तँ सत्यताको पछि लाग्‍न र परमेश्‍वरको अघि जिउन मात्रै चाहन्छस्। यस पटक, तँ स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा जिउने व्यक्ति बन्‍नेछस्।
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४००
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “राज्यको युग नै वचनको युग हो” बाट उद्धृत गरिएको
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४०१
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४०२
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४०३
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४०४
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू अंश ४०५
मैले अघिबाटै भनेको छु, “चिन्‍हहरू र अचम्‍मका कामहरू हेर्नमा मात्र ध्यान दिनेहरू सबैलाई त्यागिनेछ; तिनीहरू ती होइनन्, जसलाई सिद्ध बनाइनेछ।” मैले धेरै वचनहरू बोलेको छु, तापनि मानिसमा यो कामको थोरै ज्ञान पनि छैन, अनि, यस विन्दुमा पुगिसकेपछि पनि मानिसहरू अझै चिह्नहरू र अचम्‍मका कामहरूको खोजी गर्छन्। के परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वास चिह्नहरू र अचम्‍मका कामहरू खोज्नु बाहेक अरू केही होइन वा के त्यो जीवन प्राप्त गर्नका निम्ति मात्र हो? येशूले पनि धेरै वचनहरू बोल्नुभयो, र तीमध्ये केही अझै पूरा हुनु बाँकी नै छ। के तँ येशू परमेश्‍वर हुनुहु्न्न भनेर भन्न सक्छस्? परमेश्‍वरले उहाँ ख्रीष्ट र परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनी साक्षी दिनुभयो। के तँ यो कुरालाई इन्कार गर्न सक्छस्? आज, परमेश्‍वरले वचनहरू मात्र बोल्नुहुन्छ, र यदि तैँले यसलाई पूर्ण रूपमा जानेनस् भने तँ दृढ भई खडा हुन सक्दैनस्। तँ उहाँ परमेश्‍वर हुनुभएकोले उहाँमा विश्‍वास गर्छस् कि उहाँका वचनहरू पूरा भएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको आधारमा उहाँमा विश्‍वास गर्छस्? तँ चिह्न र अचम्‍मका कामहरूमा विश्‍वास गर्छस् कि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छस्? आज, उहाँले चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू देख्नाउनुहुन्न—के उहाँ साँच्चै परमेश्‍वर नै हुनुहुन्छ? यदि उहाँले बोल्नुहुने वचनहरू पूरा हुँदैनन् भने, के उहाँ साँच्चै परमेश्‍वर हुनुहुन्छ? के परमेश्‍वरको अस्तित्व उहाँले बोल्नुभएका वचनहरू पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुराद्वारा निर्धारित हुन्छ? किन केही मानिसहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुभन्दा अघि उहाँका वचनहरू पूरा होस् भनी सँधै पर्खिरहन्छन्? के यसको अर्थ तिनीहरूले उहाँलाई चिन्दैनन् भन्ने हुँदैन र? यस्ता धारणा भएकाहरू सबै ती हुन् जसले परमेश्‍वरलाई इन्कार गर्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरलाई नाप्न आफ्ना धारणाहरू प्रयोग गर्छन्; यदि परमेश्‍वरका वचनहरू पूरा भए भने तिनीहरूले उहाँमा विश्‍वास गर्छन्, यदि पूरा भएनन् भने तिनीहरूले उहाँमा विश्‍वास गर्दैनन्; अनि तिनीहरूले सधैँ चिह्नहरू र अचम्‍मका कामहरूको खोजी गर्छन्। के यी मानिसहरू आधुनिक समयका फरिसीहरू होइनन् र? तँ दृढसँग खडा हुन सक्छस् कि सक्दैनस् भन्ने कुरा तैँले वास्तविक परमेश्‍वरलाई चिनेको छस् कि छैनस् त्यस कुरामा भर पर्छ—यो महत्त्वपूर्ण छ! तँ परमेश्‍वरको वचनको वास्तविकता जति ठूलो हुन्छ, परमेश्‍वरको वास्तविकता सम्‍बन्धी तेरो ज्ञान पनि त्यत्ति नै ठूलो हुन्छ, र तँ परीक्षाहरूको समयमा त्यति नै दृढ रूपमा खडा हुन सक्छस्? तैँले चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू देख्ने कुरामा जति धेरै ध्यान दिन्छस्, तँ त्यत्ति नै कम रूपमा दृढ रूपमा खडा हुन सक्छस्, र तँ परीक्षाहरूको बीचमा पर्छस्। चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू जग होइनन्; परमेश्‍वरको वास्तविकता मात्र जीवन हो। केही मानिसहरूलाई परमेश्‍वरको कामले प्राप्त गर्नुपर्ने प्रभावहरूको बारेमा थाहा हुँदैन। तिनीहरू आफ्ना दिनहरू अलमल्लमा पर्दै बिताउँछन्, परमेश्‍वरको कामको ज्ञानको खोजी गर्दैनन्। तिनीहरूका खोजको लक्ष्य परमेश्‍वरलाई तिनीहरूका चाहनाहरू पूरा गर्न लगाउनु मात्र हुन्छ, तब मात्र तिनीहरू आफ्नो विश्‍वासमा गम्भीर बन्नेछन्। तिनीहरू भन्छन्, यदि परमेश्‍वरका वचनहरू पूरा भए भने तिनीहरू जीवनको पछि लाग्छन्, तर यदि उहाँका वचनहरू पूरा भएनन् भने, तिनीहरूले जीवनको खोजी गर्ने कुनै सम्भावना हुँदैन। मानिसहरू सोच्छन्, कि परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू हेर्ने र स्वर्गमा अनि तेस्रो स्वर्गमा चढ्ने खोजीमा लाग्नु हो। कसैले पनि यो भन्दैन, कि परमेश्‍वरमाथिको तिनीहरूको विश्‍वास वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने खोजी हो, जीवनको खोजी हो, र परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिने कार्यको खोजी हो। यस्तो खोजीको के मूल्य हुन्छ र? जस-जसले परमेश्‍वरको ज्ञानको र उहाँको सन्तुष्टिको खोजी गर्दैनन् तिनीहरू परमेश्‍वरमा विश्‍वास नगर्नेहरू हुन्; तिनीहरू परमेश्‍वरको निन्दा गर्नेहरू हुन्।
परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास भनेको के हो भनी अब तिमीहरूले बुझ्छौ? के परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुको अर्थ चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू हेर्नु हो? के यसको अर्थ स्वर्गमा उक्लिनु हो? परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु अलिकति पनि सजिलो हुँदैन। ती धार्मिक अभ्यासहरूलाई शुद्ध पारिनुपर्छ; बिरामीको चङ्गाइ र भूतात्माहरू निकाल्‍ने कार्यको पछि लाग्नु, चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू ध्यान लगाउनु, परमेश्‍वरबाट अझ बढी अनुग्रह, शान्ति र आनन्द पाउने लालसा गर्नु, देहको सफलताहरू र आराम-सुविधाको पछि लाग्नु—यी सबै धार्मिक अभ्यासहरू हुन्, अनि यस्ता अभ्यासहरू अस्पष्ट किसिमको विश्‍वास हो। आज परमेश्‍वरमाथिको वास्तविक विश्‍वास भनेको के हो? यो परमेश्‍वरको वचनलाई तेरो जीवन-वास्तविकताको रूपमा स्वीकार गर्नु र परमेश्‍वरबाट साँचो प्रेम हासिल गर्न उहाँलाई उहाँकै वचनबाट चिन्‍नु हो। अझ स्पष्ट रूपमा भन्दा: परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको तैँले उहाँको आज्ञापालन गर्नु, उहाँलाई प्रेम गर्नु र परमेश्‍वरको सृष्टिले गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नको लागि हो। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुको उद्देश्य यही नै हो। तैँले परमेश्‍वरको प्रेमिलोपनको, उहाँ हाम्रो आदरको कति योग्य हुनुहुन्छ, र परमेश्‍वरले उहाँका सृष्टिहरूमा कसरी मुक्तिको काम गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई सिद्ध बनाउनुहुन्छ भन्ने ज्ञान प्राप्त गर्नैपर्छ—यी परमेश्‍वरमाथिको तेरा विश्‍वासका अत्यावश्यक तत्वहरू हुन्। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको मुख्य रूपले देहको जीवनबाट परमेश्‍वरलाई प्रेम गर्ने जीवनमा सर्नु हो; भ्रष्टतामा जिउनुबाट परमेश्‍वरको वचन पालन गर्ने जीवनमा सर्नु हो; यो शैतानको अधिकार-क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर परमेश्‍वरको वास्ता र सुरक्षामा जिउनु हो; यो परमेश्‍वरमा आज्ञाकारी हुन सक्नु र देहको आज्ञाकारी नहुनु हो; यो परमेश्‍वरलाई तेरो सम्पूर्ण हृदय प्राप्त गर्न दिनु हो, जसद्वारा परमेश्‍वरलाई तँलाई सिद्ध बनाउन दिनु हो, र तैँले आफैलाई भ्रष्ट शैतानिक स्वभावबाट मुक्त गर्नु हो। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको विशेष रूपले परमेश्‍वरको शक्ति र महिमा तँमा प्रकट हुन दिनु हो, तैँले परमेश्‍वरको इच्छाको काम गर्नु र उहाँको योजना पूरा गर्नु हो, साथै शैतानको सामु परमेश्‍वरको साक्षी दिन सक्नु हो। परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वास चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू हेर्न चाहने तेरो इच्छामा केन्द्रित हुनुहुँदैन, न त त्यो तेरो व्यक्तिगत देहको निम्ति नै हुनुपर्छ। त्यो परमेश्‍वरलाई चिन्ने, र परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न सक्ने हुन, अनि पत्रुसले झैं मृत्युसम्म उहाँको आज्ञापालन गर्ने विषयमा हुनुपर्छ। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू यिनै हुन्। व्यक्तिले परमेश्‍वरलाई चिन्न र उहाँलाई सन्तुष्ट पार्नका निम्ति परमेश्‍वरको वचन खान्छ र पिउँछ। परमेश्‍वरको वचन खाँदा र पिउँदा त्यसले तँलाई परमेश्‍वरको बारेमा महान् ज्ञान दिन्छ, त्यसपछि मात्र तैँले उहाँको आज्ञापालन गर्न सक्छस्। परमेश्‍वर सम्‍बन्धी ज्ञानद्वारा मात्रै तैँले उहाँलाई प्रेम गर्न सक्छस्, अनि परमेश्‍वरमाथिको मानिसको विश्‍वासमा हुनुपर्ने उद्देश्य यही नै हो। यदि परमेश्‍वरमाथिको तेरो विश्‍वासमा तँ सधैँ चिन्हहरू र अचम्‍मका कामहरू हेर्ने मात्र कोसिस गर्छस् भने, परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासको यो दृष्टिकोण गलत छ। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको मुख्य रूपले परमेश्‍वरको वचनलाई जीवन-वास्तविकताको रूपमा ग्रहण गर्नु हो। परमेश्‍वरको मुखबाट निस्केको वचनलाई अभ्यास गरेर अनि तिनलाई तँ आफैमा लागू गरेर मात्र परमेश्‍वरको उद्देश्य पूरा हुन्छ। परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्दा, मानिसले परमेश्‍वरद्वारा सिद्ध हुने, परमेश्‍वरमा समर्पित हुन सक्‍ने र परमेश्‍वरप्रति पूर्ण आज्ञाकारी हुने कार्यको खोजी गर्नुपर्छ। यदि तैँले कुनै गुनासो नगरी परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न सक्छस्, परमेश्‍वरका इच्छाहरूलाई ध्यानमा राख्छस्, पत्रुसको कद हासिल गर्न सक्छस्, अनि परमेश्‍वरले भन्नुभएको जस्तो पत्रुसको शैली प्राप्त गर्न सक्छस् भने, तब तैँले परमेश्‍वरमाथिको विश्‍वासमा सफलता हासिल गरेको हुनेछ, अनि त्यसले तँ परमेश्‍वरद्वारा प्राप्त गरिएको छस् भन्ने सूचित गर्दछ।
— वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छको “परमेश्‍वरको वचनद्वारा सबै कुरा प्राप्त हुन्छ” बाट उद्धृत गरिएको
अघिल्लो: १०. जीवनमा प्रवेश
अर्को: जीवनमा प्रवेश (२)